စိတ်လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုရှိ dopamine: အကျိုး၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်သတိပေးခြင်း (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ် Dopamine: ဆုချီးဆန္ဒရှိနှင့်သတိပေးနခွေငျး (2010)
အာရုံခံဆဲလျ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC ဒီဇင်ဘာ 9, 2011 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
အာရုံခံဆဲလျ။ ဒီဇင်ဘာ 9, 2010; 68 (5): 815-834 ။
Doi: 10.1016 / j.neuron.2010.11.022
Ethan အက်စ် Bromberg-မာတင်,1 Masayuki Matsumoto,1,2 နှင့် Okihide Hikosaka1
Midbrain dopamine အာရုံခံကောင်းစွာဆုလာဘ်များနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်လှုံ့ဆျောမှု၌မိမိတို့ဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍမှသူတို့ရဲ့အားကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်လူသိများကြပါတယ်။ ဒါဟာ ပို. ပို. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်, သို့သော်, ကြောင်း dopamine အာရုံခံလည်းထိုကဲ့သို့သောဆန္ဒရှိနှင့်သတိပေးနခွေငျးဖြစ်ရပ်များအဖြစ်အဓိကဒါပေမယ့် Non-ကြိုးအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်ပြမှုများကို transmit ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ dopamine ၏ဆုလာဘ်များနှင့် Non-ဆုလာဘ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်အတွက်မကြာသေးမီတိုးတက်လာပြန်လည်သုံးသပ်။ ဒီဒေတာကိုအခြေခံပြီးကျနော်တို့ dopamine အာရုံခံကွဲပြားဦးနှောက်ကွန်ရက်များနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောမျိုးစုံအမျိုးအစားများအတွက်လာနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍရှိသည်တင်ပြသည်။ တချို့က dopamine အာရုံခံရှာ, အကဲဖြတ်နှင့်တန်ဖိုးကိုသင်ယူမှုအဘို့အဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့, စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးဝှက်။ အခြားသူများကို Orient, သိမှတ်ခံစားမှု, နှင့်အထွေထွေလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့, စိတ်ခွန်အားနိုး salience ဝှက်။ dopamine အာရုံခံနှစ်ယောက်စလုံးအမျိုးအစားများအလားအလာအရေးကြီးသောအာရုံခံတွေကိုလျင်မြန်စွာထောက်လှမ်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်တစ်ခုသတိပေးနခွေငျး signal ကိုတို့ကလုပ်ခဲ့ပြီးနေကြသည်။ ကျနော်တို့တန်ဖိုး salience နှင့်သတိပေးနခွေသည်ဤ dopaminergic လမ်းကြောင်းသပ္ပါယ်အပြုအမူကိုထောကျပံ့ဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကြောင်း hypothesize ။
အဆိုပါ neurotransmitter dopamine (DA) စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ် - ကမ်ဘာပျေါတှငျအဘယျသို့သောအရာတို့ကိုသင်ယူခြင်းအတွက်ကောင်းမကောင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရွေးချယ်ရာတွင်လုပ်ရပ်များအတွက်ကောင်းသောအရာရဖို့နဲ့မကောင်းတဲ့အမှုအရာကိုရှောင်ကြဉ်ရန်။ အဆိုပါနှောက် cortex နှင့်အများဆုံး subcortical ဒေသများရှိ DA ၏အဓိကသတင်းရင်းမြစ် substantia nigra ပိုဒျ compacta အ (SNc) နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) (အတွင်းတည်ရှိသော ventral midbrain ၏ DA-releasing အာရုံခံဖြစ်ကြ၏Bjorklund နှင့် Dunnett, 2007) ။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံ '' လုပ်သူများ 'နဲ့' phasic '(နှစ်ခုသည် Modes အတွက် DA transmitတော်ကကျေးဇူး, 1991; ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2007) ။ သူတို့ရဲ့လုပ်သူများ mode မှာ DA အာရုံခံ (အာရုံကြောဆားကစ်၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာအားဖွင့်အဘို့အရေးကွီးကွောငျးကိုမြစ်အောက်ပိုင်းအာရုံကြောအဆောက်အဦများအတွက် DA တစ်တည်ငြိမ်, အခြေခံအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်Schultz, 2007) ။ သူတို့ရဲ့ phasic mode ကို DA အာရုံခံခုနှစ်တွင်သိသိသာသာ (တော်တော်များများစက္ကန့်တည်တံ့မြစ်အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦများအတွက် DA ပြင်းအားအတွက်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေ 100-500 မီလီစက္ကန်ဘို့မိမိတို့ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့Schultz, 1998; Schultz, 2007).
ဤရွေ့ကား phasic DA တုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်-related အာရုံခံတွေကို (များစွာသောအမျိုးအစားများအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်Schultz, 1998) နှင့်ထွက်ရှိသောအားဖြည့်သင်ယူခြင်းအခြေခံတဲ့သင်ကြားမှု signal ကိုအဖြစ်က၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍအပါအဝင်စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ် DA ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြည့်ဆည်းဖို့နေရာယူထားကြသည် (Schultz et al ။ , 1997; ပညာရှိ 2005) နှင့်ရှာကြံချက်ချင်းဆုလာဘ်ကိုအားပေးအားမြှောက်ထားတဲ့မက်လုံးပေး signal ကိုအဖြစ် (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998) ။ ရလဒ်အဖြစ်ဤ phasic DA ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများ cortical နှင့် subcortical ဆားကစ်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအကြောင်းကိုသီအိုရီအတွက်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပြီးပြင်းထန်သောမှ neuroscience သုတေသနများ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ကျနော်တို့ phasic DA ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများ၏သမားရိုးကျသီအိုရီမိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မယ်နဲ့သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝနှင့်အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အပြုအမူကိုကျော်သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုနားလည်အတွက်မကြာသေးမီတိုးတက်လာပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် DA ၏လက်ခံခဲ့သည်အခန်းကဏ္ဍမှမတူဘဲ, Non-ဆုချီးဖြစ်ရပ်များ processing အတွက် phasic DA လှုပ်ရှားမှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုကျော်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငြင်းခုန်ရှိခဲ့သည်။ တချို့ကသီအိုရီ (DA အာရုံခံဆဲလျ phasic တုံ့ပြန်မှုအဓိကအားဆုလာဘ်-related ဖြစ်ရပ်များဝှက်ကြောင်းအကြံပြုSchultz, 1998; Ungless, 2004; Schultz, 2007), အခြားသူများကို DA အာရုံခံ, အံ့သြစရာဝတ္ထု, အဓိက, ပင်ဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံများ (ဆက်စပ်သောအပိုဆောင်း Non-ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကိုထုတ်လွှင့်ကြောင်းအကြံပြုနေစဉ်Redgrave et al ။ , 1999; Horvitz, 2000; di Chiara, 2002; ယောသပ်သည် et al ။ , 2003; Pezze နှင့် Feldon, 2004; Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005; Redgrave နှင့် Gurney, 2006) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ကျနော်တို့ကစမ်းသပ်ဤသီအိုရီကိုထားကြပြီနဲ့ DA အာရုံခံအတွက် Non-ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများ၏သဘောသဘာဝအကြောင်းအများကြီးထင်ရှားပြီဟုလေ့လာမှုတစ်ခုစီးရီးဆှေးနှေးပါမညျ။ အထူးသဖြင့်ဤလေ့လာမှုများ DA အာရုံခံယခင်ကထင်ထက်ပိုမိုကွဲပြားခြားနားဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားသည်။ အဲဒီအစားတစ်ခုတည်းတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစိတ်ခွန်အားနိုး signal ကိုကုဒ်သွင်းခြင်းထက်, DA အာရုံခံကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်အတွက်ဆုလာဘ်များနှင့် Non-ဆုလာဘ်ဖြစ်ရပ်များဝှက်ကြောင်းမျိုးစုံအမျိုးအစားများအတွက်လာ။ ဤသည်တစ်ခုတည်းအာရုံကြောအချက်ပြမှုသို့မဟုတ်စိတ်ခွန်အားနိုးယန္တရားနှင့်အတူ dopamine ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရှာအံ့သောငှါအရာယေဘုယျသီအိုရီများအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်စေ။
ဒီအကြပ်အတည်းကုစားဖို့, ဒီပြန်လည်သုံးသပ်၏နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကျနော်တို့မျိုးစုံ DA အာရုံခံအမျိုးအစားများ, သူတို့ရဲ့အာရုံကြောအချက်ပြ၏သဘောသဘာဝနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ကွဲပြားဦးနှောက်ကွန်ရက်များသို့၎င်းတို့၏ပေါင်းစည်းမှု၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှင်းပြဖို့အသစ်တစ်ခုအယူအဆတင်ပြသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအဆိုပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်။ DA အာရုံခံအန်ကုက်လုပ်တစ်ခုမှာအမျိုးအစား စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုး, အကြိုးဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များအားဖြင့် inhibited ။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံရလဒ်များနှင့်တန်ဖိုးကိုသင်ယူမှုအကဲဖြတ်, ပန်းတိုင်ရှာကြံများအတွက်ဦးနှောက်စနစ်များကိုထောက်ခံပါတယ်။ DA အာရုံခံအန်ကုက်လုပ်၏ဒုတိယအမျိုးအစား စိတ်ခွန်အားနိုး salience, အကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံ Orient, သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး drive ကိုအဘို့အဦးနှောက်စနစ်များကိုထောက်ခံပါတယ်။ သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးနှင့် salience-coding လှုပ်ရှားမှုအပြင်, DA အာရုံခံနှစ်ခုလုံးအမျိုးအစားများကိုလည်းတစ်ခုထုတ်လွှင့် signal ကိုသတိပေးနခွေငျးမြင့်မားအလားအလာအရေးပါမှု၏မျှော်လင့်မထားတဲ့အာရုံခံတွေကိုအားဖြင့်မှုကိုခံလိုက်ရတယ်။ အတူတူကျနော်တို့ကဤတန်ဖိုး salience နှင့်သတိပေးနခွေငျးအချက်ပြမှုများမြစ်အောက်ပိုင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုသြဒိနိတ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကြောင်း hypothesize ။
ဆုကြေးအတွက် Dopamine: သမားရိုးကျသီအိုရီ
Dopamine ရှည်လျားအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအားဖြည့်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်လူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဦးနှောက်ဆွနဲ့စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ် DA ဂီယာမြှင့်တင်ရန်ထားတဲ့ထိန်းသိမ်းရေး, မကြာခဏ (စစ်ကူအဖြစ်ပြုမူနေချိန်တွင် DA ဂီယာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါး, အားဖြည့်သင်ယူမှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပညာရှိ 2004) ။ DA ဂီယာ (ဆုလာဘ်ရှာလှုံ့ဆျောမှုတစ်ပြည်နယ်အတွက်အလွန်အရေးပါသည်Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Salamone et al ။ , 2007) နှင့် cue-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များ၏အမှတ်တရများတည်ထောင်ဘို့ (Dalley et al ။ , 2005) ။ DA လွှတ်ပေးရေး (ဆုလာဘ်သင်ယူမှုပုံစံအားလုံးကိုအဘို့မလိုအပ်ပါဘူးအမြဲပျော်မွေ့စေ၏သဘောအရ '' ကြိုက်တယ် '' မရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ရည်မှန်းချက်များသူတို့ကိုအောင်မြင်ရန်လုပ်ရပ်များလှုံ့ဆျောမှု၏သဘောအရ '' လိုခငျြ '' ဖြစ်လာစေဘို့အရေးကြီးသည်Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Palmiter, 2008).
dopamine အားဖြည့်သင်ယူမှုကို support ဘယ်လိုတစ်ခုမှာယူဆချက်ကြောင့်အာရုံခံအကြား Synaptic ဆက်သွယ်မှု၏ခွန်အားညှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီအယူအဆ၏ဆုံးရိုးရှင်းတဲ့ဗားရှင်း dopamine "အဖြစ်ကြာမြင့်စွာသူတို့ dopamine တစ်ပေါကျကှဲ get အဖြစ်အတူတကွဝါယာကြိုးအတူတကွပစ်ခတ်ကြောင်းအာရုံခံ" အကြမ်းဖျင်းအဖြစ်ဖော်ပြထားနိုင်မယ့်ပြုပြင်ထားသော Hebbian စိုးမိုးရေးအရသိရသည် Synaptic plasticity ထိန်းချုပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆဲလ်တစ်ဦးကဆဲလ် B ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း, ဆဲလ် B ကိုအကျိုးကိုရရှိသောအမူအကျင့် action ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်လျှင်, ထို့နောက် dopamine ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်တစ်ဦး→ B ကိုဆက်သွယ်မှု (အားဖြည့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဂူ et al ။ , 1996; Schultz, 1998) ။ ဤသည်ယန္တရားတစ်ခုသက်ရှိလုံလောက်သောတရားခွင်-and အမှားအတွေ့အကြုံကိုပေးသောဆုလာဘ်, ရဖို့ရန်လုပ်ရပ်များ၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသင်ယူဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။ ဒီအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီ, dopamine (မြောက်မြားစွာဦးနှောက်ဒေသများတွင် Synaptic plasticity အပေါ်တစ်ဦးအစွမ်းထက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်Surmeier et al ။ , 2010; goto et al ။ , 2010; Molina-Luna et al ။ , 2009; Marowsky et al ။ , 2005; Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005) ။ အချို့ကိစ္စများတွင် dopamine (ဆုလာဘ်-ရှာအပြုအမူဆက်နွယ်နေကြောင်းသောထုံးစံ၌အထက်ဖော်ပြထားတဲ့ Hebbian စိုးမိုးရေး၏လိုင်းများတလျှောက် Synaptic plasticity ဖွReynolds က et al ။ , 2001) ။ ရေရှည် Synaptic plasticity အပေါ်သက်ရောက်မှုများအပြင်, dopamine လည်း (အာရုံခံအကြားအာရုံကြော Spike လှုပ်ရှားမှုနဲ့ Synaptic ဆက်သွယ်မှုပြောင်းလဲပစ်အားဖြင့်အာရုံကြောဆားကစ်ကျော်ချက်ချင်းထိန်းချုပ်ကွိုးစားအားထုနိုင်ပါတယ်Surmeier et al ။ , 2007; Robbins နှင့် Arnsten, 2009), အချို့ကိစ္စများတွင်ချက်ချင်းဆုလာဘ်-ရှာလုပ်ရပ်များ (မြှင့်တင်ရန်မယ်လို့တစ်ဦးထုံးစံ၌အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖရန့်, 2005).
ဆုလာဘ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းလုပ်ရပ်များလှုံ့ဆော်ရန်အလို့ငှာ, dopamine ကြိုးအတွေ့အကြုံများစဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ရပါမည်။ အမှန်စင်စစ်အများဆုံး DA အာရုံခံပြင်းပြင်းထန်ထန် (မကြာခဏလှုပ်ရှားမှု phasic '' ပြီးတော့ Activision နေတာ '' ထုတ်လုပ်ခြင်း, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်ရေအဖြစ်မျှော်လင့်မထားတဲ့မူလတန်းဆုလာဘ်များက activated နေကြတယ်Schultz, 1998) မျိုးစုံ spikes အပါအဝင် (phasic စိတ်လှုပ်ရှား (ကျေးဇူးတော်နှင့် Bunney, 1983)) ။ သို့သော် Wolfram Schultz ရဲ့ရှေ့ဆောင်လေ့လာမှုများကဤ DA အာရုံခံဆဲလျတုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်စားသုံးမှုအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းပြသ se နှုန်း။ အဲဒီအစားသူတို့လက်ခံရရှိကြောင်းအကျိုးကိုနှင့် (ဖြစ်ပေါ်ဖို့ခန့်မှန်းခဲ့အကျိုးကိုအကြားခြားနားချက်သတင်းပို့တစ်ဦး '' ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှား '' တူSchultz et al ။ , 1997()ပုံ 1A) ။ အကျိုးကိုခန့်မှန်းသည်ထက်ပိုမိုကြီးမားလျှင်ထို့ကြောင့်, DA အာရုံခံပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်လှုပ်ရှား (အပြုသဘောခန့်မှန်းအမှားဖြစ်ကြောင်း, ပုံ 1E, အနီေရာင်); အကျိုးကိုခန့်မှန်းသည်ထက်သေးငယ်သို့မဟုတ်ယင်း၏ခန့်အပ်ထားသောအချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ပျက်ကွက်လျှင်, DA အာရုံခံ phasically, (အနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှား inhibited နေကြတယ် ပုံ 1E), အပြာ, အကျိုးကိုကြိုတင် cued လျှင်၎င်း၏အရွယ်အစားအပြည့်အဝကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းဒါနှင့်, DA အာရုံခံ (သုညခန့်မှန်းအမှားအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမတုန့်ပြန်ရှိသည်, ပုံ 1C), အနက်ရောင်။ တူညီမူအရအနာဂတ်ဆုလာဘ်အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်သစ်များပေးအာရုံခံတွေကိုမှ DA တုံ့ပြန်မှုများအတွက်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦး cue (အနာဂတ်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးတစ်ခုတိုးညွှန်ပြသည့်အခါ DA အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်ပုံ 1C) အနီ, (က cue အနာဂတ်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးလျော့ကျညွှန်ပြသည့်အခါ inhibitedပုံ 1C, ယေဘုယျအားဖြင့်) ပြာ, နှင့် (မျှမသစ်ကိုဆုလာဘ်သတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြကြောင်းတွေကိုအနည်းငယ်သာတုံ့ပြန်မှုများပုံ 1E), အနက်ရောင်။ ဤရွေ့ကား DA တုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားလုပ်ရပ်တွေကိုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြည်နယ်များရဲ့တန်ဖိုးကိုသင်ယူများအတွက်အားဖြည့် signal ကိုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အဆိုပြုပြီးပါပြီသောယာယီခြားနားချက်အမှားသို့မဟုတ် "TD အမှား", (ခေါ်တော်မူ၏တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားတူHouk et al ။ , 1995; ဂူ et al ။ , 1996; Schultz et al ။ , 1997) ။ ကွန်ပျူတာ TD-တူသောအားဖြည့် signal ကို အသုံးပြု. မော်ဒယ်များလူသားတွေအတွက်သင်ယူမှုအားဖြည့်များစွာကိုရှုထောင့်ကိုရှင်းပြနိုင်သည်, တိရစ္ဆာန်များနှင့် DA သူတို့ကိုယ်သူတို့ neurons (Sutton နှင့် Barto, 1981; Waelti et al ။ , 2001; ဂူနှင့် Bern, 2002; ဒါယန်းသည်နှင့်ထို, 2008).
Dopamine ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားနိုင်တဲ့ coding နှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွင်သတင်းအချက်အလက် preference ကို
စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုအထင်ကြီးခင်းကျင်း DA အချက်ပြမှုများကိုအနီးကပ်အသေးသူတွေကိုကျော်ကြီးမားသောဆုလာဘ်များအတွက်ဦးစားပေးအပါအဝင်အပြုအမူဦးစားပေး, (ကိုက်ညီမှုတဲ့ထုံးစံ၌ဆုလာဘ်ဟောကိန်းများကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းပြသကြTobler et al ။ , 2005မဖြစ်နိုင်သောသူတွေကိုကျော်) ဖြစ်နိုင်ခြေဆုလာဘ် (Fiorillo et al ။ , 2003; Satoh et al ။ , 2003; မောရစ် et al ။ , 2004) နှင့်နှောင့်နှေးသူတွေကိုကျော်ချက်ချင်းဆုလာဘ် (Roesch et al ။ , 2007; Fiorillo et al ။ , 2008; Kobayashi နှင့် Schultz, 2008) ။ လူသားတွေအတွက် DA အာရုံခံပိုက်ဆံအကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုဝှက်ကြောင်းပင်သက်သေအထောက်အထားများ (ရှိပါသည်Zaghloul et al ။ , 2009) ။ ထို့အပွငျ DA အချက်ပြမှုများ (ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း၏အမူအကျင့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအလားတူ timecourse နှင့်အတူသင်ယူနေစဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာHollerman နှင့် Schultz, 1998; Satoh et al ။ , 2003; Takikawa et al ။ , 2004; နေ့ et al ။ , 2007) နှင့်ဆုလာဘ် preference ကို၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီအမံဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြသည် (မောရစ် et al ။ , 2006) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဦးနှောက်အတွက်ဆုလာဘ်နိုင်တဲ့ coding ရဲ့အကောင်းဆုံးနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်အများဆုံးပုံတူကူးယူဥပမာတစ်ဦးအဖြစ် DA အာရုံခံတည်စေပြီ။ ရလဒ်အနေနဲ့မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများသူတို့ဆုလာဘ်ဟောကိန်းများ generate နှင့်မည်သို့သူတို့ရဲ့အချက်ပြအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်မြစ်အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦများအပေါ်ပြုမူပုံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ပြင်းထန်သောစိစစ်ဖို့ DA အာရုံခံအကြောင်းမဲ့ပါပြီ။
ဆုကြေးအတွက် Dopamine: လတ်တလောတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ
DA ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကိုနားလည်သဘောပေါက်တွင်လတ်တလောတိုးတက်မှုတွေသုံးကျယ်ပြန့်မေးခွန်းများကိုစဉ်းစားမှ လာ. : ဘယ်လို DA အာရုံခံဆုလာဘ်ဟောကိန်းများသိရှိရသလဲ သူတို့ရဲ့ခန့်မှန်းချက်ကိုဘယ်လိုတိကျမှုရှိသနည်း ထိုသူတို့အကြိုးအဖြစ်ဖွင့်အဘယျသို့ပွုမူဆကျဆံသလဲ?
ဘယ်လို DA အာရုံခံဆုလာဘ်ဟောကိန်းများသိရှိရသလဲ ဂန္ထဝင်သီအိုရီ (ထိုဆုလာဘ်ဟောကိန်းများအထပ်ထပ်နှိုးဆွ-ဆုလာဘ်ဒဿနိကဗေဒလိုအပ်မယ့်တဖြည်းဖြည်းအားဖြည့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သင်ယူနေကြသည်အကြံပြုRescorla နှင့် Wagner, 1972; ဂူ et al ။ , 1996) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ဦးကမမျှော်လင့်တဲ့ဆုလာဘ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်တစ်ဦးကများ၏ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ထားသည်။ မကြာမီကဒေတာ, သို့သော်, DA အာရုံခံရိုးရှင်းတဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-ဆုလာဘ်သင်ယူမှုထက်ကျော်လွန်သွားပါနှင့်ကမ္ဘာ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးခေတ်မီယုံကြည်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးခန့်မှန်းချက်စေကွောငျးဖျောပွ။ DA အာရုံခံပင်ဆုလာဘ်တစ်ခုလှုံ့ဆော်မှုအကြောင်းမရှိတစ်ဦးနှင့်အတူတွဲဘယ်မှာသမားရိုးကျမဟုတ်သော enviroments မှာမှန်ကန်စွာဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် လြော့ပေါ့စေ (ထိုလှုံ့ဆော်မှု၏တန်ဖိုးအတွက်Satoh et al ။ , 2003; Nakahara et al ။ , 2004; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010c) သို့မဟုတ်တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏တန်ဖိုးအတွက်အပြောင်းအလဲဖြစ်စေ (Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010b) ။ ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏မျှော်လင့်ထားကှဲလှဲအပေါ်အခြေခံပြီးခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများကိုချုံ့ချဲ့အဖြစ် DA အာရုံခံကိုလည်းဆုလာဘ်ဖြန့်ဖြူးမြင့်မားယူမှုကိုစာရင်းဇယားပေါ်တွင် အခြေခံ. မိမိတို့အကျိုးကိုအချက်ပြမှုများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုငျသညျ, (Tobler et al ။ , 2005) နှင့် '' ကောက်ကာငင်ကာပြန်လည်ထူထောင် '(ငွိမျးဆုလာဘ်တွေကိုသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပန် et al ။ , 2008) ။ ထိုအဖြစ်ရပ်အားလုံး (အာရုံခံခြင်းနှင့်မော်တာလိုက်လျောညီထွေတွင်တွေ့မြင်အလားတူသက်ရောက်မှုတစ်ခုထူးခြားတဲ့အပြိုင်ဖွဲ့စည်းBraun et al ။ , 2010; Fairhall et al ။ , 2001; Shadmehr et al ။ , 2010), သူတို့ကကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သင်ယူမှုများအတွက်အထွေထွေအာရုံကြောယန္တရားကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။
DA ဆုလာဘ်ဟောကိန်းများကိုဘယ်လိုတိကျမှုရှိသနည်း မကြာမီကလေ့လာမှုများ DA အာရုံခံသစ္စာရှိရှိခန့်မှန်းမသေချာမရေရာသုံးခုသတင်းရပ်ကွက်အဘို့အကောင့်မှမိမိတို့အကျိုးကိုအချက်ပြမှုများကို adjust ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးစွာလူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များရှည်လျား cue-ဆုလာဘ်အချိန်ကြားကာလအကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောဟောကိန်းများအောင်မှသူတို့ကိုကာကွယ်ပြည်တွင်းရေးအချိန်ကိုက်ဆူညံသံ (ထံမှခံရGallistel နှင့်မျောက်လွှဲကျော်, 2000) ။ ထို့ကြောင့် cue-ဆုလာဘ်နှောင့်နှေးဟောကိန်းများအခြိနျဇယား (1-2 စက္ကန့်) တိုတောင်းလျှင်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးဆုလာဘ်ပေးပို့နည်းနည်း DA တုံ့ပြန်မှုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း, ဒါပေမယ့်ကြာကြာ cue-အကျိုးသည်ဟောကိန်းများအခြိနျဇယားနှောင့်နှေးလျော့နည်းယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်လာစေရန်နှင့်ဆုလာဘ် (ရှင်းပါတယ် DA ပြီးတော့ Activision နေတာကျလာသောKobayashi နှင့် Schultz, 2008; Fiorillo et al ။ , 2008) ။ ဒုတိယအချက်မှာနေ့စဉ်အသက်တာ၌များစွာသောတွေကိုဆုလာဘ်ပေးပို့အကြိမ်ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဖြူးသတ်မှတ်ခြင်း, imprecise ဖြစ်ကြသည်။ DA အာရုံခံနောက်တဖန်မသေချာမရေရာအခြိနျဇယား၏ဤပုံစံကိုရောင်ပြန်ဟပ်: အကျိုးကိုပေါ်လာဖို့ပျက်ကွက်တစ်ခုချင်းစီကိုယခုအချိန်တွင် ပို. ပို. အနုတ်လက္ခဏာဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားများကိုပြသော်လည်းအဖြစ်သူတို့တဖြည်းဖြည်း, variable ကိုဆုလာဘ်နှောင့်နှေးနေစဉ်အတွင်း inhibited နေကြသည် (Fiorillo et al ။ , 2008; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010a; Nomoto et al ။ , 2010) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အများအပြားတွေကိုမိမိတို့အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုအကြောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကနိဂုံးချုပ်ရောက်ရှိဖို့အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်းလိုအပ်, သိမှုဆိုင်ရာအာရုံရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ DA ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကိုရှည်လျား latency မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းဖက်ရှင်အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတနျဖိုးအဖြစ်သိမှုဆိုင်ရာအာရုံအချက်အလက်များ၏တဖြည်းဖြည်းစီးဆင်းရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ထင်ရှားကျော်ကြားသော (ဝှက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်Nomoto et al ။ , 2010).
ဖြစ်ရပ်များ DA အာရုံခံကြိုးအဖြစ်ကုသကြရုံဘာလဲ? ဆုလာဘ်သင်ယူမှု၏သမားရိုးကျသီအိုရီ (DA အာရုံခံအနာဂတ်မူလတန်းဆုလာဘ်များမျှော်လင့်ထားသည့်ငွေပမာဏပေါ်တွင်အခြေခံတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ကြောင်းအကြံပြုဂူ et al ။ , 1996) ။ မူလတန်းဆုလာဘ်နှုန်းစဉ်ဆက်မပြတ်ကျင်းပလျှင်ပင်မရှိသေးပါလူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုမကြာခဏကြိုတင်ခန့်မှန်းများအတွက်အပိုဆောင်း preference ကိုဖော်ပြ - တစ်ဦးချင်းစီဆုလာဘ်ရဲ့အရွယ်အစား, ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်အချိန်ကိုက်ကြိုတင်လူသိများနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှာကြံ (Daly, 1992; ဝါးနှင့်ဟို, 1994; Ahlbrecht နှင့် Weber, 1996) ။ မျောက်များအတွက်တစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု (DA အာရုံခံဒီ preference ကိုအချက်ပြတွေ့ရှိခဲ့Bromberg-မာတင်နှင့် Hikosaka, 2009) ။ မျောက်များကသူတို့ကိုအစားအဘယ်သူမျှမသစ်ကိုသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းမပြည့်မတွေကိုထက်တစ်အနာဂတ်ဆုလာဘ်၏အရွယ်အစားခန့်မှန်းဖို့ခွင့်ပြုမယ်လို့သတင်းအချက်အလက်အမြင်အာရုံတွေကိုကြည့်ရှုရန်အားကြီးသော preference ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ အပြိုင်ခုနှစ်, DA အာရုံခံတိရစ္ဆာန်ရဲ့အမူအကျင့် preference ကို (ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့တဲ့ထုံးစံအတွက်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ရှုဖို့အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပုံ 1B, D ကို) ။ ဤသည် DA အာရုံခံဆုလာဘ်ရဖို့လုပ်ရပ်များကလှုံ့ဆျောဒါပေမယ့်လည်းဆုလာဘ်စနစ်တကျမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်အဘို့ပြင်ဆင်နိုင်စေရန်အလို့ငှာထိုဆုလာဘ်အကြောင်းကိုတိကျဟောကိန်းများစေရန်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်မသာကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤတွေ့ရှိချက် DA ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများ High-အလို့ငှာဆုလာဘ်စာရင်းဇယားများအရလိုက်လျောညီထွေ, ဆုလာဘ်မသေချာမရေရာနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွင်သတင်းအချက်အလက်အကွိုကျအပါအဝင်လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်ဆုလာဘ်ဟောကိန်းများအကြောင်းကြားကြောင်းခေတ်မီအချက်များမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းပြသပါ။
မြစ်အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦများအပေါ် phasic dopamine ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများ၏ဆိုးကျိုးများ
DA ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှု (synchronous phasic ပြီးတော့ Activision နေတာအတွက်ဖြစ်ပေါ်ယောရှုသည် et al ။ , 2009bပစ်မှတ်အဆောက်အဦများအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်ပုံစံသွင်းသွင်းကြောင်း), တစ်တုံ့ပြန်မှုပုံစံ (Gonon, 1988; Zhang က et al ။ , 2009; Tsai et al ။ , 2009) ။ ဒါဟာတာရှည်သောဤ phasic ပြီးတော့ Activision နေတာလုပ်သူများ DA လှုပ်ရှားမှု (ကနေကွဲပြားထုံးစံ၌သင်ယူခြင်းနှင့်လှုံ့ဆျောမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းဆိုခဲ့ထားပြီးတော်ကကျေးဇူး, 1991; ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2007; Schultz, 2007; Lapish et al ။ , 2007) ။ မကြာသေးမီကတီထွင်နည်းပညာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒဏ်ငွေ Spatial နှင့်ယာယီတိနှင့်အတူ DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ဖွငျ့ဤယူဆချက်ကိုအတည်ပြုရန်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ VTA DA အာရုံခံ၏ Optogenetic ဆွဆွနေတဲ့စိမ်းဖြင့်ပုံစံ (များတွင်လျှောက်ထားသောအခါမှသာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ conditional ရာအရပျ preference ကို inducesTsai et al ။ , 2009) ။ DA အာရုံခံထံမှ NMDA receptors ၏ပြောင်းပြန်မျိုးရိုးဗီဇနောက်ကောက်, အဓိကအားဖြင့်နဂိုအတိုင်းလုပ်သူများလှုပ်ရှားမှုထွက်ခွာနေချိန်တွင်စိမ်းဖြင့်ချို့ယွင်းရာ, (သင်ယူခြင်းဆုလာဘ်၏တိကျသောပုံစံများကိုတစ်ဦးရွေးချယ်ချို့ယွင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်Zweifel et al ။ , 2009; က Parker et al ။ , 2010) (ဒီနောက်ကောက်လည်း (DA အာရုံခံဆဲလျ Synaptic plasticity ချို့ယွင်းနေသောမှတ်ချက်ပေမယ့်Zweifel et al ။ , 2008)) ။ DA ပြီးတော့ Activision နေတာဒေသခံအာရုံကြောဆားကစ် reconfiguring အားဖြင့်ဆုလာဘ်သင်ယူမှုမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။ အထူးသ, ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် DA ပြီးတော့ Activision နေတာနျူကလီးယပ် accumbens ၏တိကျသောဒေသများထံသို့စေလွှတ်ကြသည်, ဤဒေသများ (ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအထူးသဖြင့်မြင့်မားများet al အားပေးစရာ။ , 2007; Owesson-White က et al ။ , 2009).
phasic ကွဲနှိုင်းယှဉ်လျှင်လျော့နည်းအနုတ်လက္ခဏာဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများများအတွက်လှုပ်ရှားမှု spiking အတွက် phasic ဖြင့်ခေတ္တ၏အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူသိများသည်။ ဤရွေ့ကားဖြင့်ခေတ္တဆူးမှုနှုန်းအတွက်သေးငယ်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနည်း (ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့် modulated နေကြတယ်Bayer နှင့် Glimcher, 2005; ယောရှုသည် et al ။ , 2009a; Nomoto et al ။ , 2010), နှင့်သင်ယူခြင်းအပေါ်သေးငယ်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ (Rutledge et al ။ , 2009) ။ သို့သော်အနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှားသင်ယူမှုအချို့အမျိုးအစားများကို (VTA လိုအပ်Takahashi et al ။ , 2009), phasic ဖြင့်ခေတ္တနေဆဲမြစ်အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦများအားဖြင့်ဝှက်မည်အကြောင်း, အကြံပြုခြင်း။
ပြီးတော့ Activision နေတာနှင့်ခေတ္တ DA လွှတ်ပေးရန်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြစ်ပေါ်စေကတည်းကသူတို့ကွဲပြားယန္တရားများမှတဆင့်မြစ်အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦများသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့များပါတယ်။ DA အာရုံခံ၏တဦးတည်းကိုအဓိကပစ်မှတ်သည် dorsal striatum ၌ဤအယူအဆများအတွက်မကြာသေးမီကသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ Dorsal striatum projection အာရုံခံကွဲပြားခြားနားသော DA receptors ဖော်ပြရာနှစ်မျိုးအတွက်လာ။ တစ်ခုမှာအမျိုးအစားခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေလွယ်ကူချောမွေ့ရန် Basal ganglia '' တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း 'ဖို့ D1 receptors နှင့်စီမံကိန်းများကိုဖော်ပြ; ဒုတိယအမျိုးအစား (ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေနှိမ်နင်းဖို့ '' သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း 'ဖို့ D2 receptors နှင့်စီမံကိန်းများကိုဖော်ပြပုံ 2()Albin et al ။ , 1989; Gerfen et al ။ , 1990; Kravitz et al ။ , 2010; Hikida et al ။ , 2010) ။ ဤအလမ်းကြောင်းနှင့် receptors ၏ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ် (DA ပြီးတော့ Activision နေတာမြင့်မားသော DA ၏အခြေအနေများထုတ်လုပ်ကြောင်းဆိုခဲ့ D1 receptors ကိုသက်ဝင်, high-တန်ဖိုးကိုလှုပ်ရှားမှုများရွေးဖို့တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးပုံ 2A), DA ဖြင့်ခေတ္တ (D2 receptors တားစီး, အနိမ့် DA ၏အခြေအနေများထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အနိမ့်တန်ဖိုးကိုလှုပ်ရှားမှုများကိုဖိနှိပ်ဖို့သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်းပုံ 2B()ဖရန့်, 2005; Hikosaka, 2007) ။ ဒီအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီမြင့်မား DA အဲဒီ receptor activation (တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ cortico-striatal synapses ၏အလားအလာအားပေးအားမြှောက်Shen et al ။ , 2008) နှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ရလဒ်များ (ထံမှသင်ယူခြင်းဖရန့် et al ။ , 2004; Voon et al ။ , 2010), striatal D1 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ရွေးချယ် (ဆုခခြံပစ်မှတ်မှလှုပ်ရှားမှုများချို့ယွင်းစဉ်Nakamura နှင့် Hikosaka, 2006) ။ တစ်ခုအလားတူထုံးစံ၌နိမ့် DA အဲဒီ receptor activation (အသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ cortico-striatal synapses ၏အလားအလာအားပေးအားမြှောက်Shen et al ။ , 2008) နှင့်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များ (ထံမှသင်ယူခြင်းဖရန့် et al ။ , 2004; Voon et al ။ , 2010), striatal D2 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ရွေးချယ် (Non-ဆုလာဘ်ပစ်မှတ်မှလှုပ်ရှားမှုများကိုဖိနှိပ်စဉ်Nakamura နှင့် Hikosaka, 2006) ။ စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ် D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဤဌာနခွဲ (လူ့အပြုအမူအပေါ် DA-related မျိုးဗီဇ၏ဆိုးကျိုးများအများအပြားကရှင်းပြသည်Ullsperger, 2010; ဖရန့်နှင့် Fossella, 2010) နှင့်အလုပ်သမားတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူကွဲပြားခြင်းများအတွက်အထောက်အထား ventral striatum ရှိသကဲ့သို့, dorsal striatum ကျော်လွန်ချဲ့ထွင်ခြင်းငှါ (ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2007; Lobo et al ။ , 2010).
အဆိုပါ dorsal striatum အတွက်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောလှုံ့ဆော်မှု၏ Dopamine ထိန်းချုပ်မှု
အထက်ပါအစီအစဉ်အတွက် striatum အပေါ်သက်ရောက်မှုမှတဆင့်အပြုအမူ၏ phasic DA ထိန်းချုပ်မှုရိုးရှင်းတဲ့ပုံဖျောပွနေစဉ်, အပြည့်အဝပုံတစ်ပုံကိုအများကြီးပိုရှုပ်ထွေးပါတယ်။ DA (ထို prefrontal cortex အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများပေါ်တွင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဆုလာဘ်-related အပြုအမူသြဇာလွှမ်းမိုးHitchcott et al ။ , 2007), rhinal cortex (လျူ et al ။ , 2004), hippocampus (Packard နဲ့အဖြူရောင်, 1991; Grecksch နှင့်မက်တီ, 1981) နှင့် amygdala (Phillips က et al ။ , 2010) ။ DA ၏ဆိုးကျိုးများ (intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်းမှ, DA သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဇီဝဖြစ်စဉ်အင်ဇိုင်းတွေ, autoreceptors, receptors နှင့်အဲဒီ receptor နားချင်းဆက်မှီမှုကြောင့် DA innervation ၏သိပ်သည်းဆအတွက်မူကွဲဤဒေသများအကြားကျယ်ပြန့်ကိုထူးခြားများပါတယ်Neve et al ။ , 2004; Bentivoglio နှင့် Morelli, 2005; ဖရန့်နှင့် Fossella, 2010) ။ ထို့ပြင်အနည်းဆုံး VTA အတွက်, DA အာရုံခံ (သူတို့စီမံကိန်းပစ်မှတ်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောဆယ်လူလာဂုဏ်သတ္တိများရှိနိုင်ပါသည်Lammel et al ။ , 2008; Margolis et al ။ , 2008), နှငျ့အခြို့ပါ (ထူးခြားတဲ့အချိုမှုထုတ်လွှင့်ရန်စွမ်းရည်အဖြစ် dopamine ရှိDescarries et al ။ , 2008; Chuhma et al ။ , 2009; Hnasko et al ။ , 2010; Tecuapetla et al ။ , 2010; Stuber et al ။ , 2010; Birgner et al ။ , 2010) ။ ထို့ကြောင့်အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ကျော် DA အာရုံခံဆဲလျထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝအတိုင်းအတာသာထင်ရှားစေခြင်းငှါအစဖြစ်ပါတယ်။
Dopamine: Beyond ဆုကြေး
ဤရွေ့ကား, ကျနော်တို့ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားများကိုပုံနဲ့တူတဲ့ dopamine တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မှာသက်ရောက်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဆုလာဘ်-related အပြုအမူအတွက် DA အာရုံခံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ DA အာရုံခံ phasically ပင်ကိုစရိုက်ကအကြိုးမပေးဖြစ်ကြပြီးအနာဂတ်ဆုလာဘ်မှတွေကိုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဖြစ်ရပ်များအများအပြားအမျိုးအစားများကိုတုံ့ပြန်, ဤသည် non-ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကိုစိတ်ခွန်အားနိုးအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိကွောငျး, သို့သော်, ပို. ပို. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ ဤရွေ့ကား Non-ဆုလာဘ်ဖြစ်ရပ်များနှစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးအစားသို့အုပ်စုဖွဲ့နိုင်ပါတယ်, မနှစ်သက်မှု နှင့် သတိပေးနခွေငျးကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။ ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များသည်ဤဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့မှတဆင့်ဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများရရှိခဲ့ကြပြီနဲ့အာရုံခံတွေကို (ဥပမာလေထု Puff, ခါးသောအရသာ, လျှပ်စစ်လှုပ်ခြင်းနှင့်အခြားမနှစ်မြို့ဖွယ်အာရုံကဲ့သို့) ပင်ကိုစရိုက်ကမလိုလားအပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများပါဝင်သည်။ သတိပေးဖြစ်ရပ်များယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏အဓိပ္ပာယ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်ရသောမြင့်မားသောအလားအလာအရေးပါမှု၏မျှော်လင့်မထားတဲ့အာရုံခံတွေကိုဖြစ်ကြသည်။
ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များမှမတူကွဲပြား dopamine တုံ့ပြန်မှု
ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များမှတစ်ဦးကအာရုံခံဆဲလျရဲ့တုံ့ပြန်မှု (စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်မှုအတွက်၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုအရေးပါစမ်းသပ်ပေးသည်Schultz, 1998; Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Redgrave et al ။ , 1999; Horvitz, 2000; ယောသပ်သည် et al ။ , 2003) ။ များစွာသောအရိုအသေငါတို့သည်မိမိတို့၏ဆန့်ကျင်ဘက်ထင်ဟပ်ဆန့်ကျင်ဘက်အမူအကျင့်အတွက်ကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များပြုမူဆက်ဆံ စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုး။ ကျနော်တို့ဆုလာဘ်ရှာကျွန်ုပ်တို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုအနုတ်လက္ခဏာတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်စဉ်ကသူတို့ကိုအပြုသဘောတန်ဖိုးကို assign ။ အခြားအရိုအသေငါတို့သည်မိမိတို့၏အလားတူထင်ဟပ်အလားတူအမူအကျင့်အတွက်ကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များပြုမူဆက်ဆံ စိတ်ခွန်အားနိုး salience [FOOTNOTE1] ။ ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ်များအာရုံစိုက်မှုများ၏အရှေ့တိုင်း, သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့, နှင့်အထွေထွေလှုံ့ဆျောမှုအတွက်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပေါ်။
DA အာရုံခံကဤလုပ်ငန်းဆောင်တာများဘယ်ကိုထောကျပံ့သလဲ? ဒါဟာ (ရှည်လျားသောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံများမြစ်အောက်ပိုင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ DA ပြင်းအားအတွက်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုလူသိများခဲ့ပြီး, ဤအတွေ့အကြုံများမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုသိသိသာသာ DA agonists, ရန်နှင့်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ကြောင်းSalamone, 1994; di Chiara, 2002; Pezze နှင့် Feldon, 2004; လူငယ်တို့ et al ။ , 2005) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေ (သို့သော်ရလဒ်များကိုတစ်ဒီကဗျာမတူကွဲပြားမှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြLevita et al ။ , 2002; di Chiara, 2002; လူငယ်တို့ et al ။ , 2005) ။ အတော်များများကလေ့လာမှုများ DA အာရုံခံစိတ်ခွန်အားနိုး salience ကုဒ်သွင်းနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များ DA အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အမူအကျင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက် (DA ဂီယာ၏မြင့်မားနေဖြင့်ထောက်ခံကြောင်းသတင်းပို့Salamone, 1994; ယောသပ်သည် et al ။ , 2003; Ventura et al ။ , 2007; ဘား et al ။ , 2009; Fadok et al ။ , 2009) phasic DA ပြီးတော့ Activision နေတာအပါအဝင် (Zweifel et al ။ , 2009) ။ ဒါပေမယ့်တခြားလေ့လာမှုတွေစိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးကုဒ်သွင်း DA အာရုံခံတွေနဲ့ပိုပြီးတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များ DA အဆင့်ဆင့်လျှော့ချရန်နှင့်အမူအကျင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက် (DA ဂီယာ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ကထောက်ခံကြောင်းသတင်းပို့မာကု et al ။ , 1991; Shippenberg et al ။ , 1991; လျူ et al ။ , 2008; Roitman et al ။ , 2008) ။ များစွာသောအမှုများတွင်ဤရောထွေးရလဒ်များကိုဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံများကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ (ထဲမှာ DA လွှတ်ပေးရန်၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုညွှန်ပြ, တစ်ခုတည်းလေ့လာမှုများမှာတွေ့ရှိပြီThierry et al ။ , 1976; Besson နှင့် Louilot, 1995; Ventura et al ။ , 2001; Jeanblanc et al ။ , 2002; Bassareo et al ။ , 2002; Pascucci et al ။ , 2007), နှင့် DA-related မူးယစ်ဆေးဝါးများကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးအတွေ့အကြုံများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သူတို့အားအလားတူအာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများတဲ့အရောအနှောများထုတ်လုပ်နိုင်သော (Ettenberg, 2004; ဝီ et al ။ , 2008).
DA လွှတ်ပေးရန်ပုံစံများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာဒီမတူကွဲပြားမှု DA အာရုံခံအားလုံးဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ယူနီဖောင်းစိတ်ခွန်အားနိုး signal ကို transmit သောစိတ်ကူးနှင့်အတူပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ခက်ခဲသည်။ DA အာရုံခံကွဲပြားခြားနားသူတို့ကိုယ်သူတို့လျှင်ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်မှုသို့သော်ဤသို့ရှင်းပြခဲ့သည်နိုင် - ဆန္ဒရှိအပြောင်းအလဲနဲ့၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ကိုထောက်ပံ့သောမျိုးစုံအာရုံကြောလူဦးရေ၏ရေးစပ်။ ဒီအမြင်ထုံဆေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အာရုံကြောမှတ်တမ်းတင်လေ့လာမှုများကထောက်ခံသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ noxious လှုံ့ဆော်မှုသည်အခြား DA အာရုံခံ (အချို့ DA အာရုံခံပေမယ်တားစီးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားကျလာသောကြောင့်ပြသကြChiodo et al ။ , 1980; Maeda ဟာနှင့် Mogenson, 1982; Schultz နှင့် Romo, 1987; Mantz et al ။ , 1989; Gao et al ။ , 1990; Coizet et al ။ , 2006) ။ အရေးကြီးတာက, excitatory နှင့် inhibitory နှစ်ဦးစလုံးတုံ့ပြန်မှု (juxtacellular တံဆိပ်ကပ် အသုံးပြု. dopaminergic ဖြစ်အတည်ပြုခဲ့သည်အာရုံခံအတွက်ဖြစ်ပေါ်Brischoux et al ။ , 2009()ပုံ 3) ။ ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအလားတူမတူကွဲပြားမှုတက်ကြွအပြုအမူစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ DA အာရုံခံ၏ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများ phasically (အရေပြား noxious ဆွအပါအဝင်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ် inhibited နေကြတယ်Kiyatkin, 1988a; Kiyatkin, 1988b), အာရုံခံတွေကို (ဆန္ဒရှိလှုပ်ခန့်မှန်းGuarraci နှင့် Kapp, 1999), ဆန္ဒရှိ airpuffs (Matsumoto နှင့် Hikosaka, 2009b), နှင့်ဆန္ဒရှိ airpuffs ခန့်မှန်းအာရုံခံတွေကို (Matsumoto နှင့် Hikosaka, 2009b; ယောရှုသည် et al ။ , 2009a) ။ နှစ်ခု DA အာရုံခံတစ်ပြိုင်နက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအခါထို့အပွငျ, သူတို့ရဲ့ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုယေဘုယျအားဖြင့် (တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်အတူနည်းနည်းရုံးတင်စစ်ဆေး-to-ရုံးတင်စစ်ဆေးဆက်စပ်မှုရှိယောရှုသည် et al ။ , 2009b), ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလုံးအဖြစ် DA လူဦးရေကိုဖြတ်ပြီးညှိနှိုင်းကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြု။
ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များမှမတူကွဲပြား dopamine အာရုံခံဆဲလျတုံ့ပြန်မှု
ဤအမတူကွဲပြားခြင်းကိုမနှစ်သက်တုံ့ပြန်မှုများ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကျနော်တို့သူတို့တစ်တွေအဓိပ္ပါယ်ရှိသောစိတ်ခွန်အားနိုး signal ကို generate မှဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ကြသည်ပုံကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှု (ဒီခေါင်းစဉ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် DA အာရုံခံကွဲပြားစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်ပြမှုများနှင့်အတူမျိုးစုံလူဦးရေသို့ခွဲခြားဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားMatsumoto နှင့် Hikosaka, 2009b) ။ တဦးတည်းသောလူဦးရေအကြိုးဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များအားဖြင့် inhibited, ကုဒ်သွင်းသော်လည်းအဖြစ်နေသည် စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုး (ပုံ 4A) ။ ကုဒ်သွင်းသော်လည်းအဖြစ်တစ်ဦးကစက္ကန့်တွင်လူဦးရေ, အလားတူအမူအကျင့်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးအကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေသည် စိတ်ခွန်အားနိုး salience (ပုံ 4B) ။ ထိုအလူဦးရေအများအပြားတွင် neuron နှစ်ခုစလုံးအတွက်ဟောကိန်းများဆုချခြင်းနှင့်ဆန္ဒရှိမှအထိခိုက်မခံနေသောခေါင်းစဉ်: ကြိုးဖြစ်ရပ်များဟောကိန်းထုတ်ထက်ပိုပြီးကြိုးဖြစ်ကြပြီးသည့်အခါဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များ (ခန့်မှန်းတာထက်ပိုပြီးဆန္ဒရှိကြသောအခါသူတို့ကိုတုံ့ပြန်Matsumoto နှင့် Hikosaka, 2009b) ။ ဤသည် (မိမိတို့၏ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုအမှန်တကယ်သူတို့ဆုလာဘ်နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောကုန်ကြမ်းအာရုံခံ input ကိုသို့မဟုတ် generalized အသင်းအဖွဲ့များအဖြစ် Non-တိကျတဲ့အချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ဖြစ်နိုင်ခြေထွက်အာဏာရ, ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များအကြောင်းကိုဟောကိန်းများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြသSchultz, 2010) ။ အဲဒီနှစျခုလူဦးရေဟာသူတို့ရဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် code တွေရဲ့အသေးစိတ်သဘာဝသို့သော်ကွာခြား။ DA အာရုံခံ coding စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များ (၏ပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့်ဆုလာဘ်များနှင့်အပျော့စားစိတ်လှုပ်ရှား၏ပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့်ခိုင်ခံ့တားစီးအပါအဝင်တိကျမှန်ကန်တဲ့ခန့်မှန်းအမှား signal ကိုဝှက်ပုံ 4Aညာဘက်) ။ ဆနျ့ကငျြ, DA အာရုံခံ coding စိတ်ခွန်အားနိုး salience (သူတို့ပျက်ကွက်အခါအဓိကဖြစ်ရပ်များပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသော်လည်းမရသောအခါကိုတုံ့ပြန်ပုံ 4B(arousal ၏သီအိုရီအယူအဆတွေနှင့်အတူ, ညာ), တသမတ်တည်းlang နှင့် Davis က, 2006) [FOOTNOTE2] ။ အဲဒီနှစျခု DA အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေအဘို့သက်သေအထောက်အထားအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပျမ်းမျှထုံးစံ၌လေ့လာခဲ့ပြီးချိန်တွင်ပင်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။ ထို့ကြောင့် DA စနစ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပစ်မှတ်ထားလေ့လာမှုများ (phasic DA အချက်ပြမှုများကိုတားစီးနှင့်အတူဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များကုဒ်သွင်းတွေ့ရှိခဲ့Roitman et al ။ , 2008), စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနိုင်တဲ့ coding ဆင်တူ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အတူ (ယောရှုသည် et al ။ , 2008; Anstrom et al ။ , 2009), စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏နိုင်တဲ့ coding ဆင်တူ။
စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့် salience ကုဒ်သွင်းကွဲပြား dopamine အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေ
ဤရွေ့ကားမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက် DA အာရုံခံတွေကိုထက်ဆန္ဒရှိတွေကို (ဆုချဖို့ဦးစားကိုတုံ့ပြန်သည့်အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာဆန့်ကျင်ဖို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်Mirenowicz နှင့် Schultz, 1996) ။ နီးကပ်စွာဆန်းစစ်သောအခါ, သို့သော်, ထိုလေ့လာမှုပင် DA တန်ဖိုးနှင့် salience coding နှင့်အတူအပြည့်အဝကိုက်ညီသည်။ လေ့လာမှုတွင်ဆုလာဘ်များသည်ဖြစ်နိုင်ချေမြင့်မားသောရလဒ်များ (> 90%) နှင့်ရလဒ်များကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့်အတွက်ကြိုတင်သတိပေးချက်များသည်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ချေ (<10%) နှင့်ရလဒ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ထို့ကြောင့်တန်ဖိုးနှင့် salience-coding DA အာရုံခံများသည်တိကျသော၎င်းတို့၏ပျမ်းမျှအဆင့်ကိုတိကျစွာ encoding လုပ်ခြင်း၊
စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့် salience အချက်ပြမှုများ၏ functional အခန်းကဏ္ဍ
အတူတူယူအထက်ပါတွေ့ရှိချက်များ DA အာရုံခံစိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍများအတွက်သင့်လျော်သောမျိုးစုံလူဦးရေသို့ခွဲခြားဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ DA အာရုံခံ coding စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုး (dopamine အာရုံခံခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့လက်ရှိသီအိုရီနှင့်အတူကောင်းစွာ fitSchultz et al ။ , 1997; Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; ပညာရှိ 2004) ။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံပြီးပြည့်စုံခန့်မှန်းအမှား signal ကိုဝှက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်အတွက်ကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များဝှက်။ ဤအာရုံခံ (အကဲဖြတ်ပြုစုလျက်, တန်ဖိုးကိုသင်ယူများအတွက်သင့်လျော်သောမှတ်သားစရာများ signal ကိုပေးပုံ 5) ။ တစ်နှိုးဆွပြီးတော့ကျနော်တို့ကချဉ်းကပ်သင့်ပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ် DA အာရုံခံ coding တန်ဖိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဆိုပါကအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးက assign နှင့်အနာဂတ်တွင်ထပ်မံရှာလုပ်ရပ်တွေကိုလေ့လာပါ။ တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှု inhibited ခံရဖို့ DA အာရုံခံ coding တန်ဖိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်လျှင်ငါတို့သည်ကြောင့်ရှောင်ရှားပါကအနိမ့်တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်နှင့်အနာဂတ်တွင်ထပ်မံရှောင်ရှားရန်လုပ်ရပ်တွေကိုလေ့လာသင်ယူသင့်ပါတယ်။
စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုး, salience နှင့်သတိပေးနခွေငျးအချက်ပြမှုများ၏ယူဆချက်လုပ်ဆောင်ချက်များကို
ဆနျ့ကငျြ, DA အာရုံခံ coding စိတ်ခွန်အားနိုး salience (dopamine အာရုံခံခြင်းနှင့်အဓိကဖြစ်ရပ်များရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့၏သီအိုရီများနှင့်အတူကောင်းစွာ fitRedgrave et al ။ , 1999; Horvitz, 2000; ယောသပ်သည် et al ။ , 2003; Kapur, 2003) ။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံနှစ်ခုလုံးကိုအကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြပြီး, detect ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း, မြင့်မားသောအရေးပါမှု၏အခြေအနေများတုံ့ပြန်ရန်သင်ယူဖို့အာရုံကြော circuitry များအတွက်သင့်လျော်သောမှတ်သားစရာများ signal ကိုပေး, ကြားနေဖြစ်ရပ်များမှဆီးအတားမရှိတုံ့ပြန်မှုရှိသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ (သုံးထိုကဲ့သို့သောဦးနှောက်စနစ်များကိုစဉ်းစားမည်ပုံ 5) ။ ပထမဦးစွာအမြင်နှင့်အာရုံကို Orient ဘို့အာရုံကြောဆားကစ်ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ်များ, အမျိုးအစားအားလုံးကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ချိန်ညှိနေကြသည်။ ဥပမာ, ဆုလာဘ်များနှင့်ဆန္ဒရှိတွေကိုနှစ်ဦးစလုံး (ပိုမိုထိရောက်စွာကြားနေတွေကိုထက် orienting တုံ့ပြန်မှုကိုဆွဲဆောင်lang နှင့် Davis က, 2006; Matsumoto နှင့် Hikosaka, 2009b; Austin နှင့် Duka, 2010) ။ ဒုတိယအချက်အနေနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအခြေအနေများနှင့်ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေများသည်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်လုပ်ဆောင်မှုရွေးချယ်ရေးအတွက်အာရုံကြောစနစ်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်သားထားရန်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်၊ ထိတွေ့မှုလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ရန်ပconflictိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ရလဒ်ကိုမှတ်မိရန်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်တို့လိုအပ်သည် (Bradley et al ။ , 1992; Botvinick et al ။ , 2001; Savine et al ။ , 2010) ။ တတိယအချက်အကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများလုပ်ရပ်များဝါဒီများကိုစွမ်းအားများနှင့်သူတို့ကစနစ်တကျကွပ်မျက်ခံရဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ယေဘုယျလှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုတိုးလိုအပ်သည်။ အမှန်စင်စစ် DA အာရုံခံ High-တန်ဖိုးကိုရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမော်တာစွမ်းဆောင်ရည် (သို့တာဝန်တောင်းဆိုချက်များကို၏အသိပညာဘာသာပြန်ဆိုအတွက်အရေးပါများမှာBerridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Mazzoni et al ။ , 2007; ထို et al ။ , 2007; Salamone et al ။ , 2007).
အာရုံခံတွေကိုသတိပေးနခွေငျးဖွငျ့ Dopamine စိတ်လှုပ်ရှား
စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့် salience ကုဒ်သွင်းသူတို့ရဲ့အချက်ပြအပြင်, DA အာရုံခံအများစုလည်းတိုက်ရိုက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူဆက်နွယ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအာရုံခံဖြစ်ရပ်များအများအပြားအမျိုးအစားများမှတုံ့ပြန်မှုကွဲပါပြီ။ ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှုတိုက်ရိုက်အာရုံခံ input ကို, အံ့သြစရာ, အသစ်အဆန်း, arousal, အာရုံစူးစိုက်မှု, salience, General နှင့် Pseudo-အေးစက်အပါအဝင်အာရုံကြောနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ၏နံပါတ်, (အပေါ်မူတည်မှဆိုခဲ့ကြပြီSchultz, 1998; Redgrave et al ။ , 1999; Horvitz, 2000; Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005; Redgrave နှင့် Gurney, 2006; ယောရှုသည် et al ။ , 2009a; Schultz, 2010).
ဤတွင်ငါတို့သည်တစ်ခုတည်းနောက်ခံအချက်ပြ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဤအ DA တုံ့ပြန်မှုဤအတွေးအခေါ်များနှင့်အကောင့် synthesize ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် signal ကိုသတိပေးနခွေငျး (ပုံ 5) ။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်း Schultz (ကအသုံးပြုခဲ့သည် '' သတိပေးနခွေငျး ''Schultz, 1998) အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းဖြစ်ရပ်များများအတွက်ယေဘုယျသက်တမ်းအဖြစ်။ ဤတွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးထက်ပိုသောတိကျတဲ့အဓိပ္ပာယ်အတွက်အသုံးပြုရန်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုသတိပေးနခွေငျးဖြစ်ရပ်အားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ရိုးရှင်းသောထိုကဲ့သို့သောယင်း၏တည်နေရာအဖြစ်အင်္ဂါရပ်များ, အရွယ်အစားနှင့်အာရုံခံနည်းလမ်းသုံးပြီး၎င်း၏အလားအလာအရေးပါမှုတစ်ခုလျင်မြန်စွာအကဲဖြတ်အပေါ်အခြေခံပြီးအာရုံကိုဖမ်းယူတဲ့မမျှော်လင့်ဘဲအာရုံခံ cue ဆိုလို။ ထိုသို့သောသတိပေးနခွေငျးဖြစ်ရပ်များမကြာခဏသူတို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်၎င်းတို့၏တိကျသောအဓိပ္ပာယ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ချက်ချင်းအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်။ (ထို့ကြောင့် DA သတိပေးနခွေငျးအချက်ပြမှုများကိုပုံမှန်အားဖြင့်တိုတောင်းသော latency မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏ကြမ်းတမ်းသော features တွေအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အကောင်းဆုံးထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှု orienting အဖြစ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြတယ်Schultz နှင့် Romo, 1990; ယောရှုသည် et al ။ , 2009a; Schultz, 2010) ။ ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုရှည် latency မှာဖြစ်ပေါ်ရသော DA အာရုံခံအခြားစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်ပြမှုများမတူဘဲ၌တည်ရှိ၏, အကောင့်ထဲသို့လှုံ့ဆော်မှုများ၏တိကျသောဝိသေသလက္ခဏာကို ယူ. , အကောင်းဆုံးထိုကဲ့သို့သောချဉ်းကပ်သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (အဖြစ် considered အပြုအမူလုပ်ရပ်များဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြတယ်Schultz နှင့် Romo, 1990; ယောရှုသည် et al ။ , 2009a; Schultz, 2010).
DA သတိပေးနခွေငျးတုံ့ပြန်မှုဟာ SNc နှင့် VTA တစ်လျှောက်လုံး DA အာရုံခံ၏ 60-90% အတွက်ထင်ရှားတဲ့ပေါကျကှဲစိတ်လှုပ်ရှားကျလာသောအရာထိုကဲ့သို့သောမျှော်လင့်မထားတဲ့အလင်းတောက်ခြင်းနှင့်အာရုံကလစ်အဖြစ်အံ့သြစရာအာရုံခံဖြစ်ရပ်များ, (နေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်Strecker နှင့် Jacobs, 1985; Horvitz et al ။ , 1997; Horvitz, 2000()ပုံ 6A) ။ ဤရွေ့ကားသတိပေးနခွေငျးတုံ့ပြန်မှုဟာစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်အာရုံကိုဖမ်းယူရသောဖို့ဒီဂရီရောင်ပြန်ဟပ်ဟန်; သူတို့အာရုံကိုတခြားနေရာပါဝင်နေသည်ဆိုပါကတစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှု, ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းအချိန်များတွင်ဖြစ်ပေါ်လျှင်လျော့ချခြင်းသို့မဟုတ်အိပ်နေစဉ်နေကြသည် (Schultz, 1998; Takikawa et al ။ , 2004; Strecker နှင့် Jacobs, 1985; Steinfels et al ။ , 1983) ။ ဥပမာတစ်ခုမမျှော်လင့်ဘဲကလစ် နှိပ်. အသံကကြောင်တစ်ကောင်တိတ်ဆိတ်နိုးတစ် passive ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်ကြောင်တစ်ကောင်လိုမျိုး, တစ်ဦးကြွက်အမဲနို့တိုက်ကျွေးမှု, မြောကျမတို့ petted ခံအဖြစ်အာရုံစိုက်မှု-တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်နေသည်လာသောအခါအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ရှိပါတယ်တဲ့အခါထင်ရှားတဲ့ DA ကွဲ evokes စမ်းသပ်အသုံးပြုပုံဒါအပေါ် (Strecker နှင့် Jacobs, 1985()ပုံ 6A) ။ အလားတူပင် DA တုံ့ပြန်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းပေမယ့် (မိမိတို့၏အသစ်အဆန်းကြောင့်သတိပေးနခွေငျးဖြစ်ကြောင်းအာရုံခံဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ပြင်းစွာတိုက်Ljungberg et al ။ , 1992; Schultz, 1998) ။ ဝတ္ထုရေးလှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှု (orienting ၏လေ့တွေနဲ့အပြိုင်အတွက်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာကဲ့သို့ဤတုံ့ပြန်မှု habituateပုံ 6B) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ, အံ့သြစရာများနှင့်ဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များ (မြစ်အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦများအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်ကျလာသောLisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005) နှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ပုံစံသွင်းသွင်းတဲ့ထုံးစံ၌ DA-related ဦးနှောက်ဆားကစ်ကိုသက်ဝင် (Zink et al ။ , 2003; Davidson et al ။ , 2004; Duzel et al ။ , 2010).
သတိပေးနခွေငျးဖြစ်ရပ်များမှ Dopamine အာရုံခံဆဲလျ excitatory တုံ့ပြန်မှု
DA သတိပေးနခွေငျးတုံ့ပြန်မှုကိုလည်း motivationally အဓိကဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်သစ်များပေးအလားအလာရှိသည်သောမျှော်လင့်မထားတဲ့အာရုံခံတွေကိုအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ တိုတောင်းတဲ့-အောင်းနေချိန်သတိပေးနခွေငျး signal ကိုများအတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဤတုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ဘဲ Non-ရွေးချယ်နေသောခေါင်းစဉ်: သူတို့ကထိုသို့မျှသာမဆိုနှိုးဆွခြင်းဖြင့်အစပျိုးနေကြတယ် တူခြင်း ယင်းအကြံအစည်အလွန်အနည်းငယ်ပင်လျှင် motivationally အဓိက cue, (General ဟုခေါ်သောဖြစ်စဉ်) (Schultz, 1998) ။ ရလဒ်အဖြစ် DA အာရုံခံမကြာခဏနှစ်ခုအချက်ပြမှုများ၏အရောအနှောနဲ့လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်: အစာရှောင်သတိပေးနခွေငျး signal ကိုအဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကုဒ်သွင်း အလားအလာ အရေးကြီးသော, နှင့်၎င်း၏ကုဒ်သွင်းတဲ့ဒုတိယအချက်ပြမှု အမှန်တကယ် ကြိုးသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိအဓိပ္ပာယ်ကို (Schultz နှင့် Romo, 1990; Waelti et al ။ , 2001; Tobler et al ။ , 2003; နေ့ et al ။ , 2007; Kobayashi နှင့် Schultz, 2008; Fiorillo et al ။ , 2008; Nomoto et al ။ , 2010) ((ကြည့်ရှုKakade နှင့်ဒါယန်း, 2002; ယောရှုသည် et al ။ , 2009a; Schultz, 2010)) ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။ ဥပမာတစ်ခုမှာပြထားတဲ့ DA အာရုံခံ coding စိတ်ခွန်အားနိုး salience အစုတခုတှငျတှေ့မွငျနိုငျသညျ ပုံ 6C (Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010a) ။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံဆုလာဘ်များနှင့်ဆန္ဒရှိတွေကိုအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့မှာလည်းကြားနေ cue အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကြားနေ cue စိတ်ခွန်အားနိုးရလဒ်များနှင့်အတူတွဲပေမယ့်ဆုလာဘ်များနှင့်ဆန္ဒရှိတွေကိုတစ်ဦး (အလွန်အနည်းငယ်) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံအစည်ရှိလုပ်ခဲ့တယ်ဖူးခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားသတိပေးနခွေငျးတုံ့ပြန်မှုနီးကပ်စွာတုံ့ပြန်မှုနောက်ထပ်ကြောင့်ဆနျးစစျဖို့ orienting ဖြစ်ပေါ်နှင့်၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တစ်အာရုံခံ cue ရဲ့စွမ်းရည်မှချည်ထားသောပုံရသည်။ ဒါဟာသုံးထင်ရှားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ပထမဦးစွာအာရုံစိုက်မိအောင်လုပ်နိုင်တယ်တုံ့ပြန်မှုသာ (မိမိတို့၏အဓိပ်ပာယျသတျမှတျဆန်းစစ်ခံရဖို့ရှိသည်သောအာရုံခံတွေကိုအဘို့မဟုတ်, ဤကဲ့သို့သောအသီးဖျော်ရည်သို့မဟုတ် airpuffs ၏ပေးပို့အဖြစ်ပင်ကိုစရိုက်ကကြိုးသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များပေါ်ပေါက်Schultz, 2010) ။ ဒုတိယအချက်မှာတစ် cue အလားအလာအရေးကြီးပါတယ်နှင့်တုံ့ပြန်မှု orienting ဖြစ်ပေါ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်, မ cue လက်မှာတာဝန်မှဆီလျှော်သည်နှင့်တုံ့ပြန်မှု (orienting ဖြစ်ပေါ်ဖို့ပျက်ကွက်သောအခါမှသာဖြစ်ပေါ်တုံ့ပြန်မှုသတိပေးနခွေငျးSchultz နှင့် Romo, 1990) ။ တတိယအချက်သတိပေးနခွေငျးတုံ့ပြန်မှုတွေကိုအာရုံစိုက်မှုတစ်ခုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်မယ်လို့သည့်အခါအခြေအနေများတွင်တိုးမြှင့်ကြသည် - သူတို့တစ်မျှော်လင့်မထားတဲ့အချိန်ကသို့မဟုတ်အဝေးကြည့်၏ဗဟို (ကနေပေါ်လာသည့်အခါBromberg-မာတင် et al ။ , 2010a) ။ ထို့ကြောင့်စိတ်ခွန်အားနိုးတွေကိုသူတို့ချက်ချင်း Oriental တုံ့ပြန်မှုနှင့် generalized DA သတိပေးနခွေငျးတုန့်ပြန်မှုတွေခန့်မှန်းရခက်အချိန်ကိုက်နှင့်အတူပေးအပ်ကြသောအခါ - ကြားနေတွေကိုအပါအဝင်အားလုံးတွေကိုအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် (ပုံ 6C), အနက်ရောင်။ သူတို့ရဲ့အချိန်ကိုက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားလျှင်မူကား - ထိုတွေကိုမရှိတော့ (တစ်ခုသတိပေးနခွေငျးတုန့်ပြန်ကျလာသောဥပမာ - အဘို့, forewarning အားဖြင့်တွေကိုပေါ်လာရှေ့တော်၌ "တရားခွင်စတင် cue" အတူဘာသာရပ်များတဦးတည်းဒုတိယတင်ပြပုံ 6D, မီးခိုးရောင်)။ ခန့်မှန်းရခက်အချိန်ကိုက်ရှိပြီးတုံ့ပြန်မှု (orienting evokes သောစမ်းသပ်မှု၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရပ် - မယ့်အစား, အသတိပေးနခွေငျးတုန့်ပြန်သည့်တရားခွင်စတင် cue ဆီသို့ပြောင်းရွှေ့ရသည်ပုံ 6D), အနက်ရောင်။
အချက်ပြသတိပေးနခွေငျး DA အာရုံခံဆဲလျထုတ်ပေးသောနောက်ခံယန္တရားကဘာလဲ? တဦးတည်းအယူအဆ (ကအပြည့်အဝလူမျိုးအတန်းအစားခွဲခြားမှုထားပြီးရှေ့တော်၌လှုံ့ဆော်မှုများမျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုကုဒ်သွင်း, သတိပေးနခွေငျးတုံ့ပြန်မှုတိုတောင်းသော latency မှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရိုးရှင်းစွာသမားရိုးကျဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများဖြစ်ပါတယ်Kakade နှင့်ဒါယန်း, 2002) ။ ပိုများသောမကြာသေးမီသက်သေအထောက်အထားများ, သို့သော်, (သတိပေးနခွေငျးအချက်ပြမှုများကိုသမားရိုးကျ DA ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကနေကွဲပြားယန္တရားကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့နိုင်အကြံပြုSatoh et al ။ , 2003; Bayer နှင့် Glimcher, 2005; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010a; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010c; Nomoto et al ။ , 2010) ။ အများစုမှာသိသိသာသာ, တရားခွင်စတင် cue ဖို့သတိပေးနခွေငျးတုန့်ပြန်ကြိုးတာဝန်များကိုဖို့ကန့်သတ်မထားဘူး, မဆုလာဘ်ကိုအပ်ထားတဲ့အတွက်ဆန္ဒရှိတာဝန် (စဉ်အတွင်းတန်းတူအစှမျးသတ်တိရှိနိုင်ပါသည်ပုံ 6C, D ကို, အောက်ခြေ "ဆန္ဒရှိတာဝန်") ။ ဒါဟာတူညီတဲ့အာရုံခံအတွက်သမားရိုးကျ DA ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုး task ကဆန္ဒရှိတာဝန် (ထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားမျှော်မှန်းတန်ဖိုးထက်ရှိကြောင်းအချက်ပြသော်လည်းဖြစ်ပေါ်Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010a) ။ သူတို့ DA အာရုံခံ (coding စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့် salience နှစ်ဦးစလုံး၏အများစုအတွက်ပေါ်ပေါက်နေသောကြောင့်ဤအအာရုံစိုက်မိအောင်လုပ်နိုင်တယ်အချက်ပြမှုများ, သက်သက်သာတန်ဖိုးကိုနိုင်တဲ့ coding သို့မဟုတ် salience နိုင်တဲ့ coding ၏သက်သက်သာပုံစံတစ်ပုံစံမဟုတ်Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010a) ။ တစ်ဦးကစက္ကန့် dissociation DA အာရုံခံအတိတ်ဆုလာဘ်ရလဒ်များ (များ၏မှတ်ဉာဏ်အပေါ် အခြေခံ. အနာဂတ်ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသောလမ်းအတွက်မြင်နိုင်ပါသည်Satoh et al ။ , 2003; Bayer နှင့် Glimcher, 2005) ။ သမားရိုးကျ DA ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကိုတိကျမှန်ကန်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းဘို့ optimized ရှည်-timescale မှတ်ဉာဏ်သဲလွန်စကထိန်းချုပ်ထားကြသည်သွားရမည်အကြောင်း, တရားခွင်စတင် cue ဖို့သတိပေးနခွေငျးတုံ့ပြန်မှုချက်ချင်း Oriental တုံ့ပြန်မှု (တှငျတှေ့မွငျသောအပုံနဲ့ဆင်တူတဲ့သီးခြားမှတ်ဉာဏ်သဲလွန်စကထိန်းချုပ်ထားကြသည်Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010c) ။ တစ်ဦးကတတိယ dissociation ကဤအချက်ပြသည့် DA အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေကိုဖြတ်ပြီးဖြန့်ဝေသောလမ်းအတွက်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ သမားရိုးကျ DA ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများ (နှင့်အခြားမမျှော်လင့်ဘဲအချိန်ကုန်ဆုံးတွေကိုမှ) အရုံးတင်စစ်ဆေးစတင် cue မှတုံ့ပြန်မှုသတိပေးနခွေငျး, အ ventromedial SNc အတွက်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းသွားရမည်အကြောင်း (အ SNc တစ်လျှောက်လုံးထုတ်လွှင့်နေကြသည်Nomoto et al ။ , 2010).
သမားရိုးကျဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများဤ dissociations မတူဘဲ, DA သတိပေးနခွေငျးအချက်ပြမှုများ (ထိုသတိပေးနခွေငျးဖြစ်ရပ်မှ Orient နဲ့ချဉ်းကပ်တုံ့ပြန်မှုများ၏မြန်နှုန်းဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြတယ်Satoh et al ။ , 2003; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010a; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010c) ။ ဒါကသတိပေးနခွေငျးအချက်ပြမှုများအလားအလာအရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အစာရှောင်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုကလှုံ့ဆျောတဲ့အာရုံကြောဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ထိုအချိန်တွင်ကံမကောင်းအတော်လေးနည်းနည်း '' အရေးကြီးသော '' အဖြစ်အတိအကျအဘယ်အရာကိုဖြစ်ရပ်များကဤဖြစ်စဉ်ကိုရယူထားသောအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များမှအညီအမျှထိခိုက်မခံတဲ့တုံ့ပြန်မှုသတိပေးနခွေငျးလဲ? သတိပေးတုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်တွေကိုဆင်တူသို့မဟုတ်ကြောင့်ဆုလာဘ်နှင့် (အတူတူပင်အာရုံခံနည်းလမ်းမျှဝေအားဖြင့်ဥပမာ) ဆန္ဒရှိတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆင်တူကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ပေါ်ပေါက်ဖို့လူသိများကြသည်။ သို့သော်ထိုသို့သတိပေးနခွေငျးတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာဆန္ဒရှိတွေကိုဆင်တူကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိသေးလူသိများမဟုတ်ပါဘူး။
dopamine ၏ functional အခန်းကဏ္ဍအချက်ပြမှုများကိုသတိပေးနခွေငျး
ကျနော်တို့မြင်ကြပြီအမျှသတိပေးနခွေငျးအချက်ပြမှုများကိုစိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့် salience အချက်ပြမှုများကနေကွဲပြားယန္တရားကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခံရဖို့များပါတယ်။ သို့သျောလညျးသတိပေးနခွေငျးအချက်ပြမှုများ (DA အာရုံခံ coding စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့် salience နှစ်ဦးစလုံးမှစေလွှတ်လျက်, ထို့ကြောင့်တန်ဖိုးနှင့် salience အချက်ပြမှုများမှအလားတူထုံးစံ၌ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အပြုအမူထိန်းညှိဖို့များပါတယ်နေကြတယ်ပုံ 5).
DA အာရုံခံ coding စိတ်ခွန်အားနိုး salience ထံသို့စေလွှတ်အချက်ပြမှုများကိုသတိပေး (၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အစီအစဉ်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ငှါ, သတိပေးနခွေငျးနှိုးဆွဖို့သိမြင်အရင်းအမြစ်များထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအာရုံစိုကျ၏ Orient ကိုထောကျပံ့များနှင့်ထိရောက်စွာဒီအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်လှုံ့ဆျောမှုအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်မယ်လို့ပုံ 5) ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သတိပေးနခွေငျးအဖြစ်အပျက်၏ထောက်လှမ်းရန်ဦးဆောင်သည့်လုပ်ရပ်များအားဖြည့်ခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းသက်ရောက်မှုကတဆင့်ပေါ်ပေါက်နိုင်ဘူး။ ဒီ function အခန်းကဏ္ဍတုံ့ပြန်မှုနှင့်သတိပေးနခွေငျးနှိုးဆွဖို့, တိုတောင်း-အောင်းနေချိန် DA အာရုံခံဆဲလျတုံ့ပြန်မှုအာရုံစိုက်မှုများ၏အရှေ့တိုင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုသီအိုရီနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု, arousal, သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့၏တိုးမြှင့်ခြင်း, ချက်ချင်းအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု (သတိပေးနခွေငျး DA အကြားဆက်စပ်မှုနှင့်အတူကောင်းစွာကိုက်ညီRedgrave et al ။ , 1999; Horvitz, 2000; ယောသပ်သည် et al ။ , 2003; Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005; Redgrave နှင့် Gurney, 2006; ယောရှုသည် et al ။ , 2009a).
DA အာရုံခံ coding စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးအတွက်အချက်ပြသတိပေးနခွေငျး၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှင်းပြဖို့ပိုပြီးခက်ခဲသည်။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံရှာ, ရလဒ်များ၏အကဲဖြတ်နှင့်တန်ဖိုးကိုသင်ယူမှုများအတွက်စံပြဖြစ်ကြောင်းစိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးအချက်ပြမှုများကို transmit; သေးသူတို့သည်လည်းယင်းကဲ့သို့မျှော်လင့်မထားတဲ့ကလစ် နှိပ်. အသံနှင့်ဆန္ဒရှိစမ်းသပ်မှုတွေစတင်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ရပ်များသတိပေးနခွေငျးဖွငျ့စိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးဆလမ်းကြောင်းအရ (ပုံ 5), ဒီအပြုသဘောတန်ဖိုးကိုတာဝန်ပေးအပ်ခံရဖို့နှင့်ဆုလာဘ်ဆင်တူတဲ့ထုံးစံ၌ဆည်းကပ်ခံရဖို့ဖြစ်ရပ်များသတိပေးနခွေငျးစေမညျ! ပထမတစ်ချက်မှာ surprising နေစဉ်, သတိပေးနခွေငျးဖြစ်ရပ်များအပြုသဘောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အဖြစ်ကုသနိုင်သံသယဖို့အကြောင်းပြချက်လည်းမရှိ။ သတိပေးအချက်ပြတဲ့အလားအလာအရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်ပေါ်ပေါက်နှင့်ဤအရပ်ကြောင်းဖြစ်ရပ်ထိန်းချုပ်ဖို့အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ပထမဦးဆုံးအခွင့်အလမ်းများကိုအကြောင်းကြောင်းပထမဦးဆုံးသတိပေးသည်။ သတိပေးနခွေငျးတွေကိုရရှိနိုင်ပါက, motivationally အဓိကဖြစ်ရပ်များကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, ဟောကိန်းထုတ်နှင့်ကြိုတင်အဘို့ပြင်ဆင်; သတိပေးနခွေငျးတွေကိုပျက်ကွက်လျှင်, motivationally အဓိကဖြစ်ရပ်များအမြဲမမျှော်လင့်တဲ့အံ့သြစရာအဖြစ်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်လူသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုမကြာခဏ (ဘယ်မှာ, အကြိုးဆန္ဒရှိနှင့်ပင် motivationally ကြားနေအာရုံခံဖြစ်ရပ်များကိုကြိုတင်လေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာများအတွက်ဦးစားပေးဖော်ပြBadia et al ။ , 1979; Herry et al ။ , 2007; Daly, 1992; ဝါးနှင့်ဟို, 1994) နှင့်အများအပြား DA အာရုံခံ (ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့အမူအကျင့် preference ကိုအချက်ပြBromberg-မာတင်နှင့် Hikosaka, 2009) ။ DA သတိပေးနခွေငျးအချက်ပြမှုများအလားအလာအရေးကြီးသောအာရုံခံတွေကိုကြိုတင်မျှော်မှန်းနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာမှအပြုသဘောတန်ဖိုးကိုတာဝန်ပေးဖို့ဤဦးစားပေးထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ။
စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုး, salience နှင့်သတိပေးနခွေငျးအာရုံကြောလမ်းကြောင်း
ဤရွေ့ကား, ကျနော်တို့ (စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience ဝှက်ထားတဲ့နှစ်မျိုးသို့ DA အာရုံခံ ခွဲ. စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍများအတွက်သင့်လျော်သောများမှာပါပြီပုံ 5) ။ ဘယ်လိုဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံကြောလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဒီအယူအဆရေးရာအစီအစဉ်ကိုမြေပုံသနည်း ဤတွင်ကျနော်တို့ (ကကဤအာရုံခံ၏ခန္ဓာဗေဒနေရာများအကြောင်းကိုအယူအဆ, မြစ်အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦမှ၎င်းတို့၏စီမံကိန်းနှင့်၎င်းတို့၏စိတ်ခွန်အားနိုးအချက်ပြမှုများ၏သတင်းရင်းမြစ်အဆိုပြုကိန်းဂဏန်းများ 6,, 77).
ယူဆချက်ခန္ဓာဗေဒတည်နေရာနဲ့ dopamine ၏စီမံချက်များစိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့်အာရုံခံ coding salience
အာရုံခံ coding တန်ဖိုးနှင့် salience ၏ခန္ဓာဗေဒနေရာများ
မကြာသေးမီကလေ့လာမှု SNc နှင့် VTA ၏ lateralmost အပိုင်း (အပါအဝင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် midbrain အတွက် DA ဆုလာဘ်များနှင့်ဆန္ဒရှိအချက်ပြမှုများ၏တည်နေရာတစ်ခုသို့ဆက်စပ်Matsumoto နှင့် Hikosaka, 2009b) ။ စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience အချက်ပြမှုများအဖြစ်ခန္ဓာဗေဒ gradient ကို၌ဤဒေသအနှံ့ဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။ စိတ်ခွန်အားနိုး salience အချက်ပြမှုများအဆိုပါ dorsolateral SNc (မှာရှိတဲ့အာရုံကြောဆဲလ်ပိုမိုလေ့တွေ့ရှိခဲ့သည်စဉ်စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးအချက်ပြမှုများ, အ ventromedial SNc နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် VTA အတွက်အာရုံခံပိုမိုလေ့တွေ့ရှိခဲ့သည်ပုံ 7B) ။ ဤသည် (DA ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုနိုင်တဲ့ coding ကတော့ ventromedial SNc အတွက်အပြင်းထန်ဆုံးကြောင်းအစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Nomoto et al ။ , 2010) ဆန္ဒရှိစိတ်လှုပ်ရှား (အသေးစိတ်နောက်ပိုင်းတွင်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လေ့နေစဉ်Mirenowicz နှင့် Schultz, 1996) ။ တခြားလေ့လာမှုပိုမို medial midbrain စူးစမ်းခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ (အသေးစိတ် ventrally တည်ရှိသောခံရဖို့ဆန္ဒရှိစိတ်လှုပ်ရှားများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူပေမယ့်, excitatory နှင့်၎င်းတို့၏နေရာများတွင်မျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်နှင့်အတူ inhibitory ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုအရောအနှောကိုတွေ့Guarraci နှင့် Kapp, 1999; Brischoux et al ။ , 2009()ပုံ 7C).
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆအရ, DA အာရုံခံ coding စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုး (ချဉ်းကပ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဒေသများမှပရောဂျက်များနှင့်လုပ်ရပ်များ avoidance, ရလဒ်များ၏အကဲဖြတ်နှင့်တန်ဖိုးကိုသင်ယူသင့်ပါတယ်ပုံ 5) ။ အဆိုပါ ventromedial prefrontal cortex မှအမှန်မှာထို ventromedial SNc နှင့် VTA စီမံကိန်းကို (ဝီလျံနှင့် Goldman-Rakic, 1998) (ထို orbitofrontal cortex (OFC) အပါအဝင်Porrino နှင့် Goldman-Rakic, 1982()ပုံ 7A) ။ အဆိုပါ OFC တသမတ်တည်း (functional ဖြစ်စေပုံရိပ်လေ့လာမှုများအတွက်တန်ဖိုးကိုနိုင်တဲ့ coding ထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးAnderson က et al ။ , 2003; အသေးစား et al ။ , 2003; Jensen et al ။ , 2007; Litt et al ။ , 2010) နှင့်တစ်ခုတည်းအာရုံခံဆဲလျအသံသွင်း (Morrison နှင့် Salzman, 2009; Roesch နှင့် Olson, 2004) ။ အဆိုပါ OFC (ရွေးချယ်မှု options များအကဲဖြတ်ရန်မှထင်နေသည်Padoa-Schioppa, 2007; Kable နှင့် Glimcher, 2009), အန်ကုက်လုပ်ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ချက်များ (Schoenbaum et al ။ , 2009), နှင့်သင်ယူခြင်းစဉ်အတွင်းထိုအမျှော်မှန်းချက်ကို update (ဝေါ်လ်တန် et al ။ , 2010) ။ ထို့ပြင် OFC (အနုတ်လက္ခဏာဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားများမှသင်ယူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်Takahashi et al ။ , 2009) Value-coding DA အာရုံခံအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးသော (ပုံ 4).
ထို့အပြင်နျူကလိယအပါအဝင် ventral striatum ဖို့ dopaminergic midbrain စီမံကိန်း၏ medial ဝေမျှ shell ကို (NAc shell ကို) accumbens (Haber et al ။ , 2000()ပုံ 7A) ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှု NAc shell ကို (အရသာရလဒ်များများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးကုဒ်သွင်း phasic DA အချက်ပြမှုများအားလက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်းသရုပ်ပြRoitman et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါ NAc shell ကိုသို့ DA မူးယစ်ဆေးတိုက်ရိုက်ပြုတ်ရည်ပြင်းပြင်းထန်ထန် (အားဖြည့်သည်ကို ထောက်. ဤရွေ့ကားအချက်ပြမှုများတန်ဖိုးကိုသင်ယူမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်Ikemoto, 2010) အခွံမှ DA input ကိုလျော့ချကြောင်းကုသခြင်းကိုမနှစ်သက်သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်စဉ် (လျူ et al ။ , 2008) ။ တဦးတည်းအတွက်အသိပေးချက်ရှည်လျား timescales (မိနစ်) ကျော် NAc shell ကို DA လွှတ်ပေးရန်၏လေ့လာမှုများ salience နိုင်တဲ့ coding (ဥပမာ (နဲ့အတူတန်ဖိုးကိုနိုင်တဲ့ coding နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူအချို့သောတသမတ်တည်း, ရောထွေးရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်Bassareo et al ။ , 2002; Ventura et al ။ , 2007)) ။ ဤသည်မှာတန်ဖိုးကိုအချက်ပြမှုများအဆိုပါ NAc shell ကိုအတွင်းတိကျသောနေရာများမှကန့်သတ်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ အထူးသ, အ NAc shell ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများ (အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဘို့အထူးပြုနေကြတယ်Reynolds ကနှင့် Berridge, 2002), နှစ်ဦးစလုံး DA အာရုံခံဆီက input လိုအပ်သည့် (Faure et al ။ , 2008).
နောက်ဆုံးတွင် SNc ၏အတိုင်းအတာတစ်လျှောက်လုံး DA အာရုံခံ (အ dorsal striatum မှလေးလံသောစီမံချက်များပေးပို့Haber et al ။ , 2000), (ပု dorsal striatum DA အချက်ပြမှုများ coding စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့် salience နှစ်ဦးစလုံးခံယူစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းပုံ 7A) ။ DA အာရုံခံ coding စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုး (ထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-တုံ့ပြန်မှုအလေ့အထများ၏သင်ယူမှုအဖြစ်တန်ဖိုးကိုသင်ယူမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက် striatal circuitry များအတွက်စံပြမှတ်သားစရာများ signal ကိုပေးလိမ့်မယ်Faure et al ။ , 2005; ယဉ်များနှင့် Knowlton, 2006; Balleine နှင့် O'Doherty, 2010) ။ ဤအ DA အာရုံခံကွဲတဲ့အခါသူတို့ဆုလာဘ်ရလဒ်များရဖို့ရန်သင်ယူဖို့တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းထိတွေ့ဆက်ဆံလိုရှိ၏ သူတို့ခေတ္တရပ်တန့်ပြီးသောအခါသူတို့ဆန္ဒရှိရလဒ်များ (ရှောင်ရှားရန်သင်ယူဖို့သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမယ်လို့ပုံ 2) ။ အမှန်မှာထို striatal လမ်းကြောင်းဆုလာဘ်များနှင့်ဆန္ဒရှိအပြောင်းအလဲနဲ့ (အဘို့ကြိုးစားအားထုတ်အတိအကျဒီဌာနခွဲကိုလိုက်နာကြောင်းမကြာသေးမီသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်Hikida et al ။ , 2010) ။ ဤလမ်းကြောင်းအတွက်အာရုံခံအပြုအမူကာလအတွင်းကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များတုံ့ပြန်ပုံကို, သို့သော်, မသိရသေးပေ။ အနည်းဆုံးတစ်ဖွဲ့လုံးက dorsal striatum အတွက်အာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင် (အခြို့သောအကြိုးများနှင့်ကွဲပြားမူအကငျြ့အတွက်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များတုံ့ပြန်Ravel et al ။ , 2003; Yamada et al ။ , 2004, 2007; ယောရှုသည် et al ။ , 2008).
စိတ်ခွန်အားနိုး salience အချက်ပြမှုများ၏ခရီးစဉ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆအရ, DA အာရုံခံ coding စိတ်ခွန်အားနိုး salience (ဦးနှောက် Oriental တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများ, သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့, နှင့်အထွေထွေလှုံ့ဆျောမှုမှပရောဂျက်သင့်တယ်ပုံ 5) ။ အမှန်မှာထို dorsolateral midbrain အတွက် DA အာရုံခံ (dorsal နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တိုကျရိုကျ cortex ဖို့ပရိုဂျက်ပေးပို့ဝီလျံနှင့် Goldman-Rakic, 1998()ပုံ 7Aစိတ်ခွန်အားနိုးရလဒ်များ (အကြားမှတ်ဉာဏ်, သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်, ထိုကဲ့သို့သောအာရုံကိုရှာဖွေရေးအဖြစ်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့်), ဒေသဝီလျံနှင့် Castner, 2006; Lee နဲ့ Seo, 2007; ပညာရှိ 2008; Kable နှင့် Glimcher, 2009; Wallis နှင့် Kennerley, 2010) ။ Dorsolateral prefrontal သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာတင်းတင်းကျပ်ကျပ် (DA အဆင့်ဆင့်အားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်Robbins နှင့် Arnsten, 2009) နှင့် phasic DA အာရုံခံဆဲလျ activation အပေါ်မူတည်မှဆိုခဲ့ကြသည် (Cohen ကို et al ။ , 2002; Lapish et al ။ , 2007) ။ အထူးသ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal အာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်အကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးအမြင်အာရုံတွေကိုတုံ့ပြန်နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏တူညီသောဦးတည်ချက်ပုံနဲ့တူတဲ့နိုင်တဲ့ coding (အတွင်းအကြီးအများစုတုံ့ပြန်Kobayashi et al ။ , 2006) ။ ထို့ပြင်ဤအာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှု (အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်တာဝန်များကိုဖျော်ဖြေမှာအမူအကျင့်အောင်မြင်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်Kobayashi et al ။ , 2006) ။ ဒီ dorsolateral DA → dorsolateral တိုကျရိုကျ cortex လမ်းကြောင်းပေမယ့် (မျောက်ဝံများမှသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ပေါ်လာသောဝီလျံနှင့် Goldman-Rakic, 1998), တစ်ဦး function အလားတူလမ်းကြောင်းသည်အခြားမျိုးစိတ်အတွက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်, ထိုမျောက် dorsolateral prefrontal cortex ၏သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကို (ထိုကြွက် medial prefrontal cortex အားဖြင့်ဖျော်ဖြေကြသည်Uylings et al ။ , 2003), နှင့်ဤဒေသ (DA စိတ်ခွန်အားနိုး salience အချက်ပြမှုများအားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့် salience-related အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်Mantz et al ။ , 1989; di Chiara, 2002; ယောသပ်သည် et al ။ , 2003; Ventura et al ။ , 2007; Ventura et al ။ , 2008).
အဆိုပါ VTA အာရုံခံ coding salience နှင့်တန်ဖိုးနှစ်ခုလုံးပါရှိသည်နှင့်အချက်ပြ coding တစ်ခုကိုတန်ဖိုး NAc shell ကိုမှစေလွှတ်သောအထောက်အထားပေး salience အချက်ပြမှုများအဆိုပါ NAc core ကိုစလှေတျစခွေငျးငှါ (ပုံ 7A) ။ အမှန်မှာထို NAc core ကို (သို့သော် shell မဟုတ်) ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားထုတ်မှုအဖြစ်တုန့်ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုကျော်လွှားရန်လှုံ့ဆျောမှုဖွင့်အဘို့အလွန်အရေးပါလျက်ရှိ၏ သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုအပ် Set-ပြောင်းလဲအလုပ်များကိုစွမ်းဆောင်ရည်သည် ဖြစ်. , နှင့်အထွေထွေလှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုတိုးမြှင့်စေဆုလာဘ်တွေကိုဖွင့်အဘို့ (Ghods-Sharifi နှင့် Floresco, 2010; Floresco et al ။ , 2006; ခန်းမ et al ။ , 2001; Cardinal က 2006) ။ စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏နိုင်တဲ့ coding နှင့်ကိုက်ညီသည် NAc core ကို (အကြိုးအတွေ့အကြုံများနှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်း DA ၏ phasic ပြီးတော့ Activision နေတာအားလက်ခံတွေ့ဆုံနေ့ et al ။ , 2007) နှင့်ဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံများ (Anstrom et al ။ , 2009).
အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့, DA အာရုံခံ coding အချို့ salience (ထို dorsal striatum မှပရောဂျက်စခွေငျးငှါပုံ 7A) ။ အဆိုပါ dorsal striatum အချို့ဒေသများတွင်အရေးယူတန်ဖိုးများကိုသင်ယူခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်စဉ်အခါ, dorsal striatum လည်းထိုကဲ့သို့သော Orient, အာရုံစူးစိုက်မှု, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, နှင့်အထွေထွေလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အားလုံးအဓိကဖြစ်ရပ်များ, (အဘို့စေ့စပ်သင့်ကြောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်Hikosaka et al ။ , 2000; Klingberg, 2010; Palmiter, 2008) ။ အမှန်စင်စစ် dorsal striatal အာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်မှုကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များမှကြားနေဖြစ်ရပ်များ (ထက်များမှာRavel et al ။ , 1999; Blazquez et al ။ , 2002; Yamada et al ။ , 2004, 2007), လှုံ့ဆော်အပြုအမူအတွက်သူတို့ရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခန်းကဏ္ဍသေးကိုမသိရပေမယ့်။
လေ့လာမှုတစ်ခုမကြာသေးမီစီးရီး (DA အာရုံခံအဆိုပါ epithalamus အတွက်သေးငယ်တဲ့နျူကလိယကနေစိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးအချက်ပြမှုများကိုလက်ခံရယူကြောင်းအကြံပြုသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula (LHb)Hikosaka, 2010()ပုံ 8) ။ အဆိုပါ LHb DA အာရုံခံကျော်အစွမ်းထက်အနုတ်လက္ခဏာကိုထိန်းချုပ်ပြုပြင်: LHb ဆွ (တိုတောင်းသော latency မှာ DA အာရုံခံဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်Christoph et al ။ , 1986) နှင့် VTA ဆွဖို့ဆန့်ကျင်ဘက်ထုံးစံ၌သင်ယူမှုထိန်းညှိနိုင်ပါတယ် (Shumake et al ။ , 2010) ။ အပျက်သဘောဆောင်သောထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြမှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း, များစွာသော LHb အာရုံခံ DA အာရုံခံမှမှန်-inverted phasic တုံ့ပြန်မှုရှိသည်: LHb အာရုံခံများမှာ ဘယျလိုမှ အပြုသဘောဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားများအားဖြင့်၎င်း, ထကြွသော အနုတ်လက္ခဏာဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားများကို (အားဖြင့်Matsumoto နှင့် Hikosaka, 2007, 2009a; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010a; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010c) ။ အတော်ကြာကိစ္စများတွင်ထိုအအချက်ပြမှုများ (LHb → DA ဂီယာနှင့်ကိုက်ညီသည် LHb အတွက်တိုတောင်း latency မှာဖြစ်ပေါ်Matsumoto နှင့် Hikosaka, 2007; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010a).
စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုး, salience နှင့်သတိပေးနခွေငျးအချက်ပြမှုများ၏ယူဆချက်သတင်းရင်းမြစ်
အဆိုပါ LHb အဆိုပါ midbrain တစ်လျှောက်လုံး DA အာရုံခံထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း, ဒါပေမယ့်သက်သေအထောက်အထားတွေအများအပြားလိုင်းများက DA အာရုံခံ coding စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးကျော်ဦးစားပေးကိုထိန်းချုပ်ရအခက်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ LHb အာရုံခံနီးကပ်စွာတန်ဖိုးကို-coding DA အာရုံခံ mirroring တစ်ဦးထုံးစံ၌စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးဝှက် - သူတို့ (အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်မျိုးစလုံးကိုဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားများကိုဝှက်ခြင်းနှင့်ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်အတွက်ကိုတုံ့ပြန်Matsumoto နှင့် Hikosaka, 2009a; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010a) ။ ဒုတိယအချက်မှာ LHb ဆွဟာ ventromedial SNc (မ-ဆုလာဘ်တွေကိုအားဖြင့်တားစီးနှင့်ခန္ဓာဗေဒတည်နေရာအပါအဝင်သူ၏ဂုဏ်သတ္တိများတန်ဖိုးကိုနိုင်တဲ့ coding နှင့်ကိုက်ညီများမှာ DA အာရုံခံအပေါ်အများဆုံးဖြစ်ပွားသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်Matsumoto နှင့် Hikosaka, 2007, 2009b) ။ အဆိုပါ LHb မှတတိယကိုတွေ့ရှိရပါသည် DA တန်ဖိုးကိုအချက်ပြမှုများကိုထုတ်လုပ်အတွက် LHb များအတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များမှ DA အာရုံခံဆဲလျ inhibitory တုံ့ပြန်မှုအယှက် (Gao et al ။ , 1990).
အဆိုပါ LHb DA အာရုံခံအဆိုပါ Basal ganglia (ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည့်အားဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောကျယ်ပြန့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ပုံ 8) ။ အဆိုပါ LHb အဆိုပါ globus pallidus နယ်စပ် (GPb) (ပတ်ပတ်လည်တွင်တည်ရှိသောအာရုံခံတဲ့လူဦးရေကနေစီမံကိန်းမှတစ်ဆင့်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားများကိုပုံနဲ့တူတဲ့အချက်ပြအားလက်ခံတွေ့ဆုံဟောင်ကောင်နှင့် Hikosaka, 2008) ။ ဤအအချက်ပြမှုများကိုသူတို့ LHb အလှည့်အတွက် DA အာရုံခံ (တားစီးကြောင်း midbrain ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ excites ထားတဲ့အတွက် disynaptic လမ်းကြောင်းမှတဆင့် DA အာရုံခံမှစလှေတျတျောခံရဖို့များပါတယ်အဆိုပါ LHb ရောက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဂျီနှင့် Shepard, 2007; Omelchenko et al ။ , 2009; Brinschwitz et al ။ , 2010) ။ ဒါက VTA အတွက် interneurons မှ LHb စီမံချက်များမှတဆင့်နှင့် rostromedial tegmental နျူကလိယ (RMTg) လို့ခေါ်တဲ့ကပ်လျက်ဂါဘမြို့သား-ergic နျူကလိယမှပေါ်ပေါက်နိုင် (Jhou et al ။ , 2009b) (အစများ ( 'VTA ၏ caudal အမြီး' 'ဟုခေါ်တွင်Kaufling et al ။ , 2009)) ။ အထူးသ, RMTg အာရုံခံ (LHb အာရုံခံအလားတူတုန့်ပြန်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်, စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးဝှက်နှင့် dopaminergic midbrain တစ်မိုးသည်းထန်စွာ inhibitory အနာဂတ်ရှိJhou et al ။ , 2009a) ။ ထို့ကြောင့် DA အာရုံခံမှစိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးအချက်ပြမှုများကိုပေးပို့ဖို့ပြည့်စုံ Basal ganglia လမ်းကြောင်း GPb → LHb → RMTg → DA (ဖြစ်နိုင်သည်Hikosaka, 2010).
အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အရေးပါသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုစိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးအချက်ပြမှုများတစ်ခုတည်းကိုသာအဆိုပါ LHb မှတဆင့်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မျိုးစုံ input ကိုလမ်းကြောင်းကသယ်ဆောင်နေကြခြင်းရှိမရှိသည့်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသ, ဆန္ဒရှိ footshocks အားဖြင့် DA ပြုခဲ့သည့် mesopontine parabrachial နျူကလိယ (PBN) တွင်လှုပ်ရှားမှုကထိန်းချုပ်ထားကြသည် (Coizet et al ။ , 2010()ပုံ 8) ။ ဤသည်နျူကလိယ (noxious အာရုံကုဒ်သွင်းသည့်ကျောရိုးကနေတိုက်ရိုက် input ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအာရုံခံပါရှိသည်နှင့် RMTg မှ excitatory စီမံချက်များမှတဆင့် DA အာရုံခံတားစီးနိုင်ခြင်းCoizet et al ။ , 2010; Gauriau နှင့်ဘား, 2002) ။ ဒါက PBN အထူးဆန္ဒရှိရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်သောတန်ဖိုးကို signal ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေးပါသည်နေစဉ် LHb ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိတွေကိုနှင့်ရလဒ်နှစ်ခုလုံးအတွက် DA အာရုံခံစိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးအချက်ပြမှုများကိုပို့ပေးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
စိတ်ခွန်အားနိုး salience အချက်ပြမှုများ၏သတင်းရင်းမြစ်
ဒီထက် DA အာရုံခံအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုး salience အချက်ပြမှုများ၏အရင်းအမြစ်နှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ တဦးတည်း intriguing ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတသမတ်တည်း Orient, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ်များစဉ်အတွင်းယေဘုယျစိတ်ခွန်အားနိုးတုံ့ပြန်မှု (များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးဖြစ်သော amygdala (CeA) ၏ဗဟိုနျူကလိယဖြစ်ပါသည်ဟော်လန်နှင့် Gallagher, 1999; Baxter နှင့် Murray, 2002; Merali et al ။ , 2003; Balleine နှင့် Killcross, 2006()ပုံ 8) ။ အဆိုပါ CeA နှင့်အခြား amygdala အရေးပါအဘယ်သူ၏အချက်ပြစိတ်ခွန်အားနိုး salience နှင့်ကိုက်ညီများမှာအများအပြားတွင် neuron ဆံ့: သူတို့အတူတူဦးတည်ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များအချက်ပြ, (ဖြစ်ရပ်များမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပေါ်လာသောအခါတိုးမြှင့်နေကြပြီး, arousal ၏အမူအကျင့်အစီအမံဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြတယ်Nishijo et al ။ , 1988; Belova et al ။ , 2007; Shabel နှင့် Janak, 2009) ။ အဆိုပါ CeA ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိသတင်းအချက်အလက်သယ်ဆောင်သော brainstem ဖို့ပရိုဂျက်ဆင်းဖြစ်သောကြောင့်ဤအအချက်ပြမှုများ (DA အာရုံခံမှစလှေတျတျောစေခြင်းငှါLee က et al ။ , 2005; Pascoe နှင့် Kapp, 1985) နှင့် CeA (ဆုလာဘ်-related ဖြစ်ရပ်များစဉ်အတွင်း DA လွှတ်ပေးရန်လိုအပ်Phillips က et al ။ , 2003a) ။ ထို့ပြင် CeA စိတ်ခွန်အားနိုး salience ဘို့ငါတို့အဆိုပြုထားခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်များနှင့်ကိုက်ညီလမ်းကြောင်းအတွက် DA အာရုံခံနှင့်အတူပါဝင်။ အစားအသောက်တွေကို (ရန် orienting သင်ယူများအတွက် CeA, SNc နှင့် dorsal striatum အပါအဝင်တစ်ဦးကလမ်းကြောင်းလိုအပ်ဟန် et al ။ , 1997; Lee က et al ။ , 2005; el-Amami နှင့်ဟော်လန်, 2007) ။ တန်ဖိုးအားအချက်ပြ vs. salience ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြင်းနှင့်အတူတသမတ်တည်း, ဒီလမ်းကြောင်း (အစားအသောက်တွေကိုမှ Oriental တတ်ဖို့သင်ယူဘို့ဘဲအစားအသောက်ရလဒ်များချဉ်းကပ်တတ်ဖို့သင်ယူဘို့လိုအပ်ဟန် et al ။ , 1997) ။ ဆုလာဘ်တွေကိုဆုလာဘ်-ရှာကြံလုပ်ရပ်များ (ဖျော်ဖြေဖို့ယေဘုယျလှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုတိုးစေဘို့ CeA, SNc, VTA နှင့် NAc core ကိုအပါအဝင်တစ်ဦးကစက္ကန့်လမ်းကြောင်း, လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်ခန်းမ et al ။ , 2001; Corbit နှင့် Balleine, 2005; el-Amami နှင့်ဟော်လန်, 2007).
အဆိုပါ CeA အပြင်, DA အာရုံခံ (အ Basal forebrain ထိုသို့သော salience-coding အာရုံခံကဲ့သို့သောအခြားသတင်းရင်းမြစ်များမှစိတ်ခွန်အားနိုး salience အချက်ပြမှုများကိုလက်ခံရယူနိုင်ခြင်းလင်းနှင့် Nicolelis, 2008; ရစ်ချတ်ဆန်နှင့် DeLong, 1991) နှင့် PBN အတွက်အာရုံခံ (Coizet et al ။ , 2010) ဤလမ်းကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့ဆက်လက်တည်ရှိပေမယ့်။
အချက်ပြသတိပေးနခွေငျးနှင့်အတူ DA အာရုံခံပေးဘို့အကြိမ်ကြိမ်ကောင်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှိပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟာသာလွန် colliculus (SC), တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု (orienting မျိုးစုံအာရုံခံပုံစံများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကနေ Short-အောင်းနေချိန်အာရုံခံ input ကိုလက်ခံရရှိကြောင်း midbrain နျူကလိယဖြစ်ပါသည်Redgrave နှင့် Gurney, 2006()ပုံ 8) ။ အဆိုပါ SC (ထို SNc နှင့် VTA ဖို့တိုက်ရိုက် projection ရှိပါတယ်May et al ။ , 2009; Comoli et al ။ , 2003) ။ ထုံဆေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် SC (DA အာရုံခံရောက်ရှိရန်နှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦများအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်ဖို့တိုတောင်း-အောင်းနေချိန်အမြင်အာရုံအချက်ပြမှုများများအတွက်အရေးပါသောပြွန်ဖြစ်ပါသည်Comoli et al ။ , 2003; Dommett et al ။ , 2005) ။ အဆိုပါ SC-DA လမ်းကြောင်း SC အာရုံခံပေးပို့ဆုချဖို့နည်းနည်းတုံ့ပြန်မှုရှိသည်နှင့် DA ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှု (ကျော်သာပျော့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်အဖြစ်, သတိပေးနခွေငျးအချက်ပြမှုများထက်ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်အချက်ပြမှုများကိုသိရှိစေရန်အကောင်းဆုံးသင့်တော်ပါတယ်Coizet et al ။ , 2006) ။ ဤသည် SC အာရုံခံ (1) တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှု, (2) detect အဖြစ်အလားအလာအရေးကြီးသောကြောင့် select လုပ်ရသောဖြစ်ရပ်များတစ် sequence ကိုအကြံပြု, (3) ကိုနှိုးဆွဆနျးစစျဖို့ Oriental တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်, နှင့် (4) တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်သော DA သတိပေးနခွေငျးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ် မြစ်အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦများအတွက် DA တစ်ပေါကျကှဲ (Redgrave နှင့် Gurney, 2006).
DA အာရုံခံမှသတိပေးနခွေငျးအချက်ပြမှုများပို့ခြင်းတစ်စက္ကန့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို (LHb ဖြစ်ပါသည်ပုံ 8) ။ အထူးသတဲ့တရားခွင်က start cue အဆိုပါ DA အာရုံခံဆဲလျသတိပေးနခွေငျး signal ကိုတစ်ခုပြောင်းပြန်ထုံးစံ၌များစွာသော LHb အာရုံခံဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်, ဤတုံ့ပြန်မှုဂီယာတစ်ခု LHb → DA ဦးတည်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် LHb (များတွင်တိုတောင်းအောင်းနေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်၏မျှော်လင့်မထားတဲ့စတင်ခြင်းBromberg-မာတင် et al ။ , 2010a; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010c) ။ ဒီပိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစောင့်ကြိုပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုလည်းနေရာအများစု (။ ဟာ MM, ESB-M နှင့် Oh, အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာတွေ့ရှိချက်) LHb အာရုံခံလေ့မမျှော်လင့်ဘဲအမြင်အာရုံပုံရိပ်တွေအားဖြင့် inhibited နှင့် DA စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ပြောင်းပြန်ထုံးစံ၌အသံဖြစ်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ DA အာရုံခံမှသတိပေးနခွေငျးအချက်ပြမှုများပို့ခြင်းများအတွက်တတိယကိုယ်စားလှယ်လောင်း (ထို SNc နှင့် VTA နှစ်ဦးစလုံးမှမှန်းချက်ရဲ့သော pedunculopontine tegmental နျူကလိယ (PPTg), သည်နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်င်း, 2006()ပုံ 8) ။ အဆိုပါ PPTg (VTA DA အာရုံခံဆဲလျပြီးတော့ Activision နေတာဖွင့်အဘို့အရေးကြီးပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2007) တွေကိုဆုချဖို့ပေါကျကှဲတုံ့ပြန်မှုအပါအဝင် (ပန်နှင့် Hyland, 2005) ။ တစ်ခုသတိပေးနခွေငျး signal ကိုအတူတသမတ်တည်း, PPTg အာရုံခံ (မျိုးစုံကိုအာရုံခံပုံစံများဖို့တိုတောင်း-အောင်းနေချိန်တုံ့ပြန်မှုရှိသည်နှင့်တုံ့ပြန်မှု orienting စဉ်အတွင်းတက်ကြွနေကြသည်င်း, 2006) ။ PPTg အာရုံခံတုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုအားဖြင့်၎င်း, ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား (ရှိပါသည်Dormont et al ။ , 1998; Okada et al ။ , 2009) (ဒါပေမယ့်တွေ့မြင် (ပန်နှင့် Hyland, 2005)) ။ တချို့က PPTg အာရုံခံလည်း (အကြိုးသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိရလဒ်များကိုမှသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုတုံ့ပြန်Dormont et al ။ , 1998; Kobayashi et al ။ , 2002; Ivlieva နှင့် Timofeeva, 2003b, a) ။ ဒါဟာ PPTg DA အာရုံခံမှပို့ပေးသည့်အချက်ပြမှုများကိုအထူးသတိပေးနခွေငျးမှဒါမှမဟုတ်သူတို့ထိုကဲ့သို့သောတန်ဖိုးနှင့် salience ကဲ့သို့သောအခြားစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်ပြမှုများဆံ့ရှိမရှိနှင့်ဆက်စပ်သောရှိမရှိစမ်းသပ်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ဆန္ဒရှိ, ဆုလာဘ်၏သဘောသဘာဝပြန်လည်သုံးသပ်နှင့် DA အာရုံခံအတွက်အချက်ပြသတိပေးနခွေငျး, နှင့်နောက်ခံအာရုံကြောလမ်းကြောင်းများနှင့်လှုံ့ဆော်အပြုအမူအတွက်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးအယူအဆအဆိုပြုထားကြပြီ။ ကျနော်တို့ဒီအလုပ်လုပ်အယူအဆ, တစ်ဦးထက်ပိုသောပြည့်စုံသောဥာဏ်ကိုအဆောင်ကြဉ်းလိမ့်မည်ဟုအနာဂတ်သီအိုရီနှင့်သုတေသနများအတွက်လမ်းညွှန်ဖြစ်စဉ်းစားပါ။ ဤတွင်ကျနော်တို့နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပိုမိုနက်ရှိုင်းရှုပ်ထွေးထုတ်ဖေါ်ဖို့လိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိအများအပြားဒေသများမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စုပ္ပန်ထိုအချိန်တွင် DA အချက်ပြမှုများကိုအခြေခံသည့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတစ်ခုအစောပိုင်းအဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သအကြီးအကျယ်ထိုကဲ့သို့သောအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဧရိယာအလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအဖြစ်သွယ်ဝိုက်အစီအမံအပေါ်အခြေခံပြီး DA အချက်ပြမှုများ coding တန်ဖိုးနှင့် salience ၏သတင်းရင်းမြစ်များနှင့်နေရာများအခြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ ဒါဟာ (ကတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်ဤကိုယ်စားလှယ်လောင်းလမ်းကြောင်းထားရန်နှင့် DA ဂီယာစောင့်ကြည့်ခံရဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းမကြာသေးမီကတီထွင် tools များအားဖြင့်ကူညီခဲ့သူတို့ရဲ့အသေးစိတ်ဂုဏ်သတ္တိများ, ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အရေးကြီးသောဖွစျလိမျ့မညျရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2008) နှင့်ထိန်းချုပ် (Tsai et al ။ , 2009; Tecuapetla et al ။ , 2010; Stuber et al ။ , 2010) မွငျ့မား Spatial နှင့်ယာယီတိကျစွာအတူ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဆောက်အဦအများအပြား DA အာရုံခံနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဆက်သွယ်ရေးအဖြစ်ကောင်းစွာမြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုခြင်း, တစ်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အဖွဲ့အစည်းကရှိသည်။ DA အာရုံခံနှငျ့ဆကျသှယျသောအာရုံကြောအဆောက်အဦများထူထပ်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြသည်ကတည်းက phasic DA အချက်ပြမှုများ၏အာရုံကြောသတင်းရင်းမြစ်လည်း (ကျနော်တို့အဆိုပြုထားပြီရိုးရှင်းသော feedforward လမ်းကြောင်းထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေခြင်းငှါGeisler နှင့် Zahm, 2005) နှင့် DA အာရုံခံအဆိုပါ midbrain အတွင်းအချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်သည် (Ford ကား et al ။ , 2010).
ကျနော်တို့ DA အာရုံခံဆဲလျဆက်သွယ်မှုတစ်ခုကိုရှေးခယျြထားအာရုံစိုက်ခဲ့ကြပေမယ့် DA အာရုံခံအဆိုပါ subthalamic နျူကလိယ, laterodorsal tegmental နျူကလိယက, stria terminalis, prefrontal cortex, ventral pallidum နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus (၏အိပ်ရာနျူကလိယအပါအဝင်အများအပြားထပ်တိုးအဆောက်အဦများအနေဖြင့် functional input ကိုလက်ခံရရှိကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2007; Shimo နှင့် Wichmann, 2009; Jalabert et al ။ , 2009) ။ အထူးသ, DA အာရုံခံမှအာရုံခံစီမံကိန်းကို orexin နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus, (အကျိုးထက်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များနှင့်ခလုတ်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူများက activated နေကြတယ်Harris ကနှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 2006), တနျဖိုး-related လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း။ DA အာရုံခံကိုလည်း hypothalamus, hippocampus, amygdala, habenula နှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအများအပြား cortical ဒေသများအပါအဝင်အများအပြားထပ်တိုးအဆောက်အဦမှပရိုဂျက်ပေးပို့ပါ။ အထူးသ, အ anterior cingulate cortex (ACC) (DA အာရုံခံထံမှဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများကိုလက်ခံရရှိရန်အဆိုပြုပြီးပါပြီHolroyd နှင့် Cole, 2002) နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးအပြုသဘောဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအာရုံခံပါရှိသည် (Koyama et al ။ , 1998) ။ သို့သျောလညျး ACC activation လည်း (ဆန္ဒရှိအပြောင်းအလဲနဲ့ဆက်စပ်နေသည်Vogt, 2005; Johansen နှင့်လယ်ကွင်းများ, 2004) ။ ဤရွေ့ကား ACC လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအနာဂတ်လေ့လာမှုမှာစမ်းသပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်လတံ့သော, DA စိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့် salience အချက်ပြမှုများ၏အရောအနှောကထောက်ခံစေခြင်းငှါ။ အမှန်စင်စစ်ခန့်မှန်းအမှားများကိုဆုချဖို့ related အာရုံကြောအချက်ပြခြင်း (medial prefrontal cortex အပါအဝင်အများအပြားဒေသများရှိအစီရင်ခံခဲ့ကြMatsumoto et al ။ , 2007; seo နှင့် Lee က, 2007), orbitofrontal cortex (Sul et al ။ , 2010) (ဒါပေမယ့်တွေ့မြင် (Takahashi et al ။ , 2009; Kennerley နှင့် Wallis ဟာ, 2009)) နှင့် dorsal striatum (ကင်မ် et al ။ , 2009; Oyama et al ။ , 2010), နှင့် DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု၎င်းတို့၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ '' ကြိုး 'သို့မဟုတ်' 'ဆန္ဒရှိ' 'အဖြစ်သူတို့ကိုခွဲခြားရိုးရှင်းတဲ့ dichotomy နှင့်အတူစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်ရပ်များ, ဖော်ပြထားပါပြီ။ သို့သျောလညျးဤအမျိုးအစားများကိုအကြီးအမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။ ဆုပျရှံရှာနာမကျန်း, တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်ပြည်တွင်းရေးဖြစ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်၏ တစ်ဦးဆန္ဒရှိ airpuff မြန်ဆန်အကျဉ်းနှင့်ပြင်ပလောကကဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤရွေ့ကားအခြေအနေများကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောစနစ်များကထောက်ခံခံရဖို့များပါတယ်ရာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုတောင်းဆို။ ကျနော်တို့အချက်ပြမှုများကိုစိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုးနှင့် salience ပုံနဲ့တူတဲ့နှင့်အတူ DA အာရုံခံနှစ်မျိုးပေါ်မှာငါတို့ဆွေးနွေးမှုအာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြပေမယ့်ထို့အပွငျ, တစ်ဦးအနီးကပ်စာမေးပွဲ DA အာရုံခံဒီတင်းကြပ် dichotomy ဖို့ကန့်သတ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြသထားတယ်။ အချို့သော DA အာရုံခံ salience တူသောနှင့်တန်ဖိုးတူအချက်ပြမှုများကိုနှစ်ဦးစလုံး၏အရောနှော transmit တစ်ခုခန္ဓာဗေဒ gradient ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆအားဖြင့်ညွှန်ပြသကဲ့သို့၎င်း, နေဆဲသည်အခြား DA အာရုံခံ (အကြိုးသော်လည်းမဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များတုံ့ပြန်Matsumoto နှင့် Hikosaka, 2009b; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010a) ။ ဤရွေ့ကားထည့်သွင်းစဉ်းစားအချို့သော DA အာရုံခံ '' ဆိုး '' vs. '' ကောင်းသော '' ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ဝင်ရိုးတလျှောက်တွင်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်ရပ်များဝှက်မည်မဟုတ်ပါနှင့်အစားသပ္ပါယ်အပြုအမူ၏တိကျသောပုံစံများကိုကူညီပံ့ပိုးရန်အထူးပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
တောင်မှဆုလာဘ်၏ဘုံ၌, DA အာရုံခံကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဒေသများမှကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကိုထုတ်လွှင့်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ (ရှိBassareo နှင့် Di Chiara, 1999; Ito က et al ။ , 2000; Stefanie နှင့် Moghaddam, 2006; Wightman et al ။ , 2007; Aragona et al ။ , 2009) ။ (ကစုံစမ်းရာစတင်မှသာကိုတုံ့ပြန်: အ SNc နှင့် VTA အစီရင်ခံကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်မှုကြောင့်အာရုံခံပါဝင်သည်Roesch et al ။ , 2007), ဖြစ်ကောင်းစင်ကြယ်သောသတိပေးနခွေငျး signal ကိုကုဒ်သွင်း; (အမြင်အာရုံနှင့်အာရုံပုံစံများမှကွဲပြားခြားနားကိုတုံ့ပြန်Strecker နှင့် Jacobs, 1985), ဖြစ်ကောင်းကွဲပြားခြားနားသော SC နှင့် PPTg အာရုံခံဆီက input ကိုလက်ခံရရှိ; (က sequence ကိုအတွင်းပထမဆုံးဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်တုံ့ပြန်Ravel နှင့် Richmond, 2006; jin နှင့်ကော့စ, 2010); (အန္တရာယ်များဆုလာဘ်များက activation ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ခဲ့ကြFiorillo et al ။ , 2003); သို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်ရှားမှုများကို (စဉ်အတွင်း activated နေကြတယ်Schultz, 1986; Kiyatkin, 1988a; Puryear et al ။ , 2010; jin နှင့်ကော့စ, 2010) ((ကိုလညျးရှုPhillips က et al ။ , 2003b; Stuber et al ။ , 2005)) ။ ဤအတုံ့ပြန်မှုပုံစံများတစ်ဦးချင်းစီသာလေ့လာမှုများသို့မဟုတ်အာရုံခံတဲ့လူနည်းစုအစီရင်ခံထားပါတယ်နေစဉ်, ဒီဒေတာကို DA အာရုံခံအလားအလာ function ကွဲပြားလူဦးရေတစ်အများကြီးပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်ကခွဲခြားနိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ဒီလေ့လာမှုတွေသာထိုကဲ့သို့သောအာရုံကြောဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အခြေခံပြီး, သွယ်ဝိုက်နည်းလမ်းများသုံးပြီး DA နှင့် Non-DA အာရုံခံအကြားခွဲခြားနိုင်ခြင်းကြောင့်တစ်ဦးကဗိုလ်လုပွဲနှင့်အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစား, ပြုမူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပစ္စုပ္ပန်မှတ်တမ်းတင်လေ့လာမှုများသေး DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု၏အပြည့်အဝအပြီးသတ်သောတိုင်းတာပေးမဖြစ်ပါသည် ပစ်ခတ်မှုနှုန်း, ဆူး waveform နှင့် D2 အဲဒီ receptor agonists (မှ sensitivity ကိုအဖြစ်ကျေးဇူးတော်နှင့် Bunney, 1983; Schultz, 1986) ။ ဤနည်းပညာများသည် (juxtacellular အသံသွင်း, intracellular နှင့် extracellular နည်းလမ်းများ၏နှိုင်းယှဉ်အပါအဝင်သက်သေအထောက်အထားများအများအပြားလိုင်းများအားဖြင့်ညွှန်ပြခြင်း, SNc အတွင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော DA အာရုံခံသိရှိနိုင်ဖို့ပေါ်လာနှင့် DA-တိကျတဲ့တွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများကျေးဇူးတော်နှင့် Bunney, 1983; ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2007; ဘရောင်း et al ။ , 2009) ။ သို့သော်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများဒီ technique ကို DA နှင့် Non-DA အာရုံခံ (ဆဲလ်လူလာဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးရှိရှိရာ VTA အတွက်လျော့နည်းယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်မည်အကြောင်းညွှန်ပြMargolis et al ။ , 2006; Margolis et al ။ , 2008; Lammel et al ။ , 2008; Brischoux et al ။ , 2009) ။ DA ပြင်းအားထိုကဲ့သို့သော DA axon ဆိပ်ကမ်း (၏ glutamatergic activation အဖြစ်နောက်ထပ်အကြောင်းအချက်များကထိန်းချုပ်ထားစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်မြစ်အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦများအတွက် DA ပြင်းအား၏တောင်မှတိုက်ရိုက်တိုင်းတာ, DA အာရုံခံဆဲလျ Spike လှုပ်ရှားမှုနိဂုံးပိုင်းသက်သေအထောက်အထားမပေးပါဘူးCheramy et al ။ , 1991) နှင့် DA ပို့ဆောင်ရေး၏လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျင်မြန်စွာအပြောင်းအလဲများကို (Zahniser နှင့် Sorkin, 2004) ။ တက်ကြွအပြုအမူစဉ်အတွင်း DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု၏အပြည့်အဝအပြီးသတ်သောတိုင်းတာဖျော်ဖြေဖို့ထိုသို့သော optogenetic ဆွနှင့်အတူ extracellular မှတ်တမ်းတင်ပေါင်းစပ်ပြီးအဖြစ်အသစ်သောအသံဖမ်းနည်းစနစ်, (သုံးစွဲဖို့လိုအပ်သောဖွစျလိမျ့မညျjin နှင့်ကော့စ, 2010).
midbrain DA အာရုံခံ၏ဩဇာညောင်း concept ကိုသူတို့ရှိသမျှသည်မြစ်အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦတစ်ခုယူနီဖောင်းစိတ်ခွန်အားနိုး signal ကို transmit ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်တော် DA အချက်ပြမှုများလေ့ထင်ထက်ပိုမိုကွဲပြားခြားနားဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပြန်လည်သုံးသပ်ပါပြီ။ အဲဒီအစားတစ်ဦးယူနီဖောင်း signal ကိုကုဒ်သွင်းခြင်းထက်, DA အာရုံခံကြိုးများနှင့် Non-ကြိုးဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားစိတ်ခွန်အားနိုးမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ကြောင်းမျိုးစုံအမျိုးအစားများအတွက်လာ။ တောင်မှတစ်ခုတည်း DA အာရုံခံတစ်ခုတည်းစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်ပြမှုများကိုထုတ်လွှင့်ဖို့ပေါ်လာပါဘူး။ အဲဒီအစား, DA အာရုံခံကွဲပြားအာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်များအားဖြင့်ထုတ်ပေးမျိုးစုံအချက်ပြမှုများ၏အရောနှော transmit ။ အခြားသူများကိုမြင့်မားတဲ့အလားအလာအရေးပါမှု၏ဖြစ်ရပ်များမှအစာရှောင်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုကိုထင်ဟပ်နေချိန်တွင်အချို့ကိုကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိအတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဟောကိန်းများကိုထင်ဟပ်။
ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကဤကွဲပြားခြားနား DA အချက်ပြမှုများ၏သဘောသဘာဝအကြောင်းအယူအဆ, သူတို့ကို generate သောအာရုံကြောကွန်ယက်များ, နှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအပေါ်သူတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုပြုချက်ကိုယခင်သီအိုရီတစ်ခုပေါင်းစပ်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ အတော်များများသည်ယခင်သီအိုရီထိုကဲ့သို့သော, တန်ဖိုးထားပန်းတိုင်ရှာကြံ motivationally အဓိကအခြေအနေများပါဝငျသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများသတိပေးနခွေငျးမှတုံ့ပြန်အဖြစ်တစ်ခုတည်းစိတ်ခွန်အားနိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ DA အာရုံခံသိရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင် DA အာရုံခံကဤလုပ်ငန်းစဉ်သုံးခုစလုံးမှ related အချက်ပြမှုများကိုလက်ခံရရှိသည်။ သို့သျောလညျးမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးယူနီဖောင်းသတင်းစကားသို့ကဤအချက်ပြ distilling ထက်ကျနော်တို့ DA အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူများအတွက်ကွဲပြားအာရုံကြောစနစ်များကိုထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက်ကွဲပြားဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံဤအချက်ပြထုတ်လွှင့်ကြောင်းအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ တချို့က DA အာရုံခံ, အကြိုးဖြစ်ရပ်များရှာအံ့သောငှါဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း, အာရုံစိုက်မိအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဖြစ်ရပ်များခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ကြိုတင်အဘို့ပြင်ဆင်နိုင်စေရန်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုမြှင့်တင်ရန်, စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုး assign ကြောင့်ဦးနှောက်စနစ်များကိုထောက်ခံပါတယ်။ အခြားအ DA အာရုံခံအလားအလာအရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များ, တစ်ဦးတုန့်ပြန်ရွေးချယ်ဖို့နှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များမှတ်မိဖို့သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်တစ်ဦးအကောင်းဆုံးရလဒ်ကိုလိုက်ရှာအတွက်ဇွဲရှိရှိလှုံ့ဆျောမှု detect လုပ်ဖို့ orienting အပါအဝင်စိတ်ခွန်အားနိုး salience အားဖြင့်စေ့စပ်ဖြစ်ကြောင်းဦးနှောက်စနစ်များ, ထောက်ခံပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီအဆိုပြုချက်ကို DA အာရုံခံစိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူမျိုးစုံအာရုံကြောကွန်ရက်များကိုထောကျပံ့ဖို့သူတို့ရဲ့အချက်ပြမှုများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ထားတဲ့အတွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ DA functions များ, တစ်ဦးထက်ပိုသောသန့်စင်ပြီးနားလည်မှုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြကူညီပေးသည်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဤလုပ်ငန်းကိုအမျိုးသားမျက်စိဌာန Institute မှာ intramural သုတေသနအစီအစဉ်ကထောက်ခံခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းတန်ဖိုးရှိသောဆွေးနွေးမှုများအဘို့အမေီ Arnsten ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
FOOTNOTE1By စိတ်ခွန်အားနိုး salience ကျနော်တို့ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ်များအတွက်မြင့်မားသည်နှင့် motivationally ကြားနေ (Non-ကြိုးများနှင့် Non-ဆန္ဒရှိ) ဖြစ်ရပ်များအတွက်အနိမ့်သောအရေအတွက်ဆိုလို။ ဤ (ကပေးတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဆင်တူသည်Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998) ။ သာနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ရပ်များသက်ဆိုင်ရာ (ထိုကဲ့သို့သောမက်လုံးပေး salience အဖြစ်စိတ်ခွန်အားနိုး salience မှ neuroscience များတွင်အသုံးပြု salience ၏အခြားအယူအဆတွေကနေကွဲပြားကြောင်းမှတ်ချက်; (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998ထိုကဲ့သို့သောတ္ထုများနှင့်ရောင်စုံမီးလုံးရွေ့လျားအဖြစ် motivationally ကြားနေဖြစ်ရပ်များသက်ဆိုင်ရာ)) နှင့်သိမှုဆိုင်ရာအာရုံ salience (; (Bisley နှင့် Goldberg, 2010)) ။ ]
FOOTNOTE2စိတ်ခွန်အားနိုး salience coding DA အာရုံခံဆဲလျအချက်ပြမှုများကိုအားဖြည့်နှုန်းသင်ယူခြင်းထိန်းညှိရန်အဆိုပြုခဲ့ကြကြောင်း "Association" နှင့် "Associates အတွက်အပြောင်းအလဲ" ၏ဂန္အယူအဆတွေကနေကွဲပြားဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက် (ဥပမာ (Pearce နှင့်ခန်းမ, 1980)) ။ ထိုကဲ့သို့သောသီအိုရီတိရိစ္ဆာန်များအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်မျိုးစလုံးကိုခန့်မှန်းအမှားများမှသင်ယူ (နှင့်သင်ယူမှုနှုန်းချိန်ညှိ) ထိုဖော်ပြ။ ဤအ DA အာရုံခံသူတို့ (မျှော်လင့်မထားတဲ့ဆုလာဘ်ပေးပို့ဖို့ဥပမာ) အားကြီးသောတုံ့ပြန်မှုရှိနိုငျသောကာလအတွင်းအပြုသဘောခန့်မှန်းအမှားများမှသင်ယူဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်ပေမဲ့, သူတို့ (သူတို့အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမတုန့်ပြန်ရှိနိုငျသောကာလအတွင်းအနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှားများမှသင်ယူဖို့အထောက်အကူပြုမပေးစေခြင်းငှါ မျှော်လင့်မထားတဲ့ဆုလာဘ်ပျက်ကွက်ဖို့ဥပမာ) (သင်္ဘောသဖန်း။ 4B).
မသေချာမရေရာ၏ Ahlbrecht M က, Weber နဲ့အမ်ဆုံးဖြတ်ချက်: တစ်ရပ်စမ်းသပ်လေ့လာမှု။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့်သီအိုရီဘောဂဗေဒ၏ဂျာနယ်။ 1996; 152: 593-607 ။
Albin RL, Young က AB, Penney JB ။ Basal ganglia မမှန်များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒ။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 1989; 12: 366-375 ။ [PubMed]
Anderson က AK, Christoff K ကို Stappen ငါ Panitz: D, Ghahremani DG, ဂလိုဗာ, G, Gabrieli JD, Sobel N. လူ့အ olfaction အတွက်ပြင်းထန်မှုနှင့် valence ၏အာရုံကြောကိုယ်စားပြု Dissociated ။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 196-202 ။ [PubMed]
Anstrom KK, Miczek Ka, Budygin EA ၏။ ကြွက်များတွင်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်နေစဉ်အတွင်း mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွက် phasic dopamine အချက်ပြတိုးတက်လာခဲ့သည်။ neuroscience ။ 2009; 161: 3-12 ။ [PubMed]
Aragona BJ, နေ့ JJ, Roitman MF, Cleaveland NA, Wightman RM, Carelli RM ။ ကြွက်များတွင် cue-ကင်းအသင်းအဖွဲ့များ၏ဝယ်ယူစဉ်အတွင်း phasic dopamine ဂီယာပုံစံများ၏ Real-time ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်။ neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2009; 30: 1889-1899 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Austin AJ, အစာစားချင်စိတ်များနှင့် Pavlovian အေးစက်အတွက်ဆန္ဒရှိရလဒ်များအဘို့အာရုံစူးစိုက်မှု၏ Duka တီယန္တရားများ။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 2010; 213: 19-26 ။ [PubMed]
Badia P ကို, ဂျေ, အက်ဘော့ခကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက် Shock အခြေအနေများအကြားရွေးချယ်ခြင်းကြမ်းတမ်း: ဒေတာနှင့်သီအိုရီ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 1979; 86: 1107-1131 ။
Balleine BW, Killcross အက်စ်စင်ပြိုင်မက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့: amygdala function ကိုတစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံအမြင်။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2006; 29: 272-279 ။ [PubMed]
Balleine BW, O'Doherty JP ။ အရေးယူထိန်းချုပ်မှုအတွက်လူ့နှင့်ကြွက် homologies က: ရည်မှန်းချက် - ညွှန်ကြားထားနှင့်ပုံမှန်အရေးယူမှု၏ corticostriatal ဆုံးအဖွတျ။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35: 48-69 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဘား GA, Moriceau S က, Shionoya K ကို Muzny K ကို Gao P ကို, ဝမ်က S, Sullivan က RM ။ မွေးကင်းစကလေးသင်ယူမှုအတွက်အသွင်ကူးပြောင်းမှုဟာ amygdala အတွက် dopamine အားဖြင့် modulated နေကြသည်။ နတ် neuroscience ။ 2009; 12: 1364-1366 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bassareo V ကို, De Lucas, MA, Core နှိုင်းယှဉ်နျူကလိယ Accumbens Shell နှင့် Prefrontal Cortex အတွက် Dopamine အားဖြင့်လှုံ့ဆော်နှိုးဆွ Properties ကို၏ Di Chiara G. အ Differential Expression ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 4709-4719 ။ [PubMed]
Bassareo V ကို, နျူကလိယတွင်စားနပ်ရိက္ခာ-လှုံ့ဆော်မှုမှ dopamine ဂီယာ၏ Di Chiara G. အ Differential တုန့်ပြန် shell ကို / core ကိုအခန်း accumbens ။ neuroscience ။ 1999; 89: 637-641 ။ [PubMed]
Baxter MG, Murray EA ၏။ အဆိုပါ amygdala နှင့်ဆုလာဘ်။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2002; 3: 563-573 ။ [PubMed]
Bayer HM, Glimcher PW ။ Midbrain dopamine အာရုံခံတဲ့အရေအတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှား signal ကိုဝှက်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 47: 129-141 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Belova MA, Paton JJ, Morrison SE, Salzman CD တချပ်ဖြစ်တယ်။ မျှော်လင့်မျောက် amygdala အတွက်သာယာသောနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု modulates ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2007; 55: 970-984 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bentivoglio M က, Morelli အမ်အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆားကစ် mesencephalic dopaminergic အာရုံခံနှင့်ဦးနှောက်အတွက် dopamine receptors ၏ဖြန့်ဝေ။ ဓာတု Neuroanatomy ၏လက်စွဲစာအုပ်။ 2005: 1-107 ။
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience: ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? ဦးနှောက်သုတေသန။ 1998; 28: 309-369 ။ [PubMed]
Besson က C, ကိုထိခိုက်အမြင်အတွက် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ Louilot အေအချိုးမညီပါဝင်ပတ်သက်မှု။ neuroscience ။ 1995; 68: 963-968 ။ [PubMed]
Birgner ကို C, Nordenankar K ကို Lundblad M က, Mendez ဂျာ et al စမစ်ကို C, le Greves M က, Galter: D, Olson L ကို, Fredriksson တစ်ဦးက, Trudeau LE ။ dopamine အာရုံခံအတွက် VGLUT2 psychostimulant-သွေးဆောင်အမူအကျင့်ကို Activation ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2010; 107: 389-394 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bisley JW, Goldberg က ME ။ အာရုံစူးစိုက်မှု, ရည်ရွယ်ချက်, နှင့် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွက်ဦးစားပေး။ neuroscience ၏နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်သုံးသပ်။ 2010; 33: 1-21 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bjorklund တစ်ဦးက, Dunnett SB ။ ဦးနှောက်အတွက် Dopamine အာရုံခံဆဲလျစနစ်များ: update တစ်ခု။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2007; 30: 194-202 ။ [PubMed]
Blazquez pm တွင်, Fujii N ကို, Kojima J ကို, Graybiel လေး။ အဆိုပါ striatum အတွက်တုန့်ပြန်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏တစ်ဦးကကွန်ယက်ကိုကိုယ်စားပြုမှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 33: 973-982 ။ [PubMed]
MM, Braver TS, Barch DM, Carter က CS, Cohen ကို JD Botvinick ။ ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေးနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းချုပ်။ Psychol ဗျာ 2001; 108: 624-652 ။ [PubMed]
Bradley MM, Greenwald MK, Petri MC, Lang PJ ။ မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာပျော်မွေ့ခြင်းနှင့် arousal: ရုပ်ပုံများ Remembering ။ J ကို Exp Psychol Mem ကို Cogn လေ့လာပါ။ 1992; 18: 379-390 ။ [PubMed]
Braun DA, ခဲယမ်းသိုလှောင်ရုံကို C, Wolpert DM ။ အရေးယူအတွက်သင်ယူမှုဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 2010; 206: 157-165 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Brinschwitz K ကို Dittgen တစ်ဦးက, ဒေး VI ကို, Lommel R ကို, Geisler S က, Veh RW ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula ထံမှ Glutamatergic axon အဓိကအားဖြင့် ventral midbrain ၏ GABAergic အာရုံခံအပေါ်အဆုံးသတ်ခြင်း။ neuroscience ။ 2010; 168: 463-476 ။ [PubMed]
Brischoux က F, Chakraboty, S, Brierley ပစ, Ungless MA ။ noxious လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် ventral VTA အတွက် dopamine အာရုံခံ၏ Phasic စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2009; 106: 4894-4899 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bromberg-မာတင် ES, Hikosaka O. Midbrain dopamine အာရုံခံလာမည့်ဆုလာဘ်အကြောင်းကိုကြိုတင်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဦးစားပေးအချက်ပြ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009; 63: 119-126 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bromberg-မာတင် ES, Matsumoto က M, Hikosaka O. ထူးခြားသောလုပ်သူများနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula နှင့် dopamine အာရုံခံအတွက် phasic anticipatory လှုပ်ရှားမှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010a; 67: 144-155 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bromberg-မာတင် ES, Matsumoto က M, ဟောင်ကောင်က S, Hikosaka O. လှုံ့ဆော်မှုတန်ဖိုးများပေါ်မူတည်ပြီးတစ်ဦးက pallidus-habenula-dopamine လမ်းကြောင်းအချက်ပြ။ J ကို Neurophysiol ။ 2010b; 104: 1068-1076 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bromberg-မာတင် ES, Matsumoto က M, Nakahara H ကို, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula နှင့် dopamine အာရုံခံအတွက်မှတ်ဉာဏ်၏ Hikosaka O. အကွိမျမြားစှာ timescales ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010c; 67: 499-510 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဘရောင်းမယ်တော်ဆေးခန်း, Henny P ကို, Bolam JP, Magill PJ ။ ဦးနှောက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိအလိုအလျောက်နဲ့မောင်းနှင်အပြောင်းအလဲများကိုစဉ်အတွင်း substantia nigra အတွက် neurochemically သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော dopaminergic အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်ချက်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 2915-2925 ။ [PubMed]
Cardinal RN ။ အာရုံကြောစနစ်များကိုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာအားဖြည့််ပတ်သက်နေ။ အာရုံကြော Netw ။ 2006; 19: 1277-1301 ။ [PubMed]
ရူ့ JF, Aragona BJ, Heien ML, Seipel ကို AT, Carelli RM, Wightman RM ။ ညှိနှိုင်း accumbal dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု drive ကိုရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2007; 54: 237-244 ။ [PubMed]
Cheramy တစ်ဦးက, Kemel ML, Gauchy ကို C, DESC JM, Galli T က, Barbeito L ကို, nigrostriatal dopamine အာရုံခံ၏အာရုံကြောဆိပ်ကမ်းကနေ dopamine လွှတ်ရာကိုတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် presynaptic စည်းမျဉ်းထဲမှာ excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ် Glowinski ဂျေအခန်းက္ပ။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်။ 1991; 1: 351-363 ။ [PubMed]
SH, Ho JL ဝါး။ မျှော်လင့်ချက်: မရေရာ resolution ဖြင့်အချိန်ကိုက်ဆီသို့သဘောထားကိုတစ်ဦးပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှု။ အန္တရာယ်နှင့်မငြိမ်သက်မှုကြောင့်များ၏ဂျာနယ်။ 1994; 8: 267-288 ။
Christoph ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Leonzio RJ, Wilcox KS ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula ၏ stimulation ကြွက်များ၏ substantia nigra နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine ပါဝင်သောအာရုံခံဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 1986; 6: 613-619 ။ [PubMed]
Chuhma N ကို, Choi WY, Mingote S က, Rayport အက်စ် Dopamine အာရုံခံဆဲလျအချိုမှု cotransmission: အ mesoventromedial စီမံကိန်းများတွင်အကြိမ်ရေ-မှီခိုမော်ဂျူ။ neuroscience ။ 2009; 164: 1068-1083 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cohen ကို JD, Braver TS, Brown က JW ။ prefrontal cortex အတွက် dopamine function ကိုအပေါ်တွက်ချက်အမြင်များ။ neurobiology အတွက်လက်ရှိအမြင်။ 2002; 12: 223-229 ။ [PubMed]
Coizet V ကို, Dommett EJ, Klop EM, Redgrave P ကို, Overton PG ။ အဆိုပါ parabrachial နျူကလိယ midbrain dopaminergic အာရုံခံမှတိုတောင်းအောင်းနေချိန် nociceptive အချက်အလက်များ၏ကူးစက်ခြင်းအတွက်အရေးပါ link ကိုဖြစ်ပါတယ်။ neuroscience ။ 2010; 168: 263-272 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Coizet V ကို, Dommett EJ, Redgrave P ကို, Overton PG ။ midbrain dopaminergic အာရုံခံ၏ Nociceptive တုံ့ပြန်မှုကြွက်များတွင်သာလွန် colliculus အားဖြင့် modulated နေကြသည်။ neuroscience ။ 2006; 139: 1479-1493 ။ [PubMed]
Comoli အီး, Coizet V ကို, Boyes J ကို, Bolam JP, Canteras NS, Quirk RH အ, Overton PG, Redgrave P. အဓိကအမြင်အာရုံဖြစ်ရပ်များဖော်ထုတ်မယ်များအတွက် substantia nigra ထက်သာလွန် colliculus ထံမှတစ်ဦးကတိုက်ရိုက်စီမံကိန်းများ။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 974-980 ။ [PubMed]
Corbit LH, Balleine BW ။ pavlovian-ဆာလွှဲပြောင်း၏အထွေထွေနှင့်ရလဒ်ကို-တိကျတဲ့ပုံစံများအပေါ် basolateral နှင့်ဗဟို amygdala ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏နှစ်ချက် dissociation ။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 962-970 ။ [PubMed]
Dalley JW, Laane K ကို Theobald DE, အမ်းစထရောင်း HC, Corlett PR စနစ်, Chudasama Y ကို, Robbins TW ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် D1 နှင့် NMDA receptors ခြင်းဖြင့်အစာစားချင်စိတ် Pavlovian မှတ်ဉာဏ်၏အချိန်ကန့်သတ်ထားမော်ဂျူ။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2005; 102: 6189-6194 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Daly HB ။ ခန့်မှန်းရခက် nonreward ဆန္ဒရှိအခါခန့်မှန်းရခက်များအတွက် preference ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်: လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ဒေတာနှင့်အစာစားချင်စိတ်များသီအိုရီတုံ့ပြန်မှုဝယ်ယူစောင့်ကြည့်။ ခုနှစ်တွင်: Gormezano ငါ Wasserman EA ၏, အယ်ဒီတာများ။ သင်ယူခြင်းနှင့် Memory: အဆိုပါအပြုအမူများနှင့်ဇီဝအလွှာဟာ။ LE Associates မှ, 1992 ။ စစ။ 81-104 ။
Davidson MC, Horvitz JC, စပါး N ကို, Fossella ဂျာ Watts R ကို, Ulug လေး, Casey BJ ။ မမျှော်လင့်ဘဲ nonrewarding လှုံ့ဆော်မှုအောက်ပါ differential caudate နှင့် cingulate activation ။ NeuroImage ။ 2004; 23: 1039-1045 ။ [PubMed]
နေ့ JJ, Roitman MF, Wightman RM, Carelli RM ။ Associative သင်ယူမှုအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine အချက်ပြအတွက်ပြောင်းလဲနေသောဆိုင်း mediates ။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 1020-1028 ။ [PubMed]
ဒါယန်းကို P ကို, င်း Y. စစ်ကူသင်ယူမှု: အ, ကောင်းသောဆိုးနှင့်ရုပ်ဆိုး။ neurobiology အတွက်လက်ရှိအမြင်။ 2008; 18: 185-196 ။ [PubMed]
Descarries L ကို, Berube-Carrier N ကို, Riad M ကဘို GD, Mendez ဂျာ Trudeau LE ။ dopamine အာရုံခံအတွက်အချိုမှု: ပျံ့ဂီယာနှိုင်းယှဉ် Synaptic ။ ဦးနှောက်သုတေသနပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2008; 58: 290-302 ။ [PubMed]
di Chiara G. အနျူကလိယ shell ကိုနှင့်အဓိက dopamine accumbens: အပြုအမူများနှင့်စွဲလမ်းအတွက် differential ကိုအခန်းကဏ္ဍကို။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 2002; 137: 75-114 ။ [PubMed]
Dommett အီး, Coizet V ကို, Blaha CD ကို, Martindale J ကို, Lefebvre V ကို, ဝေါ်လ်တန် N ကို, Mayhew je, Overton PG, Redgrave P. အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုတိုတောင်းအောင်းနေချိန်မှာ dopaminergic အာရုံခံကိုသက်ဝင်ပုံ။ သိပ္ပံ။ 2005; 307: 1476-1479 ။ [PubMed]
Dormont JF, အခြေအနေ H ကို, Farin ဃကြောင်အခြေအနေများမော်တာစွမ်းဆောင်ရည် ဆက်စပ်. အတွက် pedunculopontine tegmental နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဗြဲ context-မှီခိုခြင်းနှင့်အားဖြည့်-related တစ်ခုတည်းယူနစ်လှုပ်ရှားမှု။ စမ်းသပ်ဆဲဦးနှောက်သုတေသန။ Experimentelle Hirnforschung ။ 1998; 121: 401-410 ။ [PubMed]
Duzel အီး, Bunzeck N ကို, Guitart-Masip M က, dopamine (ခြေသလုံး) ကမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေရေး၏ Duzel အက်စ်အသစ်အဆန်း-related လှုံ့ဆော်မှု: ကျန်းမာအိုမင်းမှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ neuroscience နှင့် biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2010; 34: 660-669 ။ [PubMed]
el-Amami H ကို, ဟော်လန် PC ကို။ သင်ယူ Orient နဲ့မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုအပေါ် ventral tegmental ဧရိယာသို့မဟုတ် substantia nigra ထံမှ amygdala အလယ်ပိုင်းနျူကလိယချိတ်ဆက်မှုကိုဖြတ်တောက်၏ Dissociable ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2007; 25: 1557-1567 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများ၏ Ettenberg အေပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုဂုဏ်သတ္တိများ။ neuroscience နှင့် biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2004; 27: 721-728 ။ [PubMed]
Fadok JP, Dickerson TM, Palmiter RD ။ Dopamine cue-မှီခိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်ဘို့လိုအပ်ပေသည်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 11089-11097 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fairhall AL, Lewen GD, Bialek W က, က de Ruyter ဗန် Steveninck RR ။ တစ်ဦးသပ္ပါယ်အာရုံကြောကုဒ်အတွက်ထိရောက်မှုနှင့်မရေရာဒွိဟ။ သဘာဝ။ 2001; 412: 787-792 ။ [PubMed]
Faure တစ်ဦးက, Haberland ဦး, အခြေအနေက F, အယ်လ် Massioui N. ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အဆိုပါ nigrostriatal dopamine စနစ်လှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုအလေ့အထဖွဲ့စည်းရေး disrupts ။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 2771-2780 ။ [PubMed]
Faure တစ်ဦးက, Reynolds က SM, ရစ်ချတ် JM, Berridge KC ။ အလိုဆန္ဒအတွက် Mesolimbic dopamine နဲ့ကြောက်: အနျူကလိယ accumbens အတွက်ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောအချိုမှုပြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးခံရဖို့အားဖွင့်လှုံ့ဆျောမှု။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 7184-7192 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fiorillo CD ကို, Newsome WT, Schultz ဒဗလျူ dopamine အာရုံခံအတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း၏ယာယီတိ။ နတ် neuroscience ။ 2008; 11: 966-973 ။ [PubMed]
Fiorillo CD ကို, Tobler PN, dopamine အာရုံခံအားဖြင့်ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်မသေချာမရေရာ၏ Schultz ဒဗလျူပြတ်နိုင်တဲ့ coding ။ သိပ္ပံ။ 2003; 299: 1898-1902 ။ [PubMed]
Floresco SB, Ghods-Sharifi S က, Vexelman ကို C, Magyar O. Dissociable အခန်းကဏ္ဍဟာနျူကလိယဘို့ set ကိုရွေ့ပြောင်းထိန်းညှိအတွက် core နဲ့ shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 2449-2457 ။ [PubMed]
Ford ကားက CP, Gantz SC, Phillips က PE, Williams က JT ။ dendrite နှင့် axon ဆိပ်ကမ်းမှာ extracellular dopamine ၏ထိန်းချုပ်ရေး။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 6975-6983 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဖရန့် MJ ။ အဆိုပါ Basal ganglia အတွက် dynamic dopamine မော်ဂျူ: Medical နှင့် nonmedicated Parkinson အတွက်သိမြင်မှုလိုငွေပြမှု၏ neurocomputational အကောင့်။ သိမြင်မှုမှ neuroscience ၏ဂျာနယ်။ 2005; 17: 51-72 ။ [PubMed]
ဖရန့် MJ, Fossella ဂျေအေ။ Neurogenetics နှင့်သင်ယူမှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုး၏ဆေးဝါးဗေဒ။ Neuropsychopharmacology ။ 2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဖရန့် MJ, Seeberger LC, O'Reilly RC ။ မုန္လာဥနီ by သို့မဟုတ်ချောင်းကို by: သိမြင်မှုအားဖြည့် Parkinson အတွက်သင်ယူမှု။ သိပ္ပံ။ 2004; 306: 1940-1943 ။ [PubMed]
Gallistel CR, မျောက်လွှဲကျော်ဂျေအချိန်, မှုနှုန်းနှင့်အေးစက်။ Psychol ဗျာ 2000; 107: 289-344 ။ [PubMed]
Gao DM, Jeaugey L ကို, Pollak P ကို, Benabid AL ။ အဆိုပါ substantia nigra ၏ယူဆ dopaminergic အာရုံခံထံမှပြင်းထန်မှု-မှီခို nociceptive တုံ့ပြန်မှု, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula သွင်းအားစုအားဖြင့်ကြွက်နှင့်၎င်းတို့၏ပြုပြင်မွမ်းမံအတွက် compacta အဆန်းစစ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1990; 529: 315-319 ။ [PubMed]
Gauriau ကို C, Bernard JF ။ ကြွက်များတွင်နာကျင်မှုလမ်းကြောင်းနှင့် parabrachial ဆားကစ်။ စမ်းသပ်ဇီဝြဖစ်စဉ်။ 2002; 87: 251-258 ။ [PubMed]
Geisler S က, Zahm DS ။ Integrated လုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက်ကြွက်-ခန္ဓာဗေဒ substratum အတွက် ventral tegmental ဧရိယာ၏ Afferents ။ နှိုင်းယှဉ်အာရုံကြောများ၏ဂျာနယ်။ 2005; 490: 270-294 ။ [PubMed]
Gerfen CR, Engber TM, မာဟန် LC, Susel Z ကို, Chase TN, Monsma FJ, Jr က Sibley DR ။ D1 နှင့် D2 striatonigral နှင့် striatopallidal အာရုံခံ၏ dopamine အဲဒီ receptor-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဗီဇစကားရပ်။ သိပ္ပံ။ 1990; 250: 1429-1432 ။ [PubMed]
Ghods-Sharifi S က, Floresco SB ။ ယင်းနျူကလိယ၏ inactivations အားဖြင့်သွေးဆောင်ဝအားထုတ်မှုအပေါ် differential သက်ရောက်မှု core ကိုသို့မဟုတ် shell ကို accumbens ။ အမူအကျင့်မှ neuroscience ။ 2010; 124: 179-191 ။ [PubMed]
Gonon အပြည်ပြည်သွား။ အတွက် Vivo electrochemistry နေဖြင့်လေ့လာခဲ့အဖြစ်ကြွက် midbrain dopaminergic အာရုံခံခြင်းဖြင့်ဖြန့်ချိချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့စီးဆင်းမှုနှင့် dopamine အကြား Nonlinear ကြားဆက်ဆံရေး။ neuroscience ။ 1988; 24: 19-28 ။ [PubMed]
goto Y ကို, ယန် CR, prefrontal cortex အတွက် Otani အက်စ် Functional နှင့်အလုပ်မဖြစ် Synaptic plasticity: စိတ်ရောဂါမမှန်အတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ ဟားဗတ်။ 2010; 67: 199-207 ။ [PubMed]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Bunney BS ။ nigral dopaminergic အာရုံခံ -1 ၏ Intracellular နှင့် extracellular electrophysiology ။ ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1983; 10: 301-315 ။ [PubMed]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Floresco SB, Goto Y ကို, Lodge DJ သမား။ dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်၏ပစ်ခတ်ရန်၏စည်းမျဉ်း။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2007; 30: 220-227 ။ [PubMed]
Grecksch, G, မက်တီအိပ်ချ်တစ်ဦးရောင်ခြည်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအတွက်စုစည်းပြီးများအတွက်ကြွက် hippocampus အတွက် dopaminergic ယန္တရားများရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology (Berl) 1981; 75: 165-168 ။ [PubMed]
Guarraci အက်ဖ်အေ, Kapp BS ။ အဆိုပါနိုးယုန်အတွက် differential ကို pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်း ventral tegmental ဧရိယာ dopaminergic အာရုံခံတစ်ခု electrophysiological စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 1999; 99: 169-179 ။ [PubMed]
ခန်းမ J ကို, ပါကင်ဂျာကော် TM, Dickinson တစ်ဦးက, Everitt BJ ။ အဆိုပါ amygdala နှင့်နျူကလိယ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆာပအပြုအမူအပေါ် Pavlovian လွှမ်းမိုးမှုဖြန်ဖြေအတွက်အဓိက accumbens ။ neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2001; 13: 1984-1992 ။ [PubMed]
ဟန် JS, McMahan RW, ဟော်လန် P ကို, Gallagher အမ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုအတွက် amygdalo-nigrostriatal လမ်းကြောင်း၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 3913-3919 ။ [PubMed]
Harris က GC, Aston-ဂျုံးစ် G. အ arousal နှင့်ဆုလာဘ်: orexin function ကိုတစ်ဦး dichotomy ။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2006; 29: 571-577 ။ [PubMed]
Herry ကို C, Bach DR, Esposito က F, လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန် amygdala အတွက်ယာယီခန့်မှန်းရခက်၏ Di Salle က F, Perrig WJ, Scheffler K ကို Luthi တစ်ဦးက, Seifritz အီးထုတ်ယူခြင်း။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 5958-5966 ။ [PubMed]
Hikida T က, Kimura K ကို Wada N ကို, Funabiki K ကို Nakanishi အက်စ်ဆုချမှတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် striatal လမ်းကြောင်းအတွက် Synaptic ဂီယာ၏ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆန္ဒရှိအပြုအမူ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010; 66: 896-907 ။ [PubMed]
ဆုလာဘ်-oriented မျက်စိလှုပ်ရှားမှု၏ Hikosaka O. Basal ganglia ယန္တရားများ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2007; 1104: 229-249 ။ [PubMed]
Hikosaka O. အဆိုပါ habenula: စိတ်ဖိစီးမှုရှောင်တိမ်းမှုတွေကိုထံမှတန်ဖိုးကို-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2010; 11: 503-513 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hikosaka အို Takikawa Y ကို, ရည်ရွယ်ချက် saccadic မျက်စိလှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုအတွက် Basal ganglia ၏ Kawagoe R. အခန်းက္ပ။ ဇီဝကမ္မပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2000; 80: 953-978 ။ [PubMed]
Hitchcott PK, Quinn JJ, တေလာ JR ။ prefrontal cortical dopamine နေဖြင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကို Bidirectional မော်ဂျူ။ Cereb Cortex ။ 2007; 17: 2820-2827 ။ [PubMed]
Hnasko TS, Chuhma N ကို, Zhang က H ကို, Goh က GY, Sulzer: D, Palmiter RD, Rayport S ကို Edwards က RH အ။ Vesicular အချိုမှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Vivo အတွက် dopamine သိုလှောင်မှုနဲ့အချိုမှု corelease အားပေးအားမြှောက်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010; 65: 643-656 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဟော်လန်ကို PC, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ကိုယ်စားပြုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် Gallagher အမ် Amygdala circuitry ။ သိမြင်မှုသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 1999; 3: 65-73 ။ [PubMed]
Hollerman JR, Schultz ဒဗလျူ Dopamine အာရုံခံလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်၏ယာယီခန့်မှန်းမှာအမှားသတင်းပို့ပါ။ နတ် neuroscience ။ 1998; 1: 304-309 ။ [PubMed]
Holroyd သမဝါယမ, Cole MG ။ အားဖြည့်သင်ယူမှု, dopamine, နှင့်အမှား-related အဆိုးမြင်အတွေးတွေ: လူ့အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့များ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ Psychol ဗျာ 2002; 109: 679-709 ။ [PubMed]
ဟောင်ကောင်က S, Hikosaka O. အဆိုပါ globus pallidus ဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula မှဆုလာဘ်-related အချက်ပြမှုများပေးပို့သည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 60: 720-729 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Horvitz JC ။ အဓိကမဟုတ်တဲ့ဆုလာဘ်ဖြစ်ရပ်များမှ Mesolimbocortical နှင့် nigrostriatal dopamine တုံ့ပြန်မှု။ neuroscience ။ 2000; 96: 651-656 ။ [PubMed]
Houk JC, အဒမ် JL, Barto AG က။ အဆိုပါ Basal ganglia အားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းအာရုံကြောအချက်ပြထုတ်ပေးနှင့်ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကို၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်။ ခုနှစ်တွင်: Houk JC, Davis က JL, Beiser DG, အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါ Basal Ganglia အတွက်ပြန်ကြားရေးထုတ်ယူခြင်း၏မော်ဒယ်များ။ ကင်းဘရစ်, MA: MIT ကစာနယ်ဇင်း; 1995 ။ စစ။ 249-274 ။
တစ်ဦးက neurobiological သီအိုရီ: အ mesolimbic dopamine system ကိုကျော်လွန်ပြီး Ikemoto အက်စ်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry ။ neuroscience နှင့် biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ito က R ကို, Dalley JW, Howes SR, Robbins TW, Everitt BJ ။ ကိုကင်းတွေကိုရန်နှင့်သည်အထိအတွက်ကင်း-ရှာအပြုအမူစဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်မှုအတွက်နျူကလိယ Accumbens Core နှင့်ရှဲလ်အခြေအနေများ Dopamine သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ Dissociation ။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 7489-7495 ။ [PubMed]
Ivlieva နယူးယော့, Timofeeva NO ။ တစ်အစားအစာ-related အော်ပရေတာအေးစက်တုံ့ပြန်မှုစဉ်အတွင်း pedunculopontine နျူကလိယထဲမှာအာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု။ neuroscience နှင့်အပြုအမူဇီဝကမ္မဗေဒ။ 2003a; 33: 919-928 ။ [PubMed]
Ivlieva နယူးယော့, Timofeeva NO ။ တစ်ဦး operating conditional တုံ့ပြန်မှုစဉ်အတွင်း pedunculopontine နျူကလိယထဲမှာအာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု။ neuroscience နှင့်အပြုအမူဇီဝကမ္မဗေဒ။ 2003b; 33: 499-506 ။ [PubMed]
ventral tegmental dရိယာ dopamine အာရုံခံ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက် stria terminal ၏အိပ်ရာနျူကလိယ Jalabert M က, Aston-Jones က G, Herzog အီး, Manzoni အို, Georges အက်ဖ်၏အခန်းက္ပ။ neuro-psychopharmacology & ဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှုတိုးတက်မှု။ 2009; 33: 1336-1346 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Jeanblanc J ကို, Hoeltzel တစ်ဦးက, dopaminergic အာရုံခံများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် Louilot အေ Dissociation ငုပ်လျှိုးနေတားစီးနှင့်ထိခိုက်စေအမြင်အတွက်နျူကလိယ accumbens ၏ core နဲ့ shell ကိုငျဒသေ innervating ။ neuroscience ။ 2002; 111: 315-323 ။ [PubMed]
Jensen J ကို, Smith က AJ, Willeit M က, Crawley က AP, Mikulis DJ သမား, Vitcu ငါလူသားများအတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းကာလအတွင်း valence vs. salience များအတွက် Kapur အက်စ်သီးခြားဦးနှောက်ဒေသများကုဒ်။ လူ့ဦးနှောက်ကိုမြေပုံ။ 2007; 28: 294-302 ။ [PubMed]
Jhou TC, Fields HL, Baxter MG, Saper သမဝါယမ, ဟော်လန် PC ကို။ အဆိုပါ rostromedial tegmental နျူကလိယ (RMTg), midbrain dopamine အာရုံခံတစ် GABAergic afferent, ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု encodes နှင့်မော်တာတုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009a; 61: 786-800 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Jhou TC, Geisler S က, Marinelli M က, Degarmo BA, Zahm DS ။ အဆိုပါ mesopontine rostromedial tegmental နျူကလိယ: အ ventral Tsai ၏ tegmental ဧရိယာနှင့် substantia nigra compacta အဖို့မှန်းချက်ရဲ့သောနှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula အားဖြင့်ပစ်မှတ်ထားတစ်ဦးကဖွဲ့စည်းပုံ။ နှိုင်းယှဉ်အာရုံကြောများ၏ဂျာနယ်။ 2009b; 513: 566-596 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂျီ H ကို, Shepard PD ။ lateral habenula ဆွနေတဲ့ဂါဘမြို့သား (က) အဲဒီ receptor-mediated ယန္တရားမှတဆင့်ကြွက် midbrain dopamine အာရုံခံဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 6923-6930 ။ [PubMed]
Jin က X ကို, ကော်စတာ RM ။ / Start ရပ်နားအချက်ပြမှုများကို sequence ကိုသင်ယူမှုစဉ်အတွင်း nigrostriatal ဆားကစ်အတွက်ပေါ်ပေါက်လာကြသည်။ သဘာဝ။ 2010; 466: 457-462 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Johansen JP, Fields HL ။ anterior cingulate cortex ၏ Glutamatergic activation အနေနဲ့ဆန္ဒရှိသင်ကြားမှု signal ကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ နတ် neuroscience ။ 2004; 7: 398-403 ။ [PubMed]
ယောသပ်သည် MH, Datla K သည်, လူငယ်လေး။ နျူကလိယ၏တိုင်းတာခြင်း၏အနက်ကိုအတွက် Vivo Dialysis အားဖြင့် dopamine accumbens: အကန်, ထိုတဏှာသို့မဟုတ်သိမှတ်ခံစားမှု? neuroscience နှင့် biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2003; 27: 527-541 ။ [PubMed]
ယောရှုသည် M က, Adler တစ်ဦးက, Bergman အိပ်ချ်မော်တာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်အတွက် dopamine ၏ဒိုင်းနမစ်။ neurobiology အတွက်လက်ရှိအမြင်။ 2009a; 19: 615-620 ။ [PubMed]
ယောရှုသည် M က, Adler တစ်ဦးက, Mitelman R ကို, Vaadia အီး, Bergman အိပ်ချ် Midbrain dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့် striatal cholinergic interneurons ဆုလာဘ်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဂန္ထဝင်အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောယုဂ်မှာဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များအကြားခြားနားချက်ဝှက်။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 11673-11684 ။ [PubMed]
ယောရှုသည် M က, Adler တစ်ဦးက, Prut Y ကို, Vaadia အီး, Wickens JR, midbrain dopaminergic အာရုံခံ၏ Bergman အိပ်ချ်ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းကြိုးဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009b; 62: 695-704 ။ [PubMed]
Kable JW, Glimcher PW ။ ဆုံးဖြတ်ချက်၏ neurobiology: သဘောတူညီမှုများနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009; 63: 733-745 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kakade S ကဒါယန်း P. Dopamine: General နှင့်ဆုကြေးငွေ။ အာရုံကြောကွန်ယက်။ 2002; 15: 549-559 ။ [PubMed]
ထစ်အငေါ့ salience တစ်ပြည်နယ်အဖြစ် Kapur အက်စ်စိတ္တ: schizophrenia အတွက်ဇီဝဗေဒချိတ်ဆက်မူဘောင်, phenomenology နှင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ Psychiatry ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2003; 160: 13-23 ။ [PubMed]
Kaufling J ကို, Veinante P ကို, Pawlowski လုပ် SA, Freund-Mercier MJ, Barrot အမ် Afferents ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၏ GABAergic အမြီးရန်။ နှိုင်းယှဉ်အာရုံကြောများ၏ဂျာနယ်။ 2009; 513: 597-621 ။ [PubMed]
Kennerley SW, Wallis ဟာ JD ။ အဆိုပါတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွက်တစ်ခုတည်းအာရုံခံခြင်းဖြင့်ရွေးချယ်မှုများသုံးသပ်စိစစ်: မျိုးစုံဆုံးဖြတ်ချက် variable တွေကိုဖြတ်ပြီး encoded ရလဒ်ကိုတန်ဖိုး။ neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2009; 29: 2061-2073 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကင်မ် H ကို, Sul JH ဟမ် N ကို, Lee က D:, Jung မဂ္ဂါဝပ်။ ရှေးခယျြသောလုပ်ရပ်များ၏တန်ဖိုးများကို update အတွက် striatum ၏အခန်းက္ပ။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 14701-14712 ။ [PubMed]
Kiyatkin EA ၏။ ယူဆ dopamine ပါဝင်သောနှင့်သတိကြွက်အခြား ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron ၏ functional ဂုဏ်သတ္တိများ။ int J ကို neuroscience ။ 1988a; 42: 21-43 ။ [PubMed]
Kiyatkin EA ၏။ သတိကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများ၏မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ပြုပြင်မွမ်းမံ။ အလုပ်သင်ဆရာဝန် J ကိုအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1988b; 41: 57-70 ။ [PubMed]
Klingberg တီသင်တန်းနှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏ plasticity ။ သိမြင်မှုသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2010; 14: 317-324 ။ [PubMed]
Kobayashi S က, Nomoto K ကိုက Watanabe က M, Hikosaka အို Schultz W က, ဟာ Macaque နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal cortex အတွက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိရလဒ်များ၏ Sakagami အမ်သွဇာ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 51: 861-870 ။ [PubMed]
Kobayashi S က, dopamine အာရုံခံ၏တုံ့ပြန်မှုအပေါ်ဆုလာဘ်နှောင့်နှေး၏ Schultz ဒဗလျူသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 7837-7846 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kobayashi Y ကို, Inoue Y ကို, Yamamoto က M, ဟေရှာ T က, မျောက်အတွက်အမြင်အာရုံပဲ့ထိန်း saccade အလုပ်များကိုစွမ်းဆောင်ရည်မှ pedunculopontine tegmental နျူကလိယတွင် neuron ၏ Aizawa အိပ်ချ်ပံ့ပိုးပေးခြင်း။ J ကို Neurophysiol ။ 2002; 88: 715-731 ။ [PubMed]
ယင်းဟာ Macaque anterior cingulate အတွက် Koyama T က, Tanaka YZ, Mikami အေ Nociceptive အာရုံခံနာကျင်မှု၏မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းကိုသက်ဝင်။ Neuroreport ။ 1998; 9: 2663-2667 ။ [PubMed]
Kravitz AV စနစ်, Freeze BS, က Parker PR စနစ်, ကေး K ကိုသွင် MT, Deisseroth K ကို Kreitzer AC အ။ Basal ganglia circuitry ၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုတို့က parkinsonian မော်တာအပြုအမူတွေ၏စည်းမျဉ်း။ သဘာဝ။ 2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lammel S က, Hetzel တစ်ဦးက, Hackel အိုဂျုံးစ်ငါ Liss B ကတစ်ဦးကို dual mesocorticolimbic dopamine သည့်စနစ်အတွင်း mesoprefrontal အာရုံခံ၏ Roeper ဂျေထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 57: 760-773 ။ [PubMed]
lang PJ, Davis ကအမ် Emotion, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဦးနှောက်: တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့သုတေသနအတွက်တုံ့ပြန်မှုအမြစ်လည်း။ ဦးနှောက်သုတေသနအတွက်တိုးတက်မှုကို။ 2006; 156: 3-29 ။ [PubMed]
Lapish CC ကို, Kroener S က, Durstewitz: D, Lavin တစ်ဦးက, Seaman JK ။ ကွဲပြားယာယီ Modes သာလုပ်ကိုင်ဖို့ mesocortical dopamine စနစ်၏စွမ်းရည်။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 191: 609-625 ။ [PubMed]
Lee က D:, ထိုမျောက် dorsolateral prefrontal cortex အတွက်အားဖြည့်လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏ Seo အိပ်ချ်ယန္တရားများ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2007; 1104: 108-122 ။ [PubMed]
Lee က HJ, Groshek က F, Petrovich GD, Cantalini JP, Gallagher M က, ဟော်လန် PC ကို။ အစားအသောက်နှင့်အတူတွဲနေတဲ့အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများအေးစက်အတွက် amygdalo-nigral circuitry ၏အခန်းက္ပ။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 3881-3888 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Levita L ကို, Dalley JW, Robbins TW ။ နျူကလိယ dopamine accumbens ကြောက် revisited သင်ယူ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အချို့သောတွေ့ရှိချက်အသစ်များ။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 2002; 137: 115-127 ။ [PubMed]
Lin က SC, Nicolelis MA ။ valence ၏ Basal Forebrain encoding Salience မသက်ဆိုင်ဘဲမူလအတွက်အာရုံခံ Ensemble burst ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59: 138-149 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Litt တစ်ဦးက, Plassmann H ကို, Shiv B, Rangel အေဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းအဘိုးပြတ်နှင့် saliency အချက်ပြမှုများ Dissociating ။ Cereb Cortex ။ 2010 စာနယ်ဇင်းအတွက်။ [PubMed]
လျူ Z ကို, Richmond BJ, Murray EA ၏, Saunders RC, Steenrod S က, Stubblefield ကယ်, မွန်တဂူ DM, Ginns EI ။ ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းတွေကိုလေ့လာသင်ယူ rhinal cortex D2 Receptor protein အား၏ပစ်မှတ်ထား DNA ကို reversibly လုပ်ကွက်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2004; 101: 12336-12341 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လျူ ZH, ရှင် R ကို, ကိုထိခိုက် encoding ကအတွက် medial A10 dopamine အာရုံခံ၏ Ikemoto အက်စ် Dual-အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 3010-3020 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lobo MK, Covington သူ, 3rd, Chaudhury: D, Friedman AK Sun, H ကို, et al Damez-Werno: D, Dietz DM, ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့သမ္မတအိုဘားမားလွှတ်တော်မှာ S က, Koo JW, ကနေဒီ PJ ။ တူတဲ့ကင်းဆုလာဘ်၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြ BDNF ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့အရှုံး။ သိပ္ပံ။ 2010; 330: 385-390 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Maeda ဟာ H ကို, Mogenson GJ ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ, substantia nigra နှင့်ကြွက်များ၏ midbrain reticular ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ရံဆွ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက်သုတေသနစာစောင်။ 1982; 8: 7-14 ။ [PubMed]
Mantz J ကို, Thierry လေး, mesocortical နှင့် mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ဥတုမှုနှုန်းအပေါ် noxious အမြီးအဖြစ်တော့၏ Glowinski ဂျေ Effect: အ mesocortical စနစ်၏ရွေးချယ် activation ။ ဦးနှောက် Res ။ 1989; 476: 377-381 ။ [PubMed]
Margolis eb, Lock ကို H ကို, Hjelmstad GO, Fields HL ။ revisited အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ: dopaminergic အာရုံခံတစ်ခု electrophysiological အမှတ်အသားရှိသလော ဇီဝြဖစ်စဉ်အဆိုပါဂျာနယ်။ 2006; 577: 907-924 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Margolis eb, Mitchell က JM, Ishikawa J ကို, Hjelmstad GO, Fields HL ။ Midbrain dopamine အာရုံခံ: အနာဂတ်ပစ်မှတ်အရေးယူအလားအလာကြာချိန်နှင့် dopamine: D (2) အဲဒီ receptor တားစီးဆုံးဖြတ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 8908-8913 ။ [PubMed]
မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Blander DS, Hoebel BG ။ တစ်ဦးကအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုသင်ယူအရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပြီးနောက်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine လျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 551: 308-310 ။ [PubMed]
Marowsky တစ်ဦးက, Yanagawa Y ကို, Obata K သည်, Vogt Ke ။ interneurons ၏အထူးပြု subclass amygdala function ကို၏ dopaminergic ပံ့ပိုး mediates ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 48: 1025-1037 ။ [PubMed]
Matsumoto က M, Hikosaka O. Lateral dopamine အာရုံခံအတွက်အနုတ်လက္ခဏာဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ် habenula ။ သဘာဝ။ 2007; 447: 1111-1115 ။ [PubMed]
Matsumoto က M, ထိုမျောက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula အတွက်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခွန်အားနိုးတန်ဖိုး Hikosaka O. ကိုယ်စားပြုမှု။ နတ် neuroscience ။ 2009a; 12: 77-84 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Matsumoto က M, Hikosaka O. dopamine အာရုံခံဆဲလျနှစ်ယောက်အမျိုးအစားများအဖြစ်ထင်ရှားစွာအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်ပြမှုများကိုဖျောပွ။ သဘာဝ။ 2009b; 459: 837-841 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Matsumoto က M, Matsumoto K ကိုအာဘေးက H ကို, action ကိုတန်ဖိုးများများခန့်မှန်းအမှားများကိုအချက်ပြတာနာကာ K. Medial prefrontal ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှု။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 647-656 ။ [PubMed]
မေလ PJ, McHaffie JG စတန်းဖို့ဒ် TR, Jiang H ကို, Costello MG, Coizet V ကို, ဟေးယက် LM, Haber SN, ထိုမျောက်အတွက် Redgrave P. Tectonigral စီမံချက်များ: midbrain dopaminergic အာရုံခံမှ Pre-စေ့စေ့နားထောင်အာရုံခံ input ကိုများအတွက်လမ်းကြောင်း။ neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2009; 29: 575-587 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Mazzoni P၊ Hristova A၊ Krakauer JW ။ ဘာကြောင့်မြန်မြန်မရွှေ့တာလဲ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ လှုပ်ရှားတက်ကြွမှုနှင့်သွယ်ဝိုက်လှုံ့ဆော်မှု။ J ကို Neurosci ။ 2007; 27: 7105-7116 ။ [PubMed]
Merali Z၊ Michaud D၊ McIntosh J၊ Kent P၊ လှုံ့ဆော်မှုများ၏အဓိကကျမှုနှင့် valence တွင် amygdaloid CRH စနစ် (များ) ၏ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်မှု။ neuro-psychopharmacology & ဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှုတိုးတက်မှု။ 2003; 27: 1201-1212 ။ [PubMed]
Mirenowicz J ကို, Schultz ဒဗလျူအစာစားချင်စိတ်များက midbrain dopamine အာရုံခံ၏ဦးစားပေး activation ထက်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု။ သဘာဝ။ 1996; 379: 449-451 ။ [PubMed]
Molina-Luna K ကို Pekanovic တစ်ဦးက, Rohrich S က, Hertler B, Schubring-Giese M က, Rioult-Pedotti က MS, Luft AR ။ မော်တာ cortex အတွက် Dopamine ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူမှုနှင့် Synaptic plasticity ဘို့လိုအပ်ပေသည်။ PLoS ONE ။ 2009; 4: e7082 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂူ PR စနစ်, Bern GS ။ အာရုံကြောဘောဂဗေဒနှင့်အဘိုးပြတ်၏ဇီဝအလွှာဟာ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 36: 265-284 ။ [PubMed]
ဂူ PR စနစ်ဒါယန်း P ကို, Sejnowski တီဂျေ။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် Hebbian သင်ယူမှုအပေါ်အခြေခံပြီး mesencephalic dopamine စနစ်များများအတွက်တစ်ဦးကမူဘောင်။ J ကို neuroscience ။ 1996; 16: 1936-1947 ။ [PubMed]
မောရစ်, G, Arkadir: D, Nevet တစ်ဦးက, Vaadia အီး, Bergman အိပ်ချ်တိုက်ဆိုင်မှုပေမယ် midbrain dopamine နဲ့ striatal ၏ကွဲပြားမက်ဆေ့ခ်ျလုပ်သူများတက်ကြွအာရုံခံ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 43: 133-143 ။ [PubMed]
မောရစ်, G, Nevet တစ်ဦးက, Arkadir: D, Vaadia အီး, Bergman အိပ်ချ် Midbrain dopamine အာရုံခံအနာဂတ်အရေးယူဘို့ဆုံးဖြတ်ချက်များဝှက်။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 1057-1063 ။ [PubMed]
Morrison SE, Salzman CD တချပ်ဖြစ်တယ်။ တစ်ခုတည်းတွင် neuron အတွက်ကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များ၏ convergence ။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 11471-11483 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nakahara H ကို, Itoh H ကို, Kawagoe R ကို, Takikawa Y ကို, Hikosaka O. Dopamine အာရုံခံအခြေအနေတွင်-မှီခိုခန့်မှန်းအမှားကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 41: 269-280 ။ [PubMed]
Nakamura K ကို saccades ၏ဆုလာဘ်မော်ဂျူအတွက်မျောက် caudate နျူကလိယအတွက် dopamine ၏ Hikosaka O. အခန်းက္ပ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 5360-5369 ။ [PubMed]
Neve Ka, Seaman JK, Trantham-Davidson အိပ်ချ် Dopamine အဲဒီ receptor အချက်ပြ။ အဲဒီ receptor နှင့် signal ကို transduction သုတေသနဂျာနယ်။ 2004; 24: 165-205 ။ [PubMed]
Nishijo H ကို, Ono T က, အကျိုးသက်ရောက်စေအရေးပါမှုနှင့်အတူရှုပ်ထွေးအာရုံခံဆွစဉ်အတွင်းသတိပေးချက်မျောက်များ၏ amygdala အတွက် Nishino အိပ်ချ်လူပျိုအာရုံခံဆဲလျတုံ့ပြန်မှု။ J ကို neuroscience ။ 1988; 8: 3570-3583 ။ [PubMed]
Nomoto K ကို Schultz W က, က Watanabe ကို T, Sakagami အမ်ယာယီသိမှုဆိုင်ရာအာရုံဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှုတောင်းဆိုဖို့ dopamine တုံ့ပြန်မှုတိုးချဲ့။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 10692-10702 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Okada K ကို Toyama K ကို Inoue Y ကို, ဟေရှာ T က, Kobayashi Y. အမျိုးမျိုး pedunculopontine tegmental အာရုံခံခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်တာဝန်ဆုလာဘ်အချက်ပြ။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 4858-4870 ။ [PubMed]
Omelchenko N ကို, ဘဲလ် R ကို, Sesack SR ။ ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine နဲ့ဂါဘမြို့သားအာရုံခံမှ lateral habenula စီမံကိန်းများ။ neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2009; 30: 1239-1250 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Owesson-White က, CA, Ariansen J ကို, Stuber GD, Cleaveland NA, ရူ့ JF, Wightman RM, Carelli RM ။ ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများ၏အာရုံကြော encoding ကအဆိုပါ accumbens core နဲ့ shell ကိုအတွက် phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူတော့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2009; 30: 1117-1127 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Oyama K ကို Hernadi ငါ Iijima T က, dorsal striatal အာရုံခံအတွက် Tsutsui K. ဆုကြေးခန့်မှန်းအမှားနိုင်တဲ့ coding ။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 11447-11457 ။ [PubMed]
Packard တို့ MG, အဖြူရောင်မိုင်။ dopamine agonists ၏ intracerebral ဆေးထိုး posttraining အားဖြင့် hippocampus နှင့် caudate နျူကလိယမှတ်ဉာဏ်စနစ် Dissociation ။ အမူအကျင့်မှ neuroscience ။ 1991; 105: 295-306 ။ [PubMed]
Padoa-Schioppa C. Orbitofrontal cortex နဲ့စီးပွားရေးတန်ဖိုးကို၏တွက်ချက်မှု။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2007; 1121: 232-253 ။ [PubMed]
Palmiter RD ။ dopamine-လစ်လပ်ကြွက်ထံမှသင်ခန်းစာများ: အ dorsal striatum အတွက်အချက်ပြ Dopamine လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2008; 1129: 35-46 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ပန် WX, Hyland BI ။ Pedunculopontine tegmental နျူကလိယကြွက်ပြုမူအတွက် midbrain dopamine အာရုံခံ၏အခွအေနေတုံ့ပြန်မှုထိန်းချုပ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 4725-4732 ။ [PubMed]
ပန် WX, Schmidt က R ကို, Wickens JR, Hyland BI ။ dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုနဲ့ယာယီခြားနားချက်မော်ဒယ်အားဖြင့်အကြံပြုသုဉ်း၏ပွင့်ဆိုင်ယန္တရား။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 9619-9631 ။ [PubMed]
က Parker JG, Zweifel LS, Clark က JJ, အီဗန် SB, Phillips က PE, Palmiter RD ။ dopamine အာရုံခံအတွက် NMDA receptors ၏မရှိခြင်း dopamine လွှတ်ပေးရန် attenuates ပေမယ် Pavlovian အေးစက်နေစဉ်အတွင်းချဉ်းကပ်အေးစက်ဘူး။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pascoe JP, Kapp BS ။ ယုန်အတွက် Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်း amygdaloid အလယ်ပိုင်းနျူကလိယတွင် neuron ၏ Electrophysiological ဝိသေသလက္ခဏာများ။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 1985; 16: 117-133 ။ [PubMed]
Pascucci T က, Ventura R ကို, Latagliata EC, Cabib S က, Puglisi-Allegra အက်စ်အဆိုပါ medial prefrontal cortex norepinephrine နှင့် dopamine ၏ဆန့်ကျင်လွှမ်းမိုးမှုမှတဆင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ accumbens dopamine တုံ့ပြန်မှုဆုံးဖြတ်သည်။ Cereb Cortex ။ 2007; 17: 2796-2804 ။ [PubMed]
Pearce JM, Pavlovian သင်ယူမှုများအတွက်ခန်းမ G. အဖြေမော်ဒယ်: ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု၏ conditional ၏ထိရောက်မှုအတွက်မူကွဲဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ Psychol ဗျာ 1980; 87: 532-552 ။ [PubMed]
Pezze MA, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက် Feldon ဂျေ Mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်း။ neurobiology အတွက်တိုးတက်မှုကို။ 2004; 74: 301-320 ။ [PubMed]
Phillips က AG က, Ahn S ကို, လင်းမြို့တွင် JG ။ အဆိုပါ mesocorticolimbic dopamine စနစ်၏ Amygdalar ထိန်းချုပ်မှု: လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူဖို့အပြိုင်လမ်းကြောင်း။ neuroscience နှင့် biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2003a; 27: 543-554 ။ [PubMed]
Phillips က GD, Salussolia အီး, Hitchcott PK ။ စိတ်ခံစားမှုသင်ယူမှုအတွက် mesoamygdaloid dopamine စီမံကိန်း၏အခန်းက္ပ။ Psychopharmacology ။ 2010 [PubMed]
Phillips က PE, Stuber GD, Heien ML, Wightman RM, Carelli RM ။ Subsecond dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုကင်းရှာအားပေးအားမြှောက်။ သဘာဝ။ 2003b; 422: 614-618 ။ [PubMed]
Porrino LJ, Goldman-Rakic ​​ဆာ။ HRP ၏ retrograde သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်ထင်ရှားသည့်မျောက်တွေကိုအတွက် prefrontal နှင့် anterior cingulate cortex ၏ innervation Brainstem ။ နှိုင်းယှဉ်အာရုံကြောများ၏ဂျာနယ်။ 1982; 205: 63-76 ။ [PubMed]
Puryear သမဝါယမကင်မ် MJ, Mizumori SJ ။ အဆိုပါလွတ်လပ်စွာသွားလာကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron နေဖြင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆုလာဘ်၏တွဲဖက် encoding က။ အမူအကျင့်မှ neuroscience ။ 2010; 124: 234-247 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ravel က S, Legallet အီး, ထိုမျောက် striatum အတွက် Apicella P. လုပ်သူများတက်ကြွအာရုံခံဦးစားလှုံ့ဆော်မှု appetitive တုံ့ပြန်ကြပါဘူး။ စမ်းသပ်ဆဲဦးနှောက်သုတေသန။ Experimentelle Hirnforschung ။ 1999; 128: 531-534 ။ [PubMed]
Ravel က S, Legallet အီး, ထိုမျောက် striatum အတွက်လုပ်သူများတက်ကြွအာရုံခံ၏ Apicella P. တုံ့ပြန်ချက် motivationally ဆန့်ကျင်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားခွဲခြားမှု။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 8489-8497 ။ [PubMed]
Ravel က S, Richmond BJ ။ အမြင်အာရုံ cued ဆုလာဘ်အချိန်ဇယားဖျော်ဖြေမျောက်တွေကို Dopamine အာရုံခံတုံ့ပြန်မှု။ neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2006; 24: 277-290 ။ [PubMed]
Redgrave P ကို, Gurney K. အဆိုပါရေတိုအောင်းနေချိန် dopamine signal ကို: ဝတ္ထုလုပ်ရပ်များရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအတွက်အခန်းကဏ္ဍ? နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2006; 7: 967-975 ။ [PubMed]
Redgrave P ကို, Prescott တီဂျေ, Gurney K. ဆုလာဘ်အမှားအချက်ပြဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်တို-အောင်းနေချိန် dopamine တုံ့ပြန်မှုလား? neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 1999; 12: 146-151 ။ [PubMed]
Rescorla RA, Wagner AR ။ Pavlovian အေးစက်၏သီအိုရီ: အားဖြည့်ခြင်းနှင့် nonreinforcement ၏ထိရောက်မှုအတွက်များပါတယ်။ ခုနှစ်တွင်: Black က AH, Prokasy WF, အယ်ဒီတာများ။ classical ကိုက် II ကို: လက်ရှိသုတေသနနှင့်သီအိုရီ။ နယူးယောက်, နယူးယောက်: Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းရာစု Crofts; 1972 ။ စစ။ 64-99 ။
Reynolds က JNJ, Hyland BI, Wickens JR ။ ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှု၏တစ်ဦးကဆယ်လူလာယန္တရား။ သဘာဝ။ 2001; 413: 67-70 ။ [PubMed]
Reynolds က SM, Berridge KC ။ နျူကလိယ၌အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောလှုံ့ဆော်မှုသည်အခွံ - GABA - ထုတ်ယူထားသောအစားအစာအတွက် bivalent rostrocaudal gradients၊ အရသာရှိသော“ နှစ်သက်သဘော” /“ မနှစ်မြို့ခြင်း” တုံ့ပြန်မှုများ၊ ဦး စားပေး / ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ J ကို Neurosci ။ 2002; 22: 7308-7320 ။ [PubMed]
ရစ်ချတ်ဆန် RT ကို, DeLong MR ။ မျောက်ဝံများအတွက်နျူကလိယ basalis ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများ Electrophysiological လေ့လာမှုများ။ စမ်းသပ်ဆဲဆေးဝါးနှင့်ဇီဝဗေဒတိုးတက်လာ။ 1991; 295: 233-252 ။ [PubMed]
Robbins TW, Arnsten AF ။ နံရံပစ်ကစားနည်း-Executive function ကို၏ neuropsychopharmacology: monoaminergic မော်ဂျူ။ neuroscience ၏နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်သုံးသပ်။ 2009; 32: 267-287 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင်သည် DL, Herman တစ်ဦးက, Seipel ကို AT, Wightman RM ။ ဦးနှောက်အတွက်လျင်မြန်စွာဓာတုဆက်သွယ်ရေးစောင့်ကြည့်။ ဓာတုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2008; 108: 2554-2584 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Roesch MR, Calu DJ သမား, Schoenbaum G. အ Dopamine အာရုံခံကွဲပြားခြားနားနှောင့်နှေးသို့မဟုတ်သုံးနိုင်ဆုလာဘ်များအကြားဆုံးဖြတ်ခြင်းကြွက်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ option ကိုဝှက်။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 1615-1624 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Roesch MR, Olson CR ။ မျောက်တိုကျရိုကျ cortex အတွက်တန်ဖိုးနှင့်လှုံ့ဆျောမှုဆုချနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံခံလှုပ်ရှားမှု။ သိပ္ပံ။ 2004; 304: 307-310 ။ [PubMed]
Roitman MF, ဝီ RA, Wightman RM, Carelli RM ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် real-time ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုခွဲခြား။ နတ် neuroscience ။ 2008; 11: 1376-1377 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rutledge RB၊ Lazzaro SC၊ Lau B၊ စီအီး Myers၊ Gluck MA၊ Glimcher PW ။ Dopaminergic ဆေးများသည်ပါကင်ဆန်၏လူနာများအတွက်သင်ကြားမှုနှုန်းနှင့်ဇွဲရှိရှိပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောင်းလဲပြီးတက်ကြွသောစားကျက်စားသည့်အလုပ်တွင်လုပ်ဆောင်သည် J ကို Neurosci ။ 2009; 29: 15104-15114 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Salamone JD ။ နျူကလိယ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆျောမှုအတွက် dopamine accumbens ။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 1994; 61: 117-133 ။ [PubMed]
Satoh T က, Nakai S က, Sato T က, Kimura အမ် dopamine အာရုံခံခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်၏လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရလဒ်ကို၏နိုင်တဲ့ coding ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 9913-9923 ။ [PubMed]
Savine AC၊ Beck SM၊ Edwards BG၊ Chiew KS, Braver TS ။ ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များအားဖြင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင့်။ သိမှတ်ခံစားမှု & စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ 2010; 24: 338-356 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schoenbaum, G, Roesch MR, Stalnaker က TA, Takahashi YK ။ သပ္ပါယ်အပြုအမူအတွက် orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်သစ်ရှုထောင့်။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2009; 10: 885-892 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မျောက်အတွက်အမူအကျင့်ခလုတ်လှုံ့ဆော်မှုမှ midbrain dopamine အာရုံခံ၏ Schultz ဒဗလျူတုံ့ပြန်ချက်။ J ကို Neurophysiol ။ 1986; 56: 1439-1461 ။ [PubMed]
Schultz dopamine အာရုံခံ၏ဒဗလျူခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ J ကို Neurophysiol ။ 1998; 80: 1-27 ။ [PubMed]
ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများမှာ Schultz ဒဗလျူအကွိမျမြားစှာ dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ neuroscience ၏နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်သုံးသပ်။ 2007; 30: 259-288 ။ [PubMed]
ဆုလာဘ်တန်ဖိုးနှင့်အန္တရာယ်အဘို့အ Schultz ဒဗလျူ Dopamine အချက်ပြမှုများ: အခြေခံများနှင့်မကြာသေးမီဒေတာ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Funct ။ 2010; 6: 24 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schultz W ကဒါယန်း P ကို, မွန်တဂူ PR စနစ်။ ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ။ 1997; 275: 1593-1599 ။ [PubMed]
Schultz W က, အမေ့ဆေးမျောက်အတွက်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှု somatosensory ဆွဖို့ nigrostriatal dopamine အာရုံခံ၏ Romo R. တုံ့ပြန်ချက်။ J ကို Neurophysiol ။ 1987; 57: 201-217 ။ [PubMed]
Schultz W က, မျောက် midbrain ၏ Romo R. Dopamine အာရုံခံ: ချက်ချင်းအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုကိုဆွဲထုတ်လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုများပေါ်ဖြစ်ပေါ်။ J ကို Neurophysiol ။ 1990; 63: 607-624 ။ [PubMed]
seo H ကို, အ dorsal anterior cingulate cortex အတွက်ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများ၏ Lee ကဃယာယီ filtering ကိုတစ်ဦးရောနှော-မဟာဗျူဟာဂိမ်းကာလအတွင်း။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 8366-8377 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Shabel SJ, Janak PH သည်။ Conditions အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိစိတ်ခံစားမှု arousal စဉ်အတွင်း amygdala အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအတွင်းသိသိသာသာတူ။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2009; 106: 15031-15036 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Shadmehr R ကို, Smith ကနေ MA, Krakauer JW ။ မှားယွင်းနေသည်ပြင်ဆင်ခြင်း, အာရုံခံဘီဘာအိုနှင့်မော်တော်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်လိုက်လျောညီထွေ။ neuroscience ၏နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်သုံးသပ်။ 2010 [PubMed]
Shen W က, Flajolet M က, Greengard P ကို, Surmeier DJ သမား။ striatal Synaptic plasticity ၏ Dichotomous dopaminergic ထိန်းချုပ်မှု။ သိပ္ပံ။ 2008; 321: 848-851 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Shimo Y ကို, အ subthalamic နျူကလိယအတွက် Wichmann တီအာရုံခံလှုပ်ရှားမှုဟာမျောက် striatum အတွက် dopamine များလွှတ်ပေးရန် modulates ။ neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2009; 29: 104-113 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Shippenberg TS, Bals-Kubik R ကို, Huber တစ်ဦးက, D-1 dopamine အဲဒီ receptor ရန်များ၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေ Herz အေ Neuroanatomical အလွှာဟာ။ Psychopharmacology (Berl) 1991; 103: 209-214 ။ [PubMed]
Shumake J ကို, Ilango တစ်ဦးက, Scheich H ကို, Wetzel W က, Ohl အက်ဖ်ဒဗလျူ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenula နှင့် ventral tegmental ဧရိယာအားဖြင့်ရှောင်ရှားခြင်းသင်ယူမှု၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း၏ differential neuromodulation ။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 5876-5883 ။ [PubMed]
အသေးစား DM, ဂရက်ဂိုရီ MD, Mak သင်တို့က, Gitelman: D, Mesulam MM, လူ့ gustation အတွက်ပြင်းထန်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအဘိုးပြတ်၏အာရုံကြောကိုယ်စားပြုမှု၏ Parrish တီ Dissociation ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 39: 701-711 ။ [PubMed]
Stefanie MR, Moghaddam ခနည်းဥပဒေသင်ယူမှုနှင့်အရေးပေါ်ဆုချကြွက် prefrontal cortex, နျူကလိယ accumbens နှင့် dorsal striatum အတွက် dopamine activation ၏ dissociable ပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 8810-8818 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Steinfels gf, Heym J ကို, Strecker RE, Jacobs BL ။ အဆိုပါအိပ်ပျော်ခြင်း-နှိုးသံသရာတစ်လျှောက်တင်ဆက်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုမှကြောင်တစ်ကောင်အတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏တုန့်ပြန်။ ဦးနှောက် Res ။ 1983; 277: 150-154 ။ [PubMed]
Strecker RE, Jacobs BL ။ အလိုအလျောက်ဥတုနှင့်အာရုံခံ evoked လှုပ်ရှားမှုအပေါ် arousal ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: ကြောင်ပြုမူအတွက် Substantia nigra dopaminergic ယူနစ်လှုပ်ရှားမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1985; 361: 339-350 ။ [PubMed]
Stuber GD, Hnasko TS, Britt JP, Edwards က RH အ, အနျူကလိယ accumbens အတွက် Bonci အေ Dopaminergic ဆိပ်ကမ်းသော်လည်းမ striatum dorsal အချိုမှု corelease ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2010; 30: 8229-8233 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stuber GD, Wightman RM, Carelli RM ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးသုဉ်းသည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် function နှင့်ယာယီကွဲပြား dopaminergic အချက်ပြမှုများကိုဖော်ပြသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 46: 661-669 ။ [PubMed]
Sul JH ကင်မ် H ကိုဟမ် N ကို, Lee က D:, Jung မဂ္ဂါဝပ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်ကြွက် orbitofrontal နှင့် medial prefrontal cortex ၏ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010; 66: 449-460 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Surmeier DJ သမား, Ding J ကို, နေ့ M က, ဝမ် Z ကို, striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် striatal glutamatergic အချက်ပြ၏ Shen ဒဗလျူ D1 နှင့် D2 dopamine-receptor မော်ဂျူ။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2007; 30: 228-235 ။ [PubMed]
Surmeier DJ သမား, Shen W က, နေ့ M က, Gertler T က, ချမ်းက S, Tian X ကို, Plotkin JL ။ striatal ဆားကစ်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုပြောင်းလဲပစ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဦးနှောက်သုတေသနအတွက်တိုးတက်မှုကို။ 2010; 183C: 148-167 ။ [PubMed]
Sutton RS, Barto AG က။ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း: သပ္ပါယ်ကွန်ရက်ခေတ်မီသီအိုရီဆီသို့။ Psychol ဗျာ 1981; 88: 135-170 ။ [PubMed]
Takahashi YK, Roesch MR, Stalnaker က TA, Haney RZ, Calu DJ သမား, တေလာ AR, Burke က ka, Schoenbaum G. အဒီ orbitofrontal cortex နဲ့ ventral tegmental ဧရိယာမျှော်လင့်မထားတဲ့ရလဒ်တွေကနေလေ့လာသင်ယူဘို့လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009; 62: 269-280 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Takikawa Y ကို, Kawagoe R ကို, Hikosaka O. အနေအထား-ဆုလာဘ်မြေပုံမှ saccades ၏ရေတိုနှင့်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေအတွက် midbrain dopamine အာရုံခံ၏တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှအခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Neurophysiol ။ 2004; 92: 2520-2529 ။ [PubMed]
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် mesolimbic dopamine အာရုံခံအားဖြင့်အချက်ပြ Tecuapetla က F, Patel က JC, Xenias H ကို, အင်္ဂလိပ်: D, Tadros ငါ Shah က F ကိုဘာလင် J ကို, Deisseroth K ကိုဆန် ME, Tepper JM, Koos တီ Glutamatergic ။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 7105-7110 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Thierry လေး, Tassin JP, Blanc, G, စိတ်ဖိစီးမှုများက mesocortical DA စနစ်၏ Glowinski ဂျေရွေးချယ် activation ။ သဘာဝ။ 1976; 263: 242-244 ။ [PubMed]
Tobler PN, Dickinson တစ်ဦးကတစ်ဦးအေးစက်တားစီး Paradigm အတွက် Dopamine အာရုံခံအားဖြင့်ခန့်မှန်းဆုကြေးပျက်ကွက်၏ Schultz ဒဗလျူ Coding ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 10402-10410 ။ [PubMed]
Tobler PN, Fiorillo CD ကို, dopamine အာရုံခံအားဖြင့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုး Schultz ဒဗလျူအလိုက်နိုင်တဲ့ coding ။ သိပ္ပံ။ 2005; 307: 1642-1645 ။ [PubMed]
Tsai HC, Zhang က F ကို, Adamantidis တစ်ဦးက, Stuber GD, Bonci တစ်ဦးက, က de Lecea L ကို, Dopaminergic အာရုံခံအတွက် Deisseroth K. Phasic ပစ်ခတ်မှုများသည်အပြုအမူအခြေအနေများလုံလောက်ပါသည်။ သိပ္ပံ။ 2009 [PubMed]
တုံ့ပြန်ချက်ကနေစွမ်းဆောင်ရည်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်ယူမှု၏ Ullsperger အမ်မျိုးဗီဇအသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုများ: dopamine နှင့် serotonin ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience နှင့် biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2010; 34: 649-659 ။ [PubMed]
Ungless MA ။ Dopamine: အအဓိကပြဿနာ။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2004; 27: 702-706 ။ [PubMed]
Uylings HB, Groenewegen HJ, Kolb ခ Do ကြွက်တစ်ဦး prefrontal cortex ရှိသည်? အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 2003; 146: 3-17 ။ [PubMed]
Ventura R ကို, Cabib S က, စိတ်ဖိစီးမှုမှ Puglisi-Allegra အက်စ်အတိုက်အခံ genotype-မှီခို mesocorticolimbic dopamine တုံ့ပြန်မှု။ neuroscience ။ 2001; 104: 627-631 ။ [PubMed]
Ventura R, Latagliata EC, Morrone C, La Mela I, Puglisi-Allegra S. Prefrontal norepinephrine သည်“ မြင့်မားသော” စိတ်ခွန်အားနိုးမှုကိုအဓိကဆုံးဖြတ်သည်။ PLOS ONE ။ 2008; 3: e3044 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ventura R ကို, Morrone ကို C, Puglisi-Allegra အက်စ် Prefrontal / accumbal catecholamines system ကို reward- နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်-related လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှစိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုဆုံးဖြတ်သည်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2007; 104: 5181-5186 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Vogt BA ဘွဲ့။ အဆိုပါ cingulate gyrus ၏မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက်နာကျင်မှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု interaction က။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2005; 6: 533-544 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Voon V ကို, Pessiglione M က, Brezing ကို C, Gallea ကို C, ဖာနန်ဒက်ဇနာရီ, Dolan RJ, Hallett အမ်ယန္တရားများ compulsive အပြုအမူတွေအတွက် dopamine-mediated ဆုလာဘ်ို့နှငျ့ဆအခြေခံ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010; 65: 135-142 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Waelti P ကို, Dickinson တစ်ဦးက, Schultz ဒဗလျူ Dopamine တုံ့ပြန်မှုတရားဝင်သင်ယူမှုသီအိုရီ၏အခြေခံယူဆချက်ကိုလိုက်နာ။ သဘာဝ။ 2001; 412: 43-48 ။ [PubMed]
Wallis ဟာ JD, Kennerley SW ။ prefrontal cortex အတွက်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများ။ neurobiology အတွက်လက်ရှိအမြင်။ 2010; 20: 191-198 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဝေါ်လ်တန် ME, ဘီရန်း TE, Buckley MJ, Rudebeck PH သည်, Rushworth MF ။ ယင်းဟာ Macaque ဦးနှောက်နှင့်ဆက်ပြောပါတယ်သင်ယူမှုအတွက် orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက်သီးခြားသင်ယူမှုစနစ်များကို။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010; 65: 927-939 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဝီ RA, ကြိုး RC, ဂျုံးစ် JL, Slater JM, Grigson PS, Carelli RM ။ အမူအကျင့်များနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာ၏ electrophysiological ညွှန်းကိန်းကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြိုတင်ခန့်မှန်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 57: 774-785 ။ [PubMed]
Wightman RM, Heien MLAV, Wassum KM, လေးလံနေတာတွေ့နေရ LA က, Aragona BJ, Khan က AS, Ariansen JL, ရူ့ JF, Phillips က PE, Carelli RM ။ Dopamine လွှတ်ပေးရေးကြွက်နျူကလိယ accumbens ၏ microenvironments အတွင်းပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနေသည်။ neuroscience ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2007; 26: 2046-2054 ။ [PubMed]
Williams က GV, Castner လုပ် SA ။ အဆိုပါကွေးလက်အောက်တွင်: အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်အတွက် D1 အဲဒီ receptor function ကို elucidating များအတွက်အရေးပါသောကိစ္စများ။ neuroscience ။ 2006; 139: 263-276 ။ [PubMed]
ဝီလျံသည် SM, Goldman-Rakic ​​ဆာ။ အဆိုပါမျောက် mesofrontal dopamine စနစ်၏ကျယ်ပြန့်ဇာစ်မြစ်။ Cereb Cortex ။ 1998; 8: 321-345 ။ [PubMed]
င်း P. ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး pedunculopontine tegmental နျူကလိယ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်: တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား။ အဆိုပါအာရုံကြောသိပ္ပံဂျာနယ်။ 2006; 248: 234-250 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2004; 5: 483-494 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ Forebrain အလွှာဟာ။ နှိုင်းယှဉ်အာရုံကြောများ၏ဂျာနယ်။ 2005; 493: 115-121 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု SP ။ phylogeny နှင့်အခြေခံ function ကို: တိုကျရိုကျလယ်ကွင်း forward ။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2008; 31: 599-608 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Yamada H ကို, Matsumoto N ကို, Kimura အမ်လုပ်သူများတက်ကြွသည့်မျောက် caudate နျူကလိယထဲမှာအာရုံခံခြင်းနှင့် putamen differential အန်ကုက်လုပ်လုပ်ဆောင်ချက်စိတ်ခွန်အားနိုးရလဒ်များညွှန်ကြားထား။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 3500-3510 ။ [PubMed]
Yamada H ကို, Matsumoto N ကို, Kimura အမ် History- နှင့် striatum အတွက်လာမည့်အမူအကျင့်ရလဒ်များ၏လက်ရှိညွှန်ကြားချက်-based နိုင်တဲ့ coding ။ J ကို Neurophysiol ။ 2007; 98: 3557-3567 ။ [PubMed]
ယဉ်နာရီ, Knowlton BJ ။ အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးအတွက် Basal ganglia ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2006; 7: 464-476 ။ [PubMed]
Young ကလေး, Moran pm တွင်ယောသပ်သည် MH ။ အေးစက်နဲ့ငုပ်လျှိုးနေတားစီးအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို: ဘာသောအခါဘယ်မှာနှင့်မည်သို့? neuroscience နှင့် biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2005; 29: 963-976 ။ [PubMed]
Zaghloul Ka, Blanco ဂျာ Weidemann မှန် CT, မြို့ McGill K ကို Jaggi JL, Baltuch GH, Kahana MJ ။ လူ့ substantia nigra အာရုံခံမျှော်လင့်မထားတဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်ဝှက်။ သိပ္ပံ။ 2009; 323: 1496-1499 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zahniser ရော်ဘာ, အ dopamine ပို့ဆောင်ရေး Sorkin အေ Rapid စည်းမျဉ်း: လှုံ့ဆော်စွဲအတွက်အခန်းကဏ္ဍ? Neuropharmacology ။ 2004; 47 ပျော့ပျောင်း 1: 80-91 ။ [PubMed]
Zhang က L ကို, Doyon WM, Clark က JJ, Phillips က PE, Daniely ဂျေအေ။ လုပ်သူများနှင့် dorsal နှင့် ventral striatum အတွက် phasic dopamine ဂီယာ၏ထိန်းချုပ်မှု။ မော်လီကျူးဆေးဝါးဗေဒ။ 2009; 76: 396-404 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zink CF, Pagnoni, G, မာတင် ME, Dhamala M က, Bern GS ။ အဓိက nonrewarding လှုံ့ဆော်မှုမှလူ့ striatal တုံ့ပြန်မှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2003; 23: 8092-8097 ။ [PubMed]
Zweifel LS, Argilli အီး, Bonci တစ်ဦးက, Palmiter RD ။ plasticity နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများအတွက် dopamine အာရုံခံအတွက် NMDA receptors ၏အခန်းက္ပ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59: 486-496 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zweifel LS, က Parker JG, Lobb CJ, မိုးတစ်ဦးက, အမှတ်တရ VZ, Fadok JP, Darvas M ကကင်မ် MJ, Mizumori SJ, Paladini, CA, et al ။ dopamine အာရုံခံခြင်းဖြင့် NMDAR-မှီခိုပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်၏နှောင့်အယှက် phasic dopamine-မှီခိုအပြုအမူများရွေးချယ်အကဲဖြတ်ပေးစွမ်းသည်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2009; 106: 7281-7288 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]